၈၈၈၈အစီအစဉ်(ကနေဒါမှမိတ်ဆွေများပူးပေါင်းကြပါ)တိုရန်တို Dear Friends of Burma:)OttawaAug. 8, 2008 is the 20th Anniversary of Burmese Democratic Uprising. In order to commemorate this important occasion, the Canadian Friends of Burma is planningaseries of events and demonstration on Aug.7 and 8, 2008.Burmese activists and Burma supporters will join inademonstration to be held in front of the Chinese Embassy in Ottawa on Aug.7 at noon. The Canadian Friends of Burma is working with Canada-Tibetan Committee and other organizations to coordinate this action. Please join with us at the Chinese Embassy on Aug.7at noon.On Aug. 8, the Canadian Friends of Burma will hold both outdoor and indoor events in Ottawa. The first event will start at 5pm on Aug. 8 at the Human Rights Monument. We will have some live music and speeches, along with colourful banners, posters and flags (fighting peacocks, the symbol of Burmese democratic movement and Tibetan flags).At 7pm, we will hold an official commemoration in the Ottawa City Council Chamber, with speeches, slideshow and video documentary on 8888 uprising. “Olympic Games: Burma in Chain” video presentation will be also screened.The Canadian Friend of Burma is also in the process of producingamusic album entitled “Burma Hands off” and will be available during the 20th Anniversary of this uprising.The most exciting part of all would be the proclamation of “Burma Day” by Ottawa City on Aug. 8. We are working on it and hoping that the Ottawa City Mayor will proclaim it.Therefore, I earnestly invite you to join in the following events:1) Aug.7 demo at Chinese Embassy,2) Aug. 8 at noon, outdoor event at Human Rights Monument, and3) Aug.8 indoor event at the Ottawa City Hall.Please don’t forget to confirm your attendance.Free Burma!8888 Organizing CommitteeCanadian Friends of BurmaThe Canadian Friends of Burma (CFOB) is federally incorporated, national non-governmental organization working for democracy and human rights in Burma since 1991. Contact: Suite 206, 145 Spruce St., Ottawa, K1R 6P1; Tel: 613.237.8056; Email: cfob@cfob.org; Web: www.cfob.org
ရဲဘော်ဖိုးသံချောင်း နအဖရဲ့လမ်းပြမြေပုံဟာ (၇) ချက်လို့ ဆိုပေမယ့် ရေးမထားတဲ့ အချက်တချက်ရှိနေတာကို သတိ ထားမိကြသလား မသိပါ။ အဲဒါက တခြားမဟုတ်ပါ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ဇီဝိန်ချုပ်စေ ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ လက်ရာမပေါ်ဘဲ ဇီဝိန်ချုပ်စေရေး ဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲက “နိုင်ငံရေးပါတီများ” ဆိုတဲ့ အခန်းမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို အချိန်မရွေး အရေးယူ ဖျက်သိမ်းနိုင်အောင် အချက်အလက်တွေ ဖန်တီးထားပါတယ်။ အဲဒီမှာပါတဲ့ အင်မတန်ေ၀၀ါးတဲ့ စာပိုဒ်တွေက နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို တောက်လျှောက် ခြိမ်းခြောက်နေမှာ မလွဲ ပါဘူး။ ဥပမာပြရရင် “စည်းကမ်းပြည့်ဝသော ပါတီစုံဒီမိုကရေစီကို လက်ခံကျင့်သုံးရမည်” ဆိုတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်က နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာ နိုင်ငံရေးပါတီများရယ်လို့ တခန်းပါနေတာကိုက အတော့်ကို ဆန်းနေတာပါ။ နောက်ပြီး အဲဒီအခန်းမှာပဲ နိုင်ငံရေးပါတီတွေဟာ “(က) လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးခွင့်ရှိသည်။ (ခ) ရွေးကောက်ပွဲများတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရှိသည်” လို့ ရေးထားပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတရပ်ဟာ ဒါပဲလုပ်နိုင်သလားလို့ မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။ကိုယ်ယုံတာကို ဟောပြောဝါဒဖြန့်ခွင့် မရှိဘူးလား။ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ် ထုတ်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူးလား။ လှည့်လည်ဆန္ဒပြဖို့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားခွင့် မရှိဘူးလား။ မေးစရာတွေ အများကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ နအဖ လိုလားတဲ့ ပါတီအဖွဲ့အစည်းဆိုတာ တစညလို “စစ်သားကဲ့သို့ စည်းကမ်းရှိ၍ စစ်သားကဲ့သို့ နာခံ” တဲ့ ပါတီမျိုးသာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် လုပ်နေတာတွေဟာ သူတို့ ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေနဲ့ မညီညွတ်ဘူးလို့ အချိန်မရွေး အပြစ်ရှာနိုင်တယ်ဆိုတာ မေ့လို့မဖြစ်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တားဆီးပိတ် ပင်ဖို့ တိုက်ရိုက်ရည်ရွယ်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုတဲ့ အခန်းလိုဟာကတော့ ပြောနေစရာတောင် မလိုပါဘူး။ ကလေးဆန်လိုက်လေလို့သာ မှတ်ချက်ချရမယ့်ဟာမျိုးပါ။တလောကတော့ နအဖဟာ ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေ ပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ရမယ်လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က မှတ်ပုံတင်ရာမှာ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းတွေအကြောင်း ဘာမှမပြောပါဘူး။ အရင်လိုပဲ မှတ်ပုံတင်တဲ့ပါတီဟာ သူတို့ရဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ရမယ်၊ မ၀င်ရင် မှတ်ပုံတင် ခွင့် မပေးဘူးဆိုရင် ဒီချုပ်ဟာ ချောက်ကျတော့မှာပါ။ ဒီထုတ်ပြန်ချက်ဟာ ဒီချုပ်ကို တိုက်ရိုက် ဦးတည်တာပဲလို့ဆိုရင် မမှားဘူး ထင်ပါတယ်။ သူတို့ လက်ညှိုးညွှန်ရာ ရေဖြစ်ရတဲ့ “အမျိုးသား ညီလာခံ” မှာ ဒီချုပ်ကို ပြန်ဝင်ခိုင်းလို့ မရတဲ့နောက်မှာ သူတို့အမိန့်ပေးသမျှ ခေါင်းညိတ်ရမယ့် လွှတ်တော်ထဲကို ၀င်ဖို့ ထောင်ခြောက်ဆင်တာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အင်မတန်မှ မြင်သာပါတယ်။ ဒီချုပ်ကို ရှေ့တိုးလည်း လှည်းတုတ်၊ နောက်ဆုတ်လည်း ထမ်းပိုးဖြစ်အောင် လုပ်ထားတာပါပဲ။ပြောရရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးရဲ့ အသီးအပွင့်တခု ဖြစ်ပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ မပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပေါ်မလာ နိုင်ပါဘူး။ လက်ရှိအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တွေလည်း နိုင်ငံရေး နယ်ပယ်ရဲ့ ရှေ့တန်းကို ရောက်လာ ချင်မှ ရောက်လာမှာပါ။ အခု သေချာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့ အရေးပါတဲ့ အောင်ပွင့်-အမွေဆိုလို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တခုသာ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် နအဖ ဘက်က ပြောရရင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ချေမှုန်းလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင် ရှစ်လေးလုံးရဲ့ အမွေနဲ့ အစဉ်အလာတွေကို တစမကျန် ဖျက်သိမ်းလိုက်နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့စစ်အုပ်စု အဆက်ဆက်အတွက် လက်စားချေလိုက်နိုင်ရာကျသလို သူတို့ရှေ့ရေးအတွက် အကြီးမားဆုံး အနှောင့်အယှက် အတားအဆီးကိုလည်း ဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တဆက်တည်းမှာ နအဖဟာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့ ဘေးထွက်ပစ္စည်းလို့ဆိုရမယ့် ငြိမ်းအဖွဲ့ တွေကို ဖျက်သိမ်းတာလည်း ဆက်လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်။ ရှေ့နဲ့ နောက်ပဲကွာမှာပါ။ ဒီနေရာမှာလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး လက်သယ်မပေါ်ဘဲ ဘ၀ပြောင်းအောင် လုပ်မှာ သေချာပါတယ်။စစ်အစိုးရဟာ စစ်တိုက်သလိုပဲ ရန်သူကို အချိန်ဆွဲပြီး ပြုန်းတီးစေတဲ့နောက် ကိုယ့်ဘက်က ပိုင် လောက်ပြီဆိုတော့မှ ရန်သူကို အပြတ်ချေမှုန်းတာ လုပ်မလို့ ပြင်ဆင်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်း ပြောရရင် သူများကို ထိပ်တိုက်မတွေ့ နဲ့လို့ပြောပြီး နအဖက သူ့ ဆန့်ကျင်ဘက်မှန်သမျှကို ထိပ်တိုက်လိုက်တွေ့၊ စိမ်ခေါ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ ဗမာပြည် နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲရဲ့ ဗဟိုချက်ဟာ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံရဲ့အမွေ၊ အကြွင်းအကျန် တွေကို အမြစ်ဖြုတ်ဖို့ လုပ်နေတာနဲ့ အဲဒါကို ပြန်တွန်းလှန်မှုတို့ရဲ့ တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ပွဲဟာ နအဖအတွက်ရော၊ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ဆန့်ကျင်နေသူတွေအတွက်ပါ အင်မတန်မှ အရေးပါပါတယ်။ ဘယ်သူ့ဘက်ကမှ အရှုံးမခံနိုင်ပါဘူး။ ရှုံးလိုက်ရင် သမိုင်းနဲ့ချီတဲ့ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ အရင် ရရှိထားတာတွေ အကုန်ပြုတ်သွားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီချုပ်ဘက်က ရှုံးတာဟာ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ဘက်တော်သားတွေဘက်က ရှုံးတာဖြစ်မှာမို့ ဒီပဋိပက္ခမှာ ဒီချုပ်နဲ့အတူ တသားတည်း ရပ်တည်ကြဖို့လိုပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပြောဖို့လိုတာက ဒီချုပ် အတွက်ဆိုရင်လည်း အခုအချိန်မှာ ပြည်တွင်းက ပြည်သူလူထုမှတပါး တခြားဘယ်သူ့ကိုမှ မျှော်လင့်အားထားလို့မဖြစ်ပါဘူး။ ကျန်တာ အားလုံးဟာ စိတ်ကူးယဉ်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။နအဖဟာ သူတို့လိုချင်တာကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတာကို သူများတွေ မသိ သိအောင် ဖော်ပြနေတာကို အားလုံးသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့မောက်မာမှု၊ သူတို့ရဲ့ရက်စက်မှုနဲ့ ခြိမ်းခြောက် အကြပ်ကိုင်ရင် ရလိမ့်မယ်လို့ တွက်ထားကြပါတယ်။ တဘက်မှာလည်း သူတို့ဟာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတဲ့ ဖဲချပ်ကို ချကစားလိုက်ခြင်းအားဖြင့် အတိုက်အခံတွေထဲမှာ၊ ငြိမ်းအဖွဲ့တွေ ထဲမှာ၊ နောက်ပြီး တိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ အက်ကြောင်းတွေ ပေါ်စေချင်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒီလိုကစားလိုက်ရင် အင်အားနည်းသူတွေ၊ ရပ်တည်ချက် မခိုင်မာသူတွေ စိတ်လှုပ်ရှားတတ်တယ် ဆိုတာကို သူတို့သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့လာမယ့် ကာလတခုမှာ ဒီလိုအချင်းအရာတွေ တော် တော်များများကို နအဖက ဖန်တီးလာမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အခုအချိန်မှာ အချင်းချင်း သွေးကွဲအောင် လုပ်တာမှန်သမျှဟာ နအဖအကြိုက် လုပ်တယ်လို့ ပြောရပါမယ်။တကယ်ကျတော့ နအဖရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံရော၊ ရွေးကောက်ပွဲရောဟာ ပြည်သူတွေအတွက် ဘာမှ အကျိုး မရှိရုံမက အဲဒါတွေ အောင်မြင်သွားလို့လည်း ပြည်သူတွေရဲ့ နအဖဆန့်ကျင်ရေး စိတ်ဓာတ်ကို လျော့ နည်းစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အာဏာရှင်တွေ ဖန်တီးထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာတွေဟာ အဲဒီ အာဏာရှင်တွေ နန်းကျရင် ပျောက်သွားတတ်တာပါပဲ။ ဗမာပြည်သမိုင်းမှာ ပေါ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဖွဲ့စည်း ပုံအခြေခံဥပဒေ နှစ်ခုစလုံးဟာ အာဏာသိမ်းသူတွေကြောင့် ရုတ်ချည်းပျောက်ကွယ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကို မမေ့သင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ တိုက်ပွဲကာလ ရှည်ကြာနေတာ၊ အခက်အခဲနဲ့ ပေးဆပ်ရမှုတွေ များလွန်းနေတာတို့ကို စိတ်မရှည်၊ တင်းမခံနိုင်သူတွေကိုတော့ ဒီနအဖရဲ့သဏ္ဍာန် အရ အောင်ပွဲတွေက တွေဝေ၊ တုံ့ဆိုင်းတာတွေ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမယ့် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံနဲ့ ရှစ်လေးလုံး အာဇာနည်တွေအပေါ် သစ္စာရှိသူတွေရဲ့ ပိုင်း ဖြတ်ချက်ကိုတော့ နည်းနည်းမှ နှဲ့နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ။ Summary only...
၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးရွှေအုံး ဦးရွှေအုံးးသည် ရှမ်းအမျိုးသား ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတဦး ဖြစ်သည်။ ယနေ့တိုင် အနာဂတ် မြန်မာနိုင်ငံကို ရှစ်ပြည်ထောင် မူနှင့် ဖွဲ့စည်းရေးအယူအဆကို ကိုင်စွဲထားသူဖြစ်သည်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် အခြားရှမ်းခေါင်းဆောင်များကို စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထောင်ချထားခြင်းသည် ရှစ်ပြည်ထောင်မူကိစ္စ စစ်အစိုးရက မကြိုက်သည့်အတွက် ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးရွှေအုံးက ယူဆသည်။ ဦးရွှေအုံးသည် မကြာခဏ ကိုယ်ပိုင် နိုင်ငံရေးအယူအဆများ ထုတ်လေ့ရှိသည့်အတွက် ရန်ကုန် နိုင်ငံရေးလောကမှာ သဘောထားမတိုက်ဆိုင်မှုများ ကြုံရသူ လည်း ဖြစ်သည်။ အခြေခံဥပဒေတွင် ကြွင်းကျန်အာဏာကို ပြည်နယ်များတွင်ထားရှိရေး၊ တိုင်းရင်းသားများ ခွဲထွက်ရေးမူ စွန့်လွှတ်ရေး အကြံပေးရှစ်မျက်နှာစာတမ်းကို ထုတ်ခဲ့ဘူးသည်။မေး- ဦးရွှေအုံးက ပါတီထောင်မယ်လို့ပြောတယ်။၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့အစီအစဉ် ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ အစီအစဉ် ပြောပါဦးခင်ဗျ။ ဖြေ- ကျနော်ရေးတဲ့စာအုပ် တွေ့မိလား။ ကျနော်ရေးတဲ့စာအုပ်ကတော့ ကြာပါပြီ။ ကျနော် ခင်ဗျားတို့ဆီလည်း ပို့တာပဲ။ ကျနော် မပြိုကွဲနိုင်သော ပြည်ထောင်စုတခုကို တည်ဆောက်ကြ ပါစို့စာအုပ်။ အဲဒီစာအုပ်မှာ ကျနော်ပြောထားတာက မပြိုကွဲနိုင်သော ပြည်ထောင်စုတခုကို တည်ဆောက်ဖို့ဆိုရင် ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တခုကို ဖွဲ့ရမယ်လို့ ကျနော် အဲဒါပြောထားတာ။ကျနော် ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ ပြောမယ်လေ။ ပါတီထောင်ချင်တာက ကျနော်တို့က ပြည်ထောင်စုကို ယုံကြည်တယ်နော်။ ပြည်ထောင်စုဆိုတာလည်း စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုပေါ့။ ရှစ်ပြည်နယ် ပြည်ထောင်စုပဲ ကျနော်ယုံကြည်တယ်။ အဲတော့ ရှစ်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ရမယ်၊ ဒီမိုကရေစီဖြစ်ရမယ်။ အဲဒီရှစ်ပြည်နယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်တဲ့ ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို တည်ထောင်ဖို့ဆိုရင် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေက ဗမာလူများစုတွေကို Confrontation ပုံစံနဲ့ သွားလို့မရဘူး။ ကျနော်တို့ လူမျိုးကြီး ရှစ်မျိုးပေါ့။ လူမျိုးကြီးရှစ်မျိုးကို အခြေခံပြီးတော့ ကျနော်တို့က အကုန်လုံးပေါ့လေ Cooperation ပေါ့လေ။ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုပ်မှရမယ်။ ဒါ ကျနော့်ရဲ့မူ။ အဲတော့ ကျနော်တည်ထောင်မယ့် ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာမှာ ဗမာလည်း ပါရမှာပဲ။ ဗမာမပါဘဲနဲ့ ပြည်ထောင်စုမဖြစ်ဘူး။ အဲတော့ ဗမာအများစုနဲ့ ကျန်တဲ့လူမျိုးတွေ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ပါတီတခုဖွဲ့မယ်ဆိုပြီး ဒါက ကျနော့်ရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပါ။မေး- အဲဒီပါတီဖွဲ့ဖို့အတွက်ကို ဦးရွှေအုံးကို ထောက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊ ပါတီဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ဘယ်လောက် လောက်ရှိလဲခင်ဗျ။ ဖြေ- ထောက်ခံမယ့်လူတွေရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ အကုန်လုံးစည်းရုံးထားပြီးသားလေ။မေး- အဲတော့ ပါတီကို ဘယ်တော့လောက်ထောင်ဖြစ်မလဲခင်ဗျ။ ဖြေ- အဲဒါတော့ ကျနော်တို့ဟိုဟာလေ ပါတီထောင်ခွင့်ပြုတဲ့အမိန့်ဥပဒေ အဲဒါစောင့်နေတာပဲ။မေး- ဦးရွှေအုံးက ဒီပါတီထောင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရှစ်ပြည်ထောင်မူကို ဦးရွှေအုံးက လက်ခံထားတယ်လို့ပြောတယ်။ ရှစ်ပြည်ထောင်မူကို အခုထိ ယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့။ ဖြေ- ဒါပေါ့။မေး- ဒါပေမယ့်လို့ အဲဒီရှစ်ပြည်ထောင်မူကြောင့်ပဲ ခွန်ထွန်းဦးတို့အဖွဲ အခု ထောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျသွားတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်တို့အဖွဲ့လည်း အခု ထောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကျသွားတယ်။ အဲဒါ ရှစ်ပြည်ထောင်မူကြောင့်ပဲဆိုတာကို ဦးရွှေအုံး သိရက်သားနဲ့ ရှစ်ပြည်ထောင်မူကို အခြေခံပြီး ဒီပါတီကိုဖွဲ့မယ်ဆိုရင် ဦးရွှေအုံးကိုိ စစ်အစိုးရက ရန်သူလို့ သဘောမထားနိုင်ဘူးလားခင်ဗျ။ဖြေ- ကျနော့်ကိုလည်း ခြေချုပ် တနှစ်ချထားတာပဲလေ။ နံပါတ် (၁) ကျနော်က ယုံကြည်တယ်၊ ယုံကြည်တယ်ဆိုတာက နံပါတ် (၁) နော်။ အဲ ဖြစ်နိုင်တာ မဖြစ်နိုင်တာကတော့ နံပါတ် (၂) ပေါ့။ အဲဒီတော့ သူတို့ပါတီထောင်ခွင့်ပြုတဲ့ ဥပဒေထုတ်လာရင် ဘယ်လိုဥပဒေမျိုးလာမယ်၊ ဘယ်လိုဆီ ကနေ လာမယ်ဆိုတာလည်း မသိဘူးလေ။ ကျနော်ကတော့ ကျနော်တို့လိုချင်တဲ့ ရည်မှန်းချက်ကို ထားရမယ်။ မေး- လက်ရှိအခြေအနေကို ကြည့်တဲ့အခါ နေပြည်တော်မှာ အခု မကြာခင် ၂၀၁၀ ရွေးကောက် ပွဲက ထွက်ပေါ်လာမယ့် အရပ်သားအစိုးရကို ခေါင်းဆောင်မယ့် သမ္မတနဲ့ ဒု-သမ္မတ အိမ်တွေ ဘာတွေတောင် ဆောက်ပြီးပြီဆိုတာ ကျနော်တို့ စုံစမ်းသိရပါတယ်။ အဲတော့ သမ္မတနဲ့ ဒု-သမ္မတ အိမ်ဟာ လက်ရှိစစ်အစိုးရနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင် အဲလောက်ထိ သဘောကောင်းပါ့ မလားဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့အတွက် အခု ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်တဲ့အခါမှာ ဦးရွှေအုံး တို့အနေနဲ့ အနိုင်ရနိုင်မလား။ စစ်အစိုးရက သူနိုင်မယ်ဆိုတာ ကြိုတွက်ပြီးတော့ ဘယ်သူ့ကို သမ္မတတင်ရမယ်ဆိုတာတောင် ကြိုသိနေတဲ့သဘောလို့ ယူဆသလား၊ ဘယ်လိုယူဆသလဲခင်ဗျ။ဖြေ- ကျနော်တော့ အဲဒါတွေကို သိပ်ပြီးတော့ စိတ်မ၀င်စားဘူးလေ။ အခုအတည်ပြုထားပြီးတဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ကျနော်က အစကတည်းက ထောက်ခံတာမှမဟုတ်ဘဲ။ အစအဆုံး။ နောက်ဆုံး အချိန်ထိ ကျနော်ကန့်ကွက်နေတာပဲ။ ကန့်ကွက်လို့မရလို့ အတည်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ကျနော်တို့ ဟိုဟာပေါ့၊ ထောက်တော့မထောက်ခံဘူး၊ ဒါပေမယ့် မလွှဲမရှောင်သာတဲ့အနေနဲ့ လက်ခံတယ် အဲဒါပဲ။ လက်ခံတော့ အဲဒါကြီးကို ကျနော်တို့က သိပ်ပြီးတော့ မစဉ်းစားနေတော့ဘူးလေ။ ကျန်တာ ကြိုက်တာမကြိုက်တာ ဒါအပထား။ တကယ်ဖြစ်တာက ဖြစ်လာပြီးပြီ။ ဖြစ်လာပြီးသား ကိစ္စပဲလေ။ အဲဒါကို ကျနော်တို့က လက်ခံပြီးတော့ လုပ်မှာပဲ။ အဲတော့ သူတို့လုပ်တာ ကျနော်တို့က ကြိုက်တာ လည်းရှိတယ်၊ မကြိုက်တာလည်းရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အခုကျနော်လုပ်မယ်ဆိုတာလည်း သူတို့ လက်ခံတာ မခံတာက ဒါသူတို့ အပိုင်းလေ။ ကျနော်ကတော့ ကျနော့်ရည်မှန်းချက် ကျနော့် ဘာသာတရားအရ ကျနော်ကတော့ နိဗ္ဗာန်သွားချင်တာပဲ။ ကျနော်တို့ အခုရောက်နေတာက ငရဲပြည်ရောက်နေတာပဲ။ အဲတော့ နိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ ကျနော်တို့ စွန့်လွှတ်လို့မရဘူးလေ။ အဲတော့ ဘယ်နည်းနဲ့သွားလို့ရမလဲ၊ အဲဒါ ကျနော်တို့ ဒုက္ခခံပြီးတော့ ရှာတော့ရှာရမှာပဲ။ ဒါရမှဖြစ်မယ်ဆိုတာ မျိုးတော့ လုပ်လို့မရဘူးလေ။ အဲဒီဖွင့်ထားတဲ့အပေါက်လေးတွေ ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ထိ တိုးဝင်လို့ရမလဲ အဲဒါပဲ ကြည့်ရမှာပဲလေ။ မေး- အခုလောလောဆယ်မှာ ရှစ်ပြည်ထောင်မူကိုထောက်ခံတဲ့ ပါတီအဖွဲ့အစည်း၊ လူပုဂ္ဂိုလ် ထင်ရှားတဲ့အထဲက ဘယ်သူတွေရှိလဲခင်ဗျ။ဖြေ- အဲဒီရှစ်ပြည်ထောင် ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများအဖွဲ့တွေက ကျနော် ဟိုတုန်းကတည်းက တရားဝင်ထုတ်ပြန်ပြီးသားပဲ ရှစ်ပြည်ထောင်လက်ခံမယ် ဆိုတာက။ မေး- အဲတော့ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားအဖွဲ့က လက်ခံသလားခင်ဗျ။ ဖြေ- အဖွဲ့အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလေ၊ ဟိုတုန်းကအဖွဲ့အနေနဲ့ပဲ။ အခုတော့ သူတို့ထဲဝါရင့်ထဲက ထောက်ခံတဲ့သူ သုံးလေးယောက်လောက်ပါပါတယ်။ အဲတော့ သုံးလေးယောက်နဲ့ စလုပ်သွားမယ်။ လောလောဆယ် ကျနော်တို့ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲနေတယ်။ အခြေခံဥပဒေက ကျနော်တို့ အဖွဲ့ ချုပ်ရဲ့ By-law ပေါ့ ဆွဲနေမယ်။ နောက်ပြီးတော့ သူတို့ဥပဒေထုတ်ထားတာရှိမယ်။ အဲဒီဥပဒေအရ ကျနော်တို့ By-law နဲ့ အန်ဝင်ခွင့်ကျ ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဆက်လုပ်မယ်။ မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ By-law ကို နည်းနည်းပါးပါးပြန်ပြင်ချင်လည်းပြင်မယ်။ ပြင်ပြီးတော့မှ အချိန်ကျပြီ ဆိုတဲ့အခါကျတော့မှ ကျနော်တို့ ဖွဲ့ခွင့်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ၀င်လာမယ့်လူတွေ အများကြီးပါ။ မေး- ဒါဆိုလို့ရှိရင် တခြားရှမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေကရော၊ ဥပမာအားဖြင့် အက်စ်အက်စ်အေ မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ဒါခေါင်းဆောင်ပိုင်းလည်း မရှိတော့ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင် လည်း ထောင်ကျနေတယ်။ အဲဒါဆိုတော့ အက်စ်အက်စ်အေမြောက်ပိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ သဘောထား ကရော ဦးရွှေအုံးတို့နဲ့ ဘယ်လိုနေလဲခင်ဗျ။ဖြေ- တခြားအဖွဲ့တွေတော့ ကျနော်မသိဘူးလေ။ အခုလောလောဆယ် ကျနော်သိတာကတော့ ဦးသုဝေနော်။ ဦးသုဝေကတော့ ဒီမိုကရေစီပါတီကို ပြန်ထောင်ချင်တယ် ဘာလိုလို အဲဒါပြောနေ တယ်။ ကျနော်နဲ့သူနဲ့ကတော့ ညှိတော့ညှိနေတာပဲလေ။ အဲတော့ မပြတ်သေးဘူးလေ။ မေး- ဆိုတော့ အခုလောလောဆယ်မှာ ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီအဖွဲချုပ်ကို ထောက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က (၁၀) ယောက်တောင်မပြည့်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့၊ အဲလိုလားခင်ဗျ။ ဖြေ- ကျနော်တို့ကို ထောက်ခံမယ့်လူတွေက ကျနော်ထင်တယ် အများကြီးရှိတယ်။ ဟိုဟာပေါ့နော် လက်ရှိ အန်အယ်လ်ဒီထဲမှာကိုက အန်အယ်လ်ဒီကထွက်သွားတဲ့လူတွေလည်း ရှိတယ်။ ထုတ်ထား တာလည်းရှိတယ်။ ဒီလူတွေက အများကြီးထောက်ခံတယ်။ အဲဒီအထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာလည်း လူငယ်ပိုင်း၊ လူလတ်ပိုင်း အဲဒါ ရှိတယ်။ ကျနော်ထင်တယ် တ၀က်နီးပါးလောက်က ကျနော်တို့ကို ထောက်ခံတယ်။ နောက်ဆုံး ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးတင်ဦးတို့ ရှစ်ပြည်နယ်ကို ထောက်ခံတယ်။ မေး- ဦးရွှေအုံးတို့က အခု ရှစ်ပြည်ထောင်မူကို သွားချင်တယ်၊ ဒီ နအဖစစ်အစိုးရက ချမှတ်ထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေမှာက ဒီရှစ်ပြည်ထောင်စနစ်ကို သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ အဲဒီ နှစ်ခု ဟာ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ထိပ်တိုက်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား၊ စစ်အစိုးရက ခွင့်ပြုပါ့မလား၊ ဦးရွှေအုံးရဲ့ပါတီ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မယ်လို့ ဘယ်လိုလုပ်ယူဆလဲခင်ဗျ။ဖြေ- ကျနော်ကတော့ သူတို့ဥပဒေကို စောင့်ကြည့်မယ်လေ။ ဥပဒေက ဘယ်လိုထွက်လာမယ်မှန်း မသိဘူးလေ။ အဲဒီ ထွက်လာတဲ့ဥပဒေအပေါ် မူတည်ပြီး ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်အထိ ၀င်လို့ရ မလဲ၊ အဲလိုဝင်လို့ရသလောက်ပဲ ကျနော်စဉ်းစားမှာပဲ။မေး- ပါတီထောင်တဲ့အခါမှာ ရည်ရွယ်ချက်က ရှစ်ပြည်ထောင်မူကို လက်ကိုင်ထားတဲ့အတွက် အဲဒီရှစ်ပြည်ထောင်မူဟာ လက်ရှိစစ်အစိုးရရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံမူတွေနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက် ဦးရွှေအုံးရဲ့ပါတီဟာ အန္တရာယ်မများနိုင်ဘူးလားခင်ဗျ။ဖြေ- စစ်မှန်သောပြည်ထောင်စုပဲ အဲဒီစကားလုံးပဲ ကျနော်သုံးတယ်။ စစ်မှန်သောဆိုတာနဲ့ ရှစ်ပြည်ထောင်နဲ့က နည်းနည်းတော့ကွာတာပေါ့။ ကျနော်က ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဝင်လို့ရမလဲ ၀င်ရမယ့်အပေါက်ကိုတော့ ကျနော်က စဉ်းစားနေတာပဲ။ မဖြစ်နိုင်တာတော့ မလုပ်ဘူးဗျာ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်မလဲ အဲဒါကို ကျနော် Adaptation တော့ လုပ်ရမှာပေါ့။မေး- တခြားနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုရှိပါလဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိကြတဲ့ နိုင်ငံရေးအသိုင်းဝန်းရဲ့အနေအထား ဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျ။ဖြေ- နိုင်ငံရေးပါတီတွေက ဒီနေ့ထိ ဘယ်သူမှ မပြတ်သားပါဘူး။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသား ပါတီတွေအားလုံးလိုလိုကတော့ ကျနော်တို့ဘက်ကရှိတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ၀ါရင့်က ကျနော်ထင်တယ် တကယ်လုပ်ဖြစ်ရင် တ၀က်ကျော်ကျော်လောက်ရမယ်။ ဒါ ကျနော် တယောက်ချင်းစီကို စည်းရုံးပြီးသား။ နောက်ပြီးတော့ အန်အယ်လ်ဒီက ထွက်ထားတဲ့လူ၊ ထုတ်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။ အဲဒီလူတွေ ရတယ်။ နောက် တသီးပုဂ္ဂလတွေ ကျန်တာ အများကြီးပေါ့။ မေး- နောက်တခုကျနော်တို့ကြားတာက အခုဒီလောလောဆယ်မှာ စစ်အစိုးရထောက်လှမ်းရေး ကနေပြီးတော့ အမတ်တွေကို လိုက်ပြီး တီးခေါက်နေတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မှာလား ဆိုပြီးတော့ နယ်တွေဘက်မှာ ဥပမာအားဖြင့် ပဲခူးက ဦးမြတ်လှတို့ပါတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေ ဖြစ်နေ တယ်။ ဦးရွှေအုံးကြားမိသေးလား၊ ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်လို့ ယူဆလဲခင်ဗျား။ ဖြေ- အဲဒါတော့ ကျနော်မသိဘူးဗျ။ မကြားမိဘူး။ မေး- အခု စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ စစ်တပ်ကဏ္ဍကို ကြီးကြီးမားမားချုပ်ကိုင်ထားတဲ့အတွက် ဦးရွှေအုံးတို့ဝင်လည်းပဲ လွှတ်တော်မှာ ဘယ်လောက်ထိ ပြောရေးဆိုခွင့်ရလိမ့်မယ်လို့ မျှော်မှန်းထားလဲခင်ဗျ။ဖြေ- သိပ်တော့ မျှော်မှန်းချက် အရှည်ကြီးတော့ မထားဘူးလေ။ လောလောဆယ်တော့ ကျနော်တို့ ရပ်တည်ခွင့်ရနိုင်တဲ့အထိတော့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ် အဲဒါတော့ ကျနော်လုပ်ကြည့်မယ်။ ရပ်တည်ခွင့်ရပြီးရင်တော့ တဖြည်းဖြည်း လုပ်ငန်းကို အခြေအနေအရ ကြည့်လုပ်ရမှာပေါ့။ မေး- ခွန်ထွန်းဦးအဖွဲ့က ဦးရွှေအုံးတို့ထဲ ပါတယ်ဆိုတာက ခွန်ထွန်းဦးတို့ရဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးရွှေအုံးပါတီထဲကို ပူးပေါင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့သဘောလား။ဖြေ- ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့အဖွဲ့ကပေါ့။ အဲဒီထဲမှာ အဖမ်းမခံရဘဲနဲ့ ကျန်နေတဲ့လူတချို့ရှိတယ်လေ။ အဲဒီလူတွေနဲ့တော့ ကျနော်တို့ ဆွေးနွေးနေတာပဲ။ မေး- ဆွေးနွေးနေတော့ သူတို့ သဘောတူပြီလား။ဖြေ- သဘောတူပါတယ်။မေး- ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကိုဖျက်ပြီးတော့ ဦးရွှေအုံးတို့နဲ့ မဟာမိတ်လုပ်မယ် ဆိုတဲ့သဘောလား။ဖြေ- အတိအကျတော့ ဒါ ဘာမှပြောလို့မရဘူး။ အတိအကျဆိုတာ သူတို့ ဥပဒေဘယ်တော့ ထွက်လာမလဲ၊ အဲဒီဥပဒေကို ကျနော်တို့ ဘယ်လောက်ဝင်လုပ်ရမယ်။ ၀င်လုပ်ရရင်တော့ အကုန်လုံးပါမယ် အဲဒီမှာ။ အဲတော့ ကျနော်တို့က အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းတောင် ဆွဲထားပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ ဥပဒေထွက်လာမှာကိုလဲ ကြည့်ဦးမယ်လေ။ အဲဒီဥပဒေနဲ့ သဟဇတဖြစ်မယ့် အခြေခံဥပဒေကို ပြန်ပြီးတော့ ပြင်ရမှာပဲ။ ရတယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးပါလာမှာပဲ။မေး- အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းဆိုတာ ဦးရွှေအုံး ဆွဲနေတာလား၊ ဘာအတွက်လဲခင်ဗျ။ဖြေ- ဟုတ်တယ်။ အခြေခံဥပဒေမူကြမ်းဆိုတာက ကျနော်တို့ ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံပေါ့။မေး- ဦးရွှေအုံးအနေနဲ့ လက်ရှိပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ထောင်မယ့်ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တော့ တပြည်လုံးက ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေကို ဘာများပြောချင်သေးလဲခင်ဗျ။ဖြေ- အားလုံးကသဘောတူပါတယ်။ ခွန်ထွန်းဦးနဲ့ ကျနော်တို့အဖွဲ့ပဲရှိတာပဲ။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေက အများကြီးရှိတာပဲ မလုပ်ရသေးလို့ ထိုင်နေကြတာ၊ လုပ်လိုက်ရင်တော့ အကုန်လုံးက သဘော တူကြမှာပါ။ မေး- ရှမ်းပြည်က ပြည်သူတွေကို ဘာပြောချင်သေးလဲ ဦးရွှေအုံးအနေနဲ့။ ဦးရွှေအုံးပါတီကို ထောက်ခံဖို့ ပြောချင်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဘာပြောချင်လည်းခင်ဗျ။ဖြေ- ကျနော်တို့ပါတီထောက်ခံဖို့ပေါ့။ ကျနော်တို့ပါတီ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ မူဝါဒဆိုတာက ကျနော်တို့ ၄၆ ခု ၄၇ ခုကတည်းက စလာတဲ့မူပဲလေ။ အဲဒါ ကျနော်တို့ ဒါ ခပ်လွယ်လွယ်နဲ့တော့ မဖျက်နိုင်ဘူး။ အဲဒါကို အကုန်လုံးလည်း သဘောတူတယ်။ နှစ်ပေါင်း (၇၀) လောက်မဖျက်ဘဲနေတယ်။ ကျနော် တို့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မဖျက်ဘူး။ ကျနော်တို့ပြည်ထောင်စုပါတီကို စဖွဲ့ကတည်းက အဲဒီ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဖွဲ့တာ။ အဲဒါ ကျနော်တို့တော့ ဒါတော့ မဖျက်နိုင်ဘူး။ ဖြစ်တာမဖြစ်တာကတော့ ထားလေ။ Summary only...
ရဲရင့်မြင့်မောင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ရောက်အောင် လူမှောင်ခိုကုန်ကူးသည့် လုပ်ငန်းအများအပြားတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများမှတဆင့် အမေရိကန်နိုင်ငံရောက်အောင် လူကုန်ကူးသည့် လုပ်ငန်းမှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကစ၍ ခေတ်စားလာသည်။အမေရိကန်နိုင်ငံ သွားရောက်အလုပ်လုပ်လိုသူ မြန်မာများအဖို့ အမေရိကန် ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာရရန် သာမန်အားဖြင့် ခဲယဉ်းသည်။ ထို့ကြောင့် အမေရိကန်သွားလိုသူ ပြည်တွင်း ပြည်ပ မြန်မာအချို့ကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ လူကုန်ကူးပြီး ပို့သည့်နည်းလမ်း အသုံးချပြီး အမေရိ ကန် ၀င်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားသည့်နည်းများ သုံးလာကြသည်။ဥပမာ-ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံရေးနှင့် မပတ်သက်သူတဦးက အမေရိကန်နိုင်ငံ သွားလိုလျှင် ပွဲစားအမျိုး မျိုးမှတဆင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းတခုခုသို့ ဒုက္ခသည်အတုလုပ်ပြီး တတိယနိုင်ငံ တခုခုရောက်အောင် လူကုန်ကူးကြခြင်းဖြစ်သည်။ ပွဲစားမှာလည်း အမျိုးမျိုးရှိပြီး ရန်ကုန်မှ နယ်စပ်ရောက်အောင် ပို့ပေးသည့်အဆင့် ပွဲစားများတွင်ပင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်နှင့် ရောက်နေပြီး နောက်ပိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်လာသူ မြန်မာအချို့ပင် ပါဝင်သည်ဟု ခေတ်ပြိုင်က စုံစမ်းသိရသည်။ အဆိုပါ အမေရိကန်နိုင်ငံသား မြန်မာ ပွဲစားများကို ရန်ကုန်ကို အလည်အပတ် ပြန်စဉ်ကာလအတွင်း အမေရိကန် သွားလိုသူများကို အခကြေးငွေယူပြီး နယ်စပ်ပွဲစားများကတဆင့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းတခုခုသို့ လူမှောင်ခိုကုန်ကူးခြင်းဖြစ်သည်။ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ မြန်မာဒုက္ခသည်များ အမေရိကန်အပါအ၀င် တတိယ နိုင်ငံများသို့ ထွက်ခွာသည့်လမ်းကြောင်းမှာ ယခုအခါ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများ၏ စားကျက်ခွင်တခု အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပြီဟု နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းမှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဦးမြင့်အောင်က ပြောသည်။၎င်းက “ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေကတော့ စိတ်ကြိုက် လုပ်ချင်တာရတဲ့ ခွင်ဖြစ်သွားတာ (၂) နှစ် ကျော်သွားပြီ။ ကျနော်တို့စခန်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်ရထားတဲ့ မြန်မာတယောက် ရန်ကုန်မှာ ကျန်နေတဲ့ သူ့မိသားစုကိုခေါ်ပြီး ဘတ်ငွေ (၃) သိန်းလောက် အကုန်ခံပြီး ဒုက္ခသည် စခန်းက လူကြီးတွေ ရပ်ကွက်မှူးတွေနဲ့ ညှိလိုက်တာ အခု မိသားစုလိုက်ကို အမေရိကန်ရောက် ကုန်ပြီ။ ဒါက စခန်းအချို့မှာဖြစ်နေတာ၊ အထူးသဖြင့် မဲဆောက်နဲ့နီးတဲ့ စခန်းတွေမှာဖြစ်တယ်” ဟုပြောသည်။ရန်ကုန်အပါအ၀င် ဒေသအသီးသီးက မြန်မာများမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းများမှတဆင့် အမေရိကန် ရောက်ရှိရေးအတွက် ထောင်မြင်ရာစွန့်ကာ မဲဆောက်နှင့် ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ အသိအကျွမ်း ဆွေမျိုးများ၊ ကြားပွဲစားများနှင့် ဆက်သွယ်ကာ ငွေထုပ်ပိုက်လာသူများ အဆင်ပြေသူများ ရှိသကဲ့သို့ အဆင်မပြေဘဲ အလိမ်ခံရကာ ဖွတ်မရ ဓားမဆုံး ဘ၀ပျက်၍ မဲဆောက်တွင် သောင်တင် နေသူများလည်း အများအပြားရှိသည်။ဒုက္ခသည်ပွဲစားများသည် ရန်ကုန်၊ မော်လမြိုင်၊ ဘားအံ ကဲ့သို့မြို့ကြီးတို့မှ လူများကိုဆက်သွယ်ပြီး တဦးချင်းအလိုက် ဘတ်ငွေ (၅) သောင်း (မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၇ သိန်းခန့်)၊ မိသားစုအလိုက် ဘတ်ငွေ (၁) သိန်း (မြန်မာငွေ ၃၅ သိန်းခန့်) အထိ ပွဲခယူကာ လူမှောင်ခိုကူးလျက်ရှိသည်။ မဲဆောက်တွင် နေထိုင်ပြီး ထိုင်း ဧည့်နိုင်ငံသားလက်မှတ် ရရှိထားသည့် မြန်မာမိသားစု (၅) ဦးဆိုလျှင် ဘတ်ငွေ (၂) သိန်းခွဲဖြင့် စခန်းဝင်ရန် မလိုဘဲ အမေရိကန်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ငွေအလုံးအရင်းနှင့် ပေးနိုင်သူများ ဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်း လာရောက်နေထိုင်ရန်မလိုဘဲ ကုလ သမဂ္ဂမှ လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်နေ့ရက်၊ ဆေးစစ်မည့်နေ့၊ လေယာဉ်စီးသင်တန်းနှင့် အခြားဗဟုသုတ ဆိုင်ရာ သင်တန်းတက်ရမည့်နေ့များကို စခန်းအတွင်းရှိ ပွဲစားက ဖုန်းဖြင့်ဆက်သွယ်လာပါက မဲဆောက်မှ ကားငှား၍ သွားရုံသာဖြစ်သည်။အချို့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုလျှင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် နိုင်ငံခြားမထွက်ကြသော် လည်း ပြည်တွင်းရှိ ၎င်းတို့ဆွေမျိုးသားချင်းများ၊ အသိအကျွမ်းများအား နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များ ပြုလုပ်ကာ ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံလေဆိပ်မှ ဘန်ကောက်သုဝဏ္ဏဘူမိလေဆိပ်သို့ လာစေသည်။ ထိုမှတဆင့် နယ်စပ်ဒုက္ခသည် စခန်းများသို့ သွားကာ တတိယနိုင်ငံတခုခု ရောက်ရှိရေးအတွက် ကြိုးစားကြသူ အများအပြားရှိသကဲ့သို့ ဒေါနတောင်တန်းကို ကျော်ပြီး နယ်စပ်မြ၀တီမြို့မှတဆင့် လာရောက်သူများလည်းရှိသည်။အမေရိကန်ရောက်ရှိသွားသူ အမျိုးသမီးတဦးက “ရန်ကုန်ကနေ လေယာဉ်နဲ့ထွက်တယ်။ ဒေါ်လာ (၂) ထောင်ယူလာတယ်။ ဘန်ကောက်မှာ လာကြိုတဲ့ အသိတွေနဲ့ မဲဆောက်သွားပြီး ပွဲစားနဲ့ တွေ့တယ်။ စခန်းထဲ ၀င်ရဖို့ စောင့်ရတာ (၂) လကျော်ကြာတယ်။ စာအုပ်က ဘန်ကောက်အ၀င် တလနေထိုင်ခွင့်ရတယ်။ ရက်ပြည့်တာနဲ့ မဲဆောက်မှာရှိတဲ့ ထိုင်းလ၀ကရုံးမှာ တလဘတ်ငွေ (၂,၈၀၀) နှုန်းနဲ့ (၂) လ ထပ်ရတယ်။ အဲဒါပြီးရင် စာအုပ်သေပြီ။ ကန့်ထဲကိုဝင်ဖို့ စာအုပ်မသေခင် ပြီးအောင်စီစဉ်ရတယ်။ စခန်းထဲမှာနေဖို့ အိမ်ဝယ်တဲ့ကိစ္စ လူဟောင်းစာရင်းထဲ လူစားထိုးတဲ့ ကိစ္စတွေကို ပွဲစားကပဲ အားလုံးစီစဉ်ပေးတယ်။ ဘတ်ငွေ (၁) သိန်းလောက်ကုန်တယ်။ လိုတဲ့ငွေကို အိမ်က အောက်လမ်းကနေ မဲဆောက်ကို ပို့ပေးတယ်။ ငွေလွှဲတဲ့ဆိုင်က ဒုက္ခသည်စခန်းအထိ ငွေလာပို့ပေးတယ်" ဟု ပြောသည်။ဒုက္ခသည်စခန်း၌ အ၀င်အထွက်ရှိသည့် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး ညွန့်ပေါင်းအသင်းမှ အမည်မဖော်လိုသူတဦးက “ဒီကိစ္စ ပြောရရင်တော့ စခန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အန်ဂျီအိုတွေ၊ ယူအန်ကလူတွေ ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က စခန်းတိုင်းမှာ ဒုက္ခသည်တွေကို မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ လက်ဆယ်ချောင်း စလုံး လက်ဗွေနှိပ်ရတယ်။ မှန်ပြားပေါ်မှာ လက်ဗွေနှိပ်ရပြီး ချက်ခြင်းပဲ ကွန်ပျူတာထဲသွင်းတယ်။ ဒါကို ထိုင်းပြည်ထဲရေးက ကိုင်တယ်။ ဒုက္ခသည်တွေ နိုင်ငံခြားထွက်ရဖို့ ဆုံးဖြတ်တာက UNHCR နဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်ရဲ့သံရုံးတွေဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံခြားသွားဖို့ စီစဉ်တာက IOM ဖြစ်တယ်။ သူ့ အလုပ်က ဆေးစစ်မယ်။ ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်း တက်ရမယ်။ ခရီးသွားသင်တန်း တက်ရမယ်။ နိုင်ငံခြားထွက်မယ့်လူဟာ စခန်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး (ပလာ) က လက်မှတ်မထိုးရင် စခန်းထဲကနေ လုံးဝထွက်ခွင့်မရှိဘူး။ အဲလိုစနစ်တကျ ရှိတဲ့ကြားမှာ နိုင်ငံခြားထွက်ရဖို့ လူသစ်တွေကို လူဟောင်း တွေနဲ့ အစားထိုးတဲ့ကိစ္စမှာ အောက်ခြေကနေစပြီး အထက်အထိ အားလုံးပါဝင်မှုမရှိရင် ဒီကိစ္စ ဘယ်ဖြစ်မှာလဲ” ဟု ပြောသည်။ မဲဆောက်တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတခု လုပ်ကိုင်နေသည့် မူတူးဆိုလျင် အမေရိကန်သွားခါနီးမှ လူတဦးက ဘတ်ငွေ (၅) သောင်းဖြင့် လူစားထိုးရန် လာညှိသဖြင့် အမေရိကန် မသွားတော့ဘဲ ၎င်းငွေဖြင့် ရင်းနှီးပြီး မဲဆောက်မှာပင် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။၂၀၀၅ ခုနှစ် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် မှတ်ပုံတင်စဉ်က မဲဆောက်ဒေသအတွင်းမှ လူများ အုန်းဖျန်၊ နို့ဖိုး၊ မယ်လ စသည့်ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့သွားကာ သက်ဆိုင်ရာ စခန်းကော်မတီဝင်များ ရပ်ကွက် မှူးများ ပွဲစားများဖြင့် ဆက်သွယ်ကာ မှတ်ပုံတင် ပြုလုပ်ကြသည်။ ရာနှင့်ချီရှိသည့် အဆိုပါလူများ သည် မဲဆောက်မြို့ရှိ မြန်မာစီးပွားရေး အလွှာအသီးသီးတွင် လုပ်ကိုင်နေကြသူ အများစုဖြစ်သည်။မဲဆောက်ကျောက်ဝိုင်းမှ ကျောက်အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ကိုင်ကြသည့် မြန်မာများ အနည်းဆုံး (၁၀၀) ခန့် (၁) နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း အမေရိကန် ရောက်ရှိသွားပြီဟု သားသမီးများ အမေရိကန် ထွက် သွားသူ မြန်မာကျောက်ကုန်သည်တဦးက ပြောသည်။၎င်းအဆိုအရ လူတဦး အနည်းဆုံး ဘတ်ငွေ (၅) သောင်းမှ (၁) သိန်းထိ ပေါက်ဈေးရှိကြောင်း ယခု အချိန်ထိ သွားလာလုပ်ရှားသူများ မပြတ်ရှိကြောင်း၊ ပွဲစားများ မဲဆောက်တွင် အမြဲရှိကြောင်း ပြောသည်။ခါတော်မီများ ငါးပွက်ရာ ငါးစာချနေချိန်တွင် နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည် NI နံပါတ် (၁၆၇) ခု၊ လူဦးရေ (၅၀၀) ခန့်သည် သံရုံးအင်တာဗျူးနှင့် ဆေးစစ်အပြီးတွင် ၎င်းတို့အား အကန့်အသတ်မရှိ ဆိုင်းငံ့ထားကြောင်း သံရုံးမှ အကြောင်းပြန်ခဲ့သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဒုက္ခ သည်တဦးက ဒုက္ခသည်မဟုတ်သည့် အကြံအဖန်များကိုတောင် လက်ခံလျှင် ဒုက္ခသည် အမှန် အကန်များအတွက် လက်ခံစဉ်းစားသင့်သည်ဟုပြောပြီး ၎င်းကိစ္စအတွက် အမေရိကန်အစိုးရထံသို့ စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကာ တောင်းဆိုမှု ပြုလုပ်မည်ဟု ပြောသည်။ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ အမေရိကန်နှင့် တတိယနိုင်ငံတခုခု ထွက်လိုသူများကြောင့် မဲဆောက်ရှိ ပွဲစားများမှာ ဘတ်ငွေ သိန်းချီကာ မြိုးမြိုးမြက်မြက် ပွဲခရသော်လည်း စခန်းလူကြီးများ အပါအ၀င် ဒုက္ခသည်စခန်းရှိ အဓိက စီစဉ်ပေးသူများမှာ သောင်းဂဏန်းခန့်သာ ရရှိကြသည်ဟု ပွဲစားများနှင့် ရင်းနှီးသူများက ပြောသည်။အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိပြီး ၎င်းနိုင်ငံသားများ ဖြစ်သွားကြသော မြန်မာလူမျိုး အချို့ မဲဆောက်သို့ ပြန်လာကာ ဆွေမျိုးသားချင်းများနှင့် တတိယနိုင်ငံတခုခု သွားလိုသူများ အတွက် ကူညီမှုများရှိပြီး အချို့မှာ ပွဲစားကဲ့သို့ အခကြေးငွေများယူကာ မက်လုံးပေး စည်းရုံးမှုများ ကြောင့် မြန်မာအချို့ ခရီးပေါက်သူများရှိသလို အချို့အလိမ်ခံရရုံမက အမျိုးသမီးအချို့ ဘ၀ပျက် ခဲ့ကြရသည်။ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင်လည်း စခန်းတာဝန်ရှိသူများကိုယ်တိုင် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများ ပြုလုပ် ကြသဖြင့် စခန်းအတွင်း ဒုက္ခသည်အတုနှင့် အစစ်များကြားတွင် မကျေနပ်မှုများ ရှိကြသော်လည်း မပြောရဲကြောင်း၊ ၎င်းအတုများကို စခန်းတာဝန်ရှိသူများက အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ ထား ကြောင်း၊ သာမန်လူများအနေဖြင့် ကြည့်လျှင် ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများမှ ထွက်ပြေးတိမ်း ရှောင်လာသူများဟု ထင်ရလောက်အောင် ဟန်ဆောင်ကောင်းကြကြောင်း ဒုက္ခသည်တဦးက ပြောသည်။လူမှောင်ခိုနည်းဖြင့် ရောက်လာသည့် ဒုက္ခသည်အတုတို့သည် အချိန်မှန် ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ နား ထောင်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ထုတ်ဝေသော စာအုပ်စာတမ်းများကိုင်ဆောင်ခြင်း၊ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်းများ အလွတ်ကျက်ခြင်း၊ ၈၈ နောက်ပိုင်း အရေးကြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ဖြစ်ရပ်များနှင့် နေ့စွဲများကို အလွတ်ကျက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီး ဟန်ဆောင်ကြသည်ဟု သိရသည်။၎င်းဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုက္ခသည်စခန်းအချို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အန်ဂျီအိုများအား မီဒီ ယာများက မေးမြန်းကြရာ ကောလာဟလသတင်းများသာဖြစ်သည်ဆိုပြီး အဖြစ်မှန်ကို ဖုံးကွယ်၍ တုံ့ပြန်ဖြေကြားလေ့ရှိသည်။သို့သော် ဒုက္ခသည်အစစ်များအား နှစ်ချီ၍ ရိက္ခာမပေးသောကြောင့် မယ်လစခန်းမှဒုက္ခသည် (၂၀) ခန့် မဲဆောက်ရှိ UNHCR ရုံးတွင် ယခင်လက လာရောက်ဆန္ဒပြမှုတရပ် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဆန္ဒပြသူများ၏ အဆိုအရ မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းတွင် ယူအန်အသိမှတ်ပြု လက်မှတ်ရပြီး ရိက္ခာမရရှိသူ (၁၀၀) ကျော်ရှိသည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။မဲဆောက်အခြေစိုက် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်တဦးကမူ ဒုက္ခသည်စခန်းမှတဆင့် သွားသော်လည်း ထိုင်းမှာ အသစ်ပြဋ္ဌာန်းသည့် “လူကုန်ကူးမှုကာကွယ်ခြင်းနှင့် တိုက်ဖျက်ခြင်းဥပဒေ ဘီအီး ၂၅၅၁” အရ လူကုန်ကူးမှု မြောက်သည်ဟုပြောပြီး ယခုဖြစ်ရပ်တွင် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူ အဆင့်ဆင့်မှာလည်း လူကုန်ကူးမှုကျူးလွန်ရန် အားပေးကူညီခြင်း ပုဒ်မ-၇ အရ အကျုံးဝင်သည်ဟု ပြောသည်။ယခုဖြစ်ရပ်များအား သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက နည်းလမ်းတကျ ဖြေရှင်းမှု မပြုဘဲထားမည် ဆိုပါက ဒုက္ခသည်စခန်းအချို့သည် မသမာသူများ ကြီးစိုးရာဒေသနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့ သည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်လာပြီး မလိုလားအပ်သော ပြဿနာများ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ဟု ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးက ပြောသည်။ ။(ဤသတင်းဆောင်းပါးတွင် ပါဝင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ အမည်ရင်းကို လွှဲပြောင်းထားသည်) Summary only...
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန တနင်္ဂနွေနေ့၊ သြဂုတ်လ 03 2008 15:22 - မြန်မာစံတော်ချိန် (စာရေးဆရာ၊ နက္ခတ် ဗေဒင်ဆရာ မင်းသိင်္ခ မကွယ်လွန်မီက သူ၏ မရမ်းတလင်း အယူတော် မင်္ဂလာခြံအတွင်း သွားရောက် လေ့လာခဲ့သူတဦး ရေးသားထားသော သတင်း ဆောင်းပါး ဖြစ်သည်။) မှော်ဘီမြို့နယ် စုပေါင်းရုံးမှတ်တိုင် ရောက်သည်နှင့် တပြိုင်နက် "အဘခြံ၊ အဘခြံ" ဟု ဆိုက်ကားသမားများက တဖုံ၊ ထော်လာဂျီသမားများက တသွယ် အပြိုင်အဆိုင် အလုအယက် အော်ခေါ်နေကြသည်။ သူတို့ အော်ခေါ်နေသည့် အဘခြံဆိုသည်က မှော်ဘီမြို့နယ် မရမ်းတလင်းကျေးရွာရှိ ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ မရမ်းတလင်း အယူတော် မင်္ဂလာခြံကြီး ဖြစ်သည်။ရန်ကုန်ကလာသည့် မမြလေးတယောက် ဟိုင်းလတ်ကားပေါ်က အမြန်ဆင်းလိုက်သည်။ သူလည်း ဆိုက်ကား စီးရမလား၊ ကားစီးရမလား ဇဝေဇ၀ါနှင့် ဈေးနှုန်းကတော့ သိပ် မကွာ၊ ဆိုက်ကားက နှစ်ဦးစီးရင် ကျပ် ၅၀၀၊ ထော်လာဂျီကလည်း တဦးမှ ကျပ် ၂၀၀ တဲ့၊ တချို့ကလည်း ဖြတ်လမ်းကနေ လမ်းလျှောက်ရင်း အဘခြံထဲကို ၀င်နေကြပြီ။ နောက်ဆုံး စီးနေကျဖြစ်သော ဆိုက်ကားကိုငှား၍ အဘခြံသို့ ပို့ခိုင်းရသည်။အဘခြံသို့ ဆိုက်ကားနှင့် သွားသူတွေက သွားသလို ထော်လာဂျီနှင့် သွားသူတွေကလည်း ဒုနဲ့ဒေး။ လမ်းလျှောက်သူတွေကလည်း တပုံတပင်။ ဘယ်လိုပဲသွားသွား လိုရာခရီး ရောက်ဖို့ကတော့ အဓိကပဲ မဟုတ်လား။ အဘခြံကလည်း ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က လွဲ၍ တပတ်လုံး ယတြာပွဲများနှင့် စည်ကားနေရာ ဆိုက်ကားသမားများ၊ ထော်လာဂျီသမားများ အတွက်တော့ ၀မ်းရေး ဖူလုံသည်ဟု ဆိုရမည်။"ကျနော်တို့က စုပေါင်းရုံး မှတ်တိုင်ကနေ အဘခြံကိုပဲ အားပြုပြီး ဆွဲရတာ။ ဓာတ်ကြီး လေးပါး ယတြာပွဲဆိုရင် တပတ်တပတ်ကို လူကရာကျော်တယ်။ ညပိုင်း ၇နာရီလောက် ဆိုရင် အဘခြံကို လာတဲ့လူတွေက ၀င်လာမစဲ တသဲသဲပဲ။ နံနက်ပိုင်း အပြန် ၇နာရီခွဲလောက် ဆိုရင်လဲ ဆိုက်ကားတွေ၊ ထော်လာဂျီတွေက အဘရဲ့ခြံဝမှာ ကြိုပြီး စောင့်နေကြတာ။ ယတြာ ချေအပြီး လူတွေ ပြေးထွက်လာတာနဲ့ တရုန်းရုန်းတ၀ုန်းဝုန်း ဆိုက်ကားတွေ၊ ထော်လာဂျီတွေ အပေါ် ပြေးတက်ကြပြီး လူပြည့်တာနဲ့ တန်းထွက်ကြတာ။ တချို့ခရီးသည်ဆို မမီလိုက်လို့ လမ်းလျှောက်ပြန်ရတာတောင် ရှိတယ်"ဟု ဆိုက်ကားဆရာက ဆိုသည်။ဆိုက်ကားဆရာနှင့် စကားကောင်းရင်း အဘခြံသို့ ရောက်မှန်းမသိ ရောက်လာသည်။ အဘခြံက ဧည့်ခန်းဆောင်တွင် ခဏကြာတော့ အင်္ကျီအနီရောင်နှင့် ဘောင်းဘီအနီရောင် ၀တ် ထားသော ဆရာမတဦးက မနောမယ ထမင်းနှင့် မနောမယ လက်ဖက်ရည်သောက်ရန် လာခေါ်သည်။ စားသောက်ဆောင်သို့ ဧည့်သည်အားလုံး မသွားမနေရ တန်းစီ၍ သွားကြရာ ရထား တွဲကြီးသဖွယ် ဖြစ်နေသည်။စားသောက်ဆောင်မှာ တသုတ်ပြီးတသုတ် မနောမယ ထမင်းနှင့် လက်ဖက်ရည်ကို စားသောက်ကြရပြီး ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင်က "ကြာနေပြီ ကြာနေပြီ မြန်မြန်"ဟု သတိပေးနေသည်။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်သည်။ လူအုပ်က ရာကျော်သည် ဆိုတော့ မစားလိုက်ရသူ မရှိအောင် ဆရာ မင်းသိမ်းခိုင်က သန္ဓေတပည့်များကို သတိပေးနေခြင်းပင်။ ဖိုးသူတော်ကလည်း ထမင်းအိုးနားကပင် မခွာနိုင်။ ဧည့်သည်တွေကို ထမင်း ထည့်ပေးနေရသည်မှာ လုံးဝ လက် မလည်ပေ။မနောမယ ထမင်းနှင့် မနောမယ လက်ဖက်ရည် သောက်ပြီးသောအခါ ဓာတ်ကြီး လေးပါး ယတြာအလှူပွဲ ကျင်းပရာ နာလန္ဓာ ခန်းမဆောင်သို့ ယတြာချေရန် နေရာယူကြရသည်။ မမြလေးလည်း ဧည့်စာရင်းတိုင်ရန် ဧည့်ဆောင်သို့ သွားရပြန်သည်။ ဧည့်စာရင်းတိုင်ပြီး သောအခါမှ စိတ်အေးလက်အေး အနားယူနိုင်သည်။"အန်တီစန်းက ဓာတ်ကြီးလေးပါး အလှူ ယတြာပွဲတိုင်း လာချေတယ်။ အန်တီစန်း ရန်ကုန်မှာ ရှိနေလို့ကတော့ မချေဘဲနဲ့ကို မနေနိုင်ဘူး။ အန်တီစန်းက တိုင်းရင်းဆေးကုသတာ အနှစ်သုံးဆယ် ပြည့်တော့မယ်။ အခုလဲ အဘရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အန်တီစန်း တတ်ထားတဲ့ တိုင်းရင်း အကြောပညာနဲ့ ကျေးဇူးဆပ်နေပါတယ်။ တခြား ဧည့်ပရိသတ်တွေကိုလည်း အကြောနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါ၊ အရိုးကျီးပေါင်း တက်တာတို့ကို ကုသပေးနေပါတယ်။ ဓာတ်ကြီးလေးပါး အလှူယတြာကိုတော့ ၂၀၀၂ ခုနှစ်က စချေဖူးတာပါ။ အဲဒီတုန်းက အဓိဋ္ဌာန် အောင်မြင်လို့ အဘဆီမှာ ဗေဒင်လက္ခဏာ ဆရာဖြစ်သင်တန်း တက်ခဲ့တာ အခု သင်တန်းမှူး ဖြစ်နေပြီ" ဟု ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ တပည့်ရင်းတဦး ဖြစ်သူ လှိုင်သာယာမှ အန်တီစန်းနှင့် စကား လက်ဆုံကျစဉ် ဆိုသည်။ဓာတ်ကြီးလေးပါး အလှူယတြာပွဲသို့ ယတြာလာချေသူ သုဝဏ္ဏမြို့နယ်မှ ဦးဌေးဝင်းကလည်း "ကျနော်ကတော့ ယုံကြည်လို့ လာတာ။ ဓာတ်ကြီးလေးပါး ယတြာကို အားလဲကိုးတယ်။ သမီးက လုပ်ကျွေးနေတော့ ကျနော် အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်စားရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗေဒင်လက္ခဏာ ပညာကို ကျနော် ၀ါသနာပါတဲ့အတွက် အဘဆီမှာ ဗေဒင် လက္ခဏာဆရာဖြစ် သင်တန်းတက်ဖို့လဲ အစီအစဉ် ရှိတယ်။ အဘဆီကနေ ဗေဒင်လက္ခဏာပညာ သင်ပြီးရင်တော့ သတ္တ၀ါတွေကို ကူညီပါမယ်"ဟု ဆိုသည်။"ကျနော် ဓာတ်ကြီးလေးပါး အလှူယတြာချေပွဲကို ခဏခဏ လာချေဖူးတယ်။ လာတိုင်းလဲ ကိုယ်ရည်ရွယ်ထားပြီး ဆုတောင်းထားတဲ့ ဟာတွေက တခုပြီးတခု အောင်မြင်သွားတယ်။ ထူးတာတော့ အတော်ထူးတယ်။ အရင်ကနှင့်စာရင် အလုပ်အကိုင်ကအစ တော်တော်လေးကို အောင်မြင်လာတယ်။ ကျနော် မန္တလေးမှာ ဥ၂ ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ဖန်စီအရောင်းဆိုင် ဖွင့်ထားပါတယ်"ဟု မန္တလေးမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဦးစိုင်းက ပြောသည်။အချို့ကလည်း ယတြာချေ၍ အောင်မြင်ခြင်း၊ မအောင်မြင်ခြင်းကို အဓိကမထားဘဲ ဆရာမင်းသိင်္ခထံတွင် လာရောက်၍ ဓာတ်ကြီးလေးပါး အလှူယတြာ ချေရသည်ကိုပင် ကျေနပ် နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ လှိုင်သာယာက အိမ်ရှင်မတဦးဖြစ်သူ မအေးချမ်းပိုင်က "အဘဆီ မှာ ယတြာချေတာ အောင်မြင်တာ၊ မအောင်မြင်တာထက် ယတြာချေရတာကိုက စိတ်ရွှင်လန်းတယ်။ ဒီလို ယတြာချေတဲ့အတွက် ထွက်ပေါက် မမှားတော့ဘူးပေါ့။ တချို့ ယောက်ျားလေးဆိုရင် စိတ်ညစ်စရာကြုံရင် အရက်သောက်မယ်။ မိန်းကလေးဆိုရင်လဲ ရုပ်ရှင်ရုံ သွားတာတို့၊ တခြား ထွက်ပေါက် အမှားတွေကို အများကြီး လုပ်နိုင်တယ်။ အဘရဲ့ မရမ်းတလင်း အယူတော် မင်္ဂလာ ခြံမှာ ဓာတ်ကြီးလေးပါး ယတြာချေတော့ အဲဒီလို အမှားတွေကို မလုပ်မိတော့ဘူး။ အဘရဲ့ မေတ္တာတရားကလဲ ကြီးမားတယ်ဆိုတော့ အစစအရာရာမှာလဲ အောင်မြင်လာမယ်"ဟု ပြောသည်။ယခုလို စကားပြောနေရတော့လည်း မောရမှန်းပန်းရမှန်းမသိ ပြောနိုင်သည်။ အချို့ ဧည့်သည်များဆိုလျှင် အချင်းချင်း မှတ်မိနေကြပြီ။ နောက်လိုက် ပြောင်လိုက်နှင့် တကယ့် မိတ်ဆွေ အရင်းအချာများ ကဲ့သို့ပင် ဖြစ်နေကြပြီ။ စကား ကောင်းနေလိုက်သည်မှာ အောင်စည် အောင်မောင်းသံများ ကြားတော့မှ စကားအပြော ရပ်သွားတော့သည်။"အဘရဲ့ မရမ်းတလင်း အယူတော် မင်္ဂလာခြံမှာ ဓာတ်ကြီးလေးပါး ယတြာချေပေးတာ ငါးနှစ်ရှိပြီ။ တရက်မှ မပြတ်သေးတဲ့လူတွေ ရှိတယ်။ တချို့ကလည်း သုံးရက်၊ ငါးရက်၊ ကိုးရက် အဓိဋ္ဌာန်တွေ ၀င်ကြတယ်။ အဲဒါ အဘလဲ မတိုက်တွန်းဘူး။ သူတို့ဘာသာ သူတို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ အဓိဋ္ဌာန် ၀င်ကြတာ"ဟု ဆရာမင်းသိင်္ခက ပြောပြသည်။ရှိသမျှသော သက်ရှိသက်မဲ့ အရာအားလုံးမှာ ပထ၀ီ၊ တေဇော၊ အာဘော၊ ၀ါယော ဓာတ်ကြီးလေးပါး ပေါ်တွင် မှီတည် ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၊ အဆိုပါ ဓာတ်ကြီးလေးပါး ဖောက်ပြန်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ဓာတ်ကြီးလေးပါးအား မှီပြီး ဖြစ်တည်နေသော လက်ရှိ သက်မဲ့အရာ ၀တ္ထုများလည်း ဟန်ချက်ပျက်၍ ကမောက်ကမ ကပြောင်းကပြန် ဖြစ်ကုန်ကြောင်း သိရသည်။ ဓာတ်ကြီးလေးပါး ဖောက်ပြန်ပါက ကျန်းမာရေးညံ့ခြင်း၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ထစ်ငေါ့ ကြန့်ကြာခြင်း၊ အမှုအခင်း ကြုံတွေ့ခြင်း စသော အခက်အခဲ ဒုက္ခများအား ခံစားရတတ်သဖြင့် အဆိုပါ အခက်အခဲများမှ လွတ်မြောက်စေရန် ဓာတ်ကြီးလေးပါး အလှူယတြာ ချေပေးရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆရာမင်းသိင်္ခက ဆိုသည်။ ထိုသို့ ဓာတ်ကြီးလေးပါး အလှူယတြာ ချေရာ၌ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီး နှင့်တကွ ရဟန္တာ အရှင်သူမြတ် အပေါင်းတို့အား ပထ၀ီ (မြေ) ဓာတ်ကို ကိုယ်စားပြုသော နို့ဆွမ်းပန်းကန် ၂၀၊ တေဇော (မီး) ဓာတ်ကို ကိုယ်စား ပြုသော ဖယောင်းတိုင် လေးတိုင်၊ အာဘော (ရေ) ဓာတ်ကို ကိုယ်စားပြုသော သောက်တော်ရေ ၁၂ ခွက်၊ ၀ါယော (လေ) ဓာတ်ကို ကိုယ်စားပြုသော ရောင်စုံ ယပ်ခြောက်လက်တို့ကို လှူဒါန်းပူဇော်ခြင်း ဖြစ်သည်။"ဒီကိုလာတဲ့ ဧည့်ပရိသတ်တွေက ညအိပ်ရမှာဆိုတော့ မှတ်ပုံတင်တော့ မဖြစ်မနေ ယူလာရပါတယ်။ နောက်ပြီး ယတြာချေတဲ့ အချိန်မှာ အဘက အဓိဋ္ဌာန် ပုတီးစိပ်ခိုင်းမှာမို့လို့ ၁၀၈ လုံး ပုတီး ယူလာရပါတယ်။ အဘရဲ့ တပည့်တွေကလဲ ဧည့်ပရိသတ်တွေကို ကံဆင့်ကံဆက် ယတြာချည် မန်းကွင်းတွေကို စလွယ်သိုင်းပေးတယ်။ အင်း၊ စမတွေနဲ့ စီမံထားတဲ့ စလွယ်တွေ ကိုလဲ ထပ်ပြီးတော့ ပတ်ပေးတယ်။ လူကိုယ်တိုင် မလာနိုင်တဲ့လူကျတော့ ကိုယ်စားလာတဲ့ လူကနေ ဓာတ်ပုံ ယူလာပေးတယ်။ အဲဒီ ဓာတ်ပုံကို ပတ်ပေးရတယ်။ ပြီးတော့မှ အဘမင်းသိင်္ခ ရွတ်ဆိုရန် ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဥုံဂါထာတွေကို ရွတ်ဆိုတာတို့၊ မြောက်ကျွန်း၊ မူလ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်တွေ ရွတ်ဆိုတာတို့၊ ပုတီးစိပ်တာတို့အပြင် တခြား အဓိဋ္ဌာန်တွေကို တခုချင်း လုပ်ဆောင်ရပါတယ်"ဟု ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ အတူနေ တပည့်ရင်းတဦး ဖြစ်သူ ဆရာမင်းသိမ်းခိုင်က ဆိုသည်။ထို့ပြင် ဆရာမင်းသိင်္ခနှင့်တကွ တပည့်ရင်းတဦးဖြစ်သူ ဆရာဇင်ယော်နီတို့က ဓာတ် ကြီးလေးပါး အလှူယတြာ လှူဒါန်း ပူဇော်ပွဲကြီးကို ဦးဆောင် ကျင်းပလျက် ရှိကြောင်း၊ မြတ်စွာ ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှင့်တကွ ရဟန္တာ အရှင်သူမြတ် အပေါင်းတို့အား ဓာတ်ကြီး လေးပါး ဆွမ်းနှင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ဆက်ကပ် လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်ပြီး မြန်မာဝိဇ္ဇာများနှင့် ကမ္ဘာ တ၀န်းတွင်း၌ရှိသော ၀ိဇ္ဇာကြီးများကိုပါ ပင့်ဖိတ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ထို့ပြင် ဆရာမင်း သိင်္ခ အနေဖြင့် အင်္ဂါနေ့ညတွင် ပြုလုပ်သော ဓာတ်ကြီးလေးပါး ယတြာအလှူ လှူဒါန်းပူဇော်ပွဲ ကြီးတွင် ဆရာစားမချန်ဘဲ မဟာဘုတ် ဗေဒင်ပညာများနှင့် ယတြာချေပုံ နည်းလမ်းအစုံကို ပညာဒါန ပြုလုပ်ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော ညချမ်းအချိန်အခါတွင် ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ အနီဃာဟောန္တု၊ အဗျာ ပဇ္ဇာ ဟောန္တု၊ သုခိအတ္တာနံပရိဟရန္တု...အရှေ့၊ အနောက်၊ တောင်၊ မြောက် အရပ်ဆယ် မျက်နှာသို့ မေတ္တာပို့သံမှာ အရပ်ဆယ်မျက်နှာတိုင် စီးဝင်ပျံ့နှံ့သွားသည်။ အုန်းမောင်း ခေါက်သံနှင့်အတူ နောက်နေ့ နံနက် အရုဏ်တက်ချိန်သို့ ရောက်ရှိလာရာ ဧည့်ပရိသတ်ကြီးမှာ အနားယူလှဲနေရာမှ အမြန်အဆန် ထရပြန်သည်။ ထို့နောက် အရုဏ်ဆွမ်း ဆက်လက် လှူဒါန်း ပြီးသောအခါ အောင်ဗောဓိပင်တွင် ဝေမာနိက ပြိတ္တာများအား ဒါနပြုစွန့်ကြဲခြင်း၊ မကောင်းသော ဓာတ်များအား ခန္ဓာကိုယ်မှ ခါချခြင်း၊ အောင်အတိတ် အောင်နိမိတ်ယူ၍ အောင်မြေနင်းကာ ပူဖောင်းများ ဖောက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပြီး မရမ်းတလင်း အယူတော် မင်္ဂလာခြံမှ မိမိတို့ အကြံအစည်များ အောင်မြင်အောင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ပြေးထွက်ကြရသည်။အောင်အတိတ် အောင်နိမိတ်ဆောင်ပြီး အောင်မြေနင်းကာ ပူဖောင်းများဖောက်၍ ပြေးထွက်စဉ်တွင် အိပ်ချင်သော စိတ်များပင် ဘယ်ရောက်သွားသည်မသိ။ ကြက်ပျောက် ငှက်ပျောက် ပျောက်ကုန်သည်။ ပူဖောင်းအတွင်း ရေများ ထည့်ထားသောကြောင့် တကိုယ်လုံးလည်း ရေများဖြင့် ရွှဲရွှဲ စိုကုန်သည်။ မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး အချိန်ကာလ သင်္ကြန်ပွဲတော်သို့ပင် ရောက်နေသည့်အလား ခံစားရသည်။ မရမ်းတလင်း အယူတော် မင်္ဂလာခြံကြီးမှ ဓာတ်ကြီး လေးပါး ယတြာချေသော ဧည့်ပရိသတ်များမှာ ရွှင်လန်းတက်ကြွသော စိတ်ဓာတ်များဖြင့် မိမိတို့၏ ရုံးများ၊ အိမ်များ၊ ကျောင်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်များသို့ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်များ မလစ် ဟင်းစေရန်အတွက် အပြေးအလွှား သွားကြလေပြီ။ ပျက်နေသော ဓာတ်တပါးပါး အထူးပြုပြင်မှု ခံယူပြီးပြီဆိုသည့် စိတ်ခံစားချက်တို့ဖြင့် အားလုံး၏ ခြေလှမ်းတို့က ပေါ့ပါးသွက်လက် နေလေသည်။ (ယခု ဆောင်းပါးကို မြန်မာမီဒီယာ ဘလော့ဂ်တွင် ဖော်ပြထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အတားအဆီး အကန့်အသတ် အခက်အခဲများကြောင့် ကာယကံရှင်မှ ခွင့်ပြုချက် ရယူနိုင်ခြင်း မရှိပါ။) Summary only...
၀င်းမာန်သျှင် မြန်မာစစ်အစိုးရကို အမေရိကန်က စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်သည့် အသုံးအနှုန်းကို မြန်မာပြည်သူတွေ ရင်းနှီးပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် မည်သို့မည်ပုံ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်သည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားမလည်သူများလည်း ရှိသည်။ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် အမေရိကန်က စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်ရာတွင် ပုံစံအမျိုးအမျိုးရှိသည်။ ဥပမာ-အမေရိ ကန်လုပ်ငန်းရှင်များအား မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ် မလုပ်ရန်တားမြစ်သည့် ဒဏ်ခတ်မှု (Sanctions for new investment)၊ စစ်အစိုးရပိုင် လုပ်ငန်းများကို ပစ်မှတ်ထားသည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာဒဏ်ခတ်မှု (Financial Sanctions)၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်မှာ ထပ်မံပြဋ္ဌာန်းသည့် မြန်မာ ကျောက်မျက်ရတနာများ အမေရိကန်သို့ တင်သွင်းခွင့် ပိတ်ပင်သည့် ဒဏ်ခတ်မှု (Block Burma Jade Act)၊ မြန်မာစစ်အစိုးရအား ထောက်ပံ့ပေးနေသည့် မြန်မာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ (ဥပမာ- ဘိန်းဘုရင် လော်စစ်ဟန်နှင့်သား စတီဗင်လော၊ ဦးတေဇ စသည်) အား အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ၊ အမေရိကန်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် မဆက်ဆံရမည့်သူများအဖြစ် နာမည်ပျက်စာရင်းသွင်းသည့်နည်း စသဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိသည်။၁၉၉၇ ခု မေလ (၂၀) ရက်မှစတင်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ၊ အမေရိကန်လုပ်ငန်းများ မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ် မလုပ်ရန်တားမြစ်သည် ဒဏ်ခတ်မှုကို စတင်သည်။ အမေရိကန် သမ္မတဘုရ်ှသည် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများအား တိုးချဲ့ထားသည့် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီဥပဒေကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၈) ရက်နေ့၌ လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့သည်။ဘုရ်ှသည် ထိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှု ဖြစ်မြောက်စေရေးအတွက် ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်နေ့တွင် သမ္မတအမိန့်ဒီဂရီတရပ် ထုတ်ပြန်သည်။ ထိုအမိန့်ထဲတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြည်ပသို့ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ တင်ပို့ခြင်းတို့ကို တားမြစ်ခြင်း၊ အမိန့်တည်ပြီး ရက်ပေါင်း (၃၀) အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံထွက်ကုန်များ အမေရိကန်တင်သွင်းခွင့် တားမြစ်ခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ကလင်တန်၏ သမ္မတအမိန့် ဒီဂရီနံပါတ် (၁၃၀၄၇) ထုတ်ပြန်ခဲ့ချိန် ၁၉၉၇ ခုနှစ် မေလ (၂၀) ရက်နေ့ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုများ စတင်အာဏာ သက်ဝင်နေပြီဖြစ်သည်။ ထိုအမိန့်အရ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အဖွဲ့အစည်း များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ် ထပ်မံပြုလုပ်ခြင်းကို တားမြစ်သကဲ့သို့ အခြားသော နိုင်ငံခြားသား၊ နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ကူညီ ပေးမှုကိုလည်း တားမြစ်သည်။ ထိုအမိန့်ကို အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ စီရင်သော မြန်မာပိတ်ဆို့မှု စည်းမျဉ်းဥပဒေ (၃၁) (C.F.R)၊ အပိုင်း (၅၃၇) ("မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုစည်းမျဉ်းဥပဒေ") ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သည်။မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှု စည်းမျဉ်းဥပဒေအရ မြန်မာအစိုးရနှင့်စာချုပ်တရပ် ချုပ်ဆိုခြင်းမျိုးဖြင့် ဖြစ်စေ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိနေသော သဘာဝရင်းမြစ်များ (သဘာဝရင်းမြစ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ရင်းမြစ်၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာရင်းမြစ်၊ ငွေကြေးဆိုင်ရာရင်းမြစ်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာရင်းမြစ်၊ လူသားရင်းမြစ်များ အပါအ၀င်) တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း အသွင်မျိုးဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းတို့ကို “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်” ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေသော အရင်းအမြစ်များကို အခြေခံပြီး ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အမြတ်အစွန်း အများအပြားရရှိနေသည့် တတိယနိုင်ငံကုမ္ပဏီမှ အစုရှယ်ယာ ၀ယ်ယူခြင်းမျိုး မပြု လုပ်ရန်လည်း အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အဖွဲ့အစည်းများအား တားမြစ်ထား သည်။ သမ္မတဒီဂရီအမိန့် နံပါတ် (၁၃၀၄၇) ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အမိန့်သစ်နှင့် ဆီလျော်နေ သည့် ကာလအထိ ထိုတားမြစ်မှုများ ဆက်လက်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။သွင်းကုန်ပိတ်ဆို့ခြင်းထိုဥပဒေသည် အတည်ပြုသည့်နေ့မှ ရက် (၃၀) အတွင်းစတင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထုတ်ကုန်မှန်သမျှ တင်သွင်းခြင်းကို တားမြစ်သည်။ ထိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်အရ သွင်းကုန်ပစ္စည်းများ မ၀ယ်ယူရန် အထူး သတ်မှတ်ထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှာ (၁) နအဖ၊ (၂) နအဖအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မိသား စုဝင်များ၊ (၃) မူးယစ်မှောင်ခိုလုပ်သည်ဟု အမည်ပေါက်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ (၄) မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်နှင့် ဦးပိုင်၏ အကျိုးစီးပွားပါဝင်နေသည့် ကုမ္ပဏီအားလုံး၊ (၅) မြန်မာ့စီးပွား ရေး ကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) နှင့် (MEC) ၏ အကျိုးစီးပွား ပါဝင်နေသည့် ကုမ္ပဏီအားလုံး၊ (၆) ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း၊ (၇) အထက်ပါ ကုမ္ပဏီများ အဖွဲ့အစည်းများကို ဆက်ခံလုပ်ကိုင်သူအားလုံးတို့ဖြစ်သည်။ထိုတားမြစ်သည့် အခွင့်အာဏာနှင့် နိုင်ငံတကာ အရေးပေါ် စီးပွားရေး အာဏာများဥပဒေ (IEEPA) အောက်တွင်ရှိ အထွေထွေလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးပြုကာ သမ္မတသည် အမိန့်ချမှတ်ပြီး ရက်ပေါင်း (၃၀) မှစတင်၍ (၂၀၀၃ ခု သြဂုတ်လ ၂၈ ရက်မှစ၍) မြန်မာနိုင်ငံမှထုတ်ကုန်မှန်သမျှ တင်သွင်း ခြင်းတားမြစ်သည့် ဥပဒေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းဆည်းခြင်းထိုဥပဒေအရ သမ္မတအနေဖြင့် အမေရိကန်ငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများတွင် ရှိနေသော နအဖ၊ နအဖ၏ အကြီးတန်းအရာရှိများ သို့မဟုတ် နအဖ၏ နိုင်ငံရေးအင်အားစု၊ ကြံ့ဖွံ့စသည်တို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပြီး ပိုင်ဆိုင်မှုများအား (OFAC) သို့ အစီရင်ခံရသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်နေ့မှ အကျုံးဝင်သော သမ္မတအမိန့်အောက်တွင် သမ္မတသည် အမိန့်အောက် တွင် စာရင်းရှိနေသည့် အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြား မြန်မာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပိုင်ဆိုင် မှုများကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး နောင်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရမှ ဖွဲ့စည်းမည့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများကို လည်း ပိတ်ဆို့ဦးမည်ဖြစ်သည်။ IEEPA ၏ အခန်း ၂၀၃ (ခ) အရ သမ္မတအမိန့်ဖြင့် အထက်ပါ အဖွဲ့အစည်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် ကိုယ်စားဖြစ်စေ၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ ပိုင်ဆိုင်ထားသော၊ ထိန်းချုပ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း ထပ်မံပိတ်ဆို့မည်ဖြစ်သည်။ပို့ကုန်ပိတ်ဆို့ခြင်းIEEPA နှင့် TSRA တို့၏ အခန်း ၂၀၃ (ခ) တွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသည်မှလွဲ၍ သမ္မတအမိန့်သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ (သို့) အမေရိကန်နိုင်ငံသား၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အဖွဲ့အစည်းများ (မည်သည့် နေရာတွင် ရှိနေစေကာမူ) အနေဖြင့် မည်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှု လုပ်ငန်း များကိုမျှ ပြည်ပတင်ပို့ခြင်း သို့မဟုတ် တဆင့်ခံ ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းကို တားမြစ်သည်။ ထို့အတူ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံသား၊ အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်း များမှ ဖြစ်စေ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လာခဲ့လျှင် တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း ခံထားရသည့် နိုင်ငံခြားသားက ပြုလုပ်သော အရောင်းအ၀ယ်ကိစ္စများအတွက် အမေရိကန်နိုင်ငံသား၊ အမေရိကန်အဖွဲ့အစည်း များက အတည်ပြုခြင်း၊ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ လုပ်ငန်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးခြင်း (သို့) အာမခံပေးခြင်းတို့ကိုလည်း တားမြစ်သည်။ သို့ရာတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍မူ သမ္မတအမိန့်တွင် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားခြင်း မရှိပေ။နိုင်ငံတကာက မြန်မာနိုင်ငံအား ချေးငှားမှုများကို ကန့်ကွက်ခြင်းထိုဥပဒေအရ မြန်မာနိုင်ငံအား နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများမှ ငွေကြေး အားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နည်းပညာထောက်ပံ့မှုအရဖြစ်စေ ချေးငှားလုပ်ဆောင်ခြင်းများအား အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့် ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူများကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးရမည်ဖြစ်သည်။သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေအနေများ ရောက်ရှိလျှင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့ထားမှုကို သမ္မတအား ရုပ်သိမ်းခွင့်ပေးထားခြင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီနည်းကျကျ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရအနေဖြင့် အခြေ အနေအရပ်ရပ်အပေါ်တွင် ဆောင်ရွက်မှုများ ပြည့်စုံနေပါပြီဟု မေတ္တာရပ်ခံလာခဲ့လျှင် ထိုပိတ်ဆို့မှု ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အမေရိကန်သမ္မတအနေဖြင့် ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ ဆောင်ရွက်မှုများထဲတွင် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ အဆုံးသတ်စေရေးအတွက် နအဖမှ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လုံလုံလောက်လောက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးပြီး ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အရပ်သားအစိုးရအား အာဏာလွှဲပြောင်းပေးရန် အတွက် ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့် သဘောတူညီမှုတရပ် ရယူခြင်း၊ နိုင်ငံတကာမူးယစ်ဆေးဝါး တန်ပြန်နှိမ်နင်းမှု သဘောတူညီချက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ခြင်း စသည်တို့ ပါဝင်သည်။သွင်းကုန်ပိတ်ဆို့မှုဥပဒေကို လွှတ်တော်မှ သက်တမ်းတိုးခြင်းမရှိပါက ထိုဥပဒေ စတင်အာဏာ တည်သည့်နေ့မှ (၁) နှစ်အကြာတွင် သက်တမ်းကုန်မည်ဖြစ်သည်။ သွင်းကုန်ပိတ်ဆို့မှုဥပဒေကို စတင်ပြဋ္ဌာန်းသည့် နေ့မှ (၃) နှစ်အထိသာ သက်တမ်းတိုးနိုင်သည်။ အကယ်၍ သွင်းကုန် ပိတ်ဆို့မှုဥပဒေကြောင့် အမေရိကန်အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်မည်ဟု အမေရိကန် သမ္မတက ဆုံးဖြတ်ပြီး လွှတ်တော်ကို အကြောင်းကြားခဲ့လျှင် သွင်းကုန် ပိတ်ဆို့မှု ဥပဒေကို ရုပ်သိမ်း ရန် လွှတ်တော်က သမ္မတအား လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် သမ္မတသည် IEEPA နှင့် ထိုဥပ ဒေအောက်ရှိ သူ့အခွင့် အာဏာအရ သမ္မတအမိန့်ကို တင်သွင်းထားသောကြောင့် ပိတ်ဆို့မှုများကို သမ္မတ အမိန့်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခွင့်မရှိပေ။ ။ Summary only...
(သတင်းသုံးသပ်ချက်)သတင်းထောက် ဟန်တင်အောင်/ ၅ သြဂုတ် ၂၀၀၈ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ်နှင့် တွေ့ခွင့်ရသည့် နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများအနေဖြင့် သံဃာထု၏ နစ်နာမှုကို ထုတ်ဖော်မိန့်ကြားလိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ရန်ကုန် သံဃာအသိုင်းအ၀န်းက ယူဆသည်။စင်စစ် မြန်မာစစ်အစိုးရသည် နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများအား ဘွဲ့တံဆိပ် တော်များ တီထွင်ဆက်ကပ်သည့်နည်း၊ ဇိမ်ခံကားများ၊ တီဗီများကဲ့သို့ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများ ဆက် ကပ်သည့်နည်းဖြင့် ဆရာတော်ကြီးများ ရာထူးခုံမင်လာအောင် ဖျက်ဆီးထားသည်ဟု သံဃာ အများစုက မြင်ကြသည်။ မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် သံဃာတော်များကို ချီးမြှင့်ခဲ့သည့် ဘွဲ့တံဆိပ်အမျိုးအစားများ သိသိသာသာ များပြားလာသည်။ ထို့အတူ မြန်မာစစ်အစိုးရအား ငွေကြေးများများ လှူဒါန်းပြီး တရားဝင် လာဘ်ထိုးသူများအတွက် အမျိုးသားသူဌေးသူကြွယ်ဘွဲ့၊ အမျိုးသမီးသူဌေး သူကြွယ်ဘွဲ့ စသည့်ဘွဲ့များကိုပါ ထပ်မံတီထွင်ခဲ့ပြန်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကြော်ငြာများ၌ အဆိုပါ သူဌေးသူကြွယ်ဘွဲ့များ တသီတတန်း ရေးထားသည့် အမည်များဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရ သတင်းစာများတွင် ငွေအမြောက်အမြား အကုန်ခံ ထည့်သွင်းသည့် အလေ့များ ခေတ်စားလာသည်။၁၉၉၁ ခု အောက်တိုဘာ (၂၄) ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် စစ်အစိုးရ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၄၂/၉၁ ကို ကြည့်လျှင် ယခင်အစိုးရများ လက်ထက် သံဃာတော်များအား ဆက်ကပ်သည့် ဘွဲ့ တံဆိပ်အမျိုးအစားမှာ အဘိဓဇမဟာရဌဂုရု၊ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတနှင့် တိပိဋကဓရ ဆိုပြီး သုံးမျိုးသာ ရှိ၏။ လက်ရှိစစ်အစိုးရလက်ထက်တွင်မူ နောက်ထပ်ဘွဲ့တံဆိပ်တော်အသစ် (၂၁) ခုအထိ ထပ်မံ တိုးချဲ့ထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။စစ်အစိုးရလက်ထက် သံဃာတော်များအား အပ်နှင်းသည့် ဘွဲ့များကို ပြန်ကြည့်လျှင် ပညာပိုင်း ဆိုင်ရာ ဘွဲ့နှစ်မျိုးအနက် အဘိဓဇမဟာရဌဂုရုဘွဲ့က အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး သာသနာပိုင်းဆိုင်ရာဘွဲ့ (၅) မျိုးတွင် အဘိဓဇမဟာသဓမ္မ ဇောတိက ဘွဲ့က အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ တင်ပြမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ဘွဲ့ (၃) မျိုးအနက် အဂ္ဂမဟာဂန္ဓ၀ါစက ပဏ္ဍိတဘွဲ့က အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး တရား ပြသမှုဆိုင်ရာ ဘွဲ့(၃) မျိုးတွင် အဂ္ဂမဟာ ကမ္မဌာနစရိယဘွဲ့က အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ တရားဟော ပိုင်းဆိုင်ရာ ဘွဲ့ (၂) မျိုးအနက် မဟာဓမ္မကထိက ဗဟုဇန ဟိတဓရဘွဲ့က အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး ၀ိသိဌ တိပိဋကဓရ တိပိဋက ကောဝိဒဘွဲ့က ပိဋကတ်ဆိုင်ရာ အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။အာဏာရှင်စစ်အစိုးရကို ထောက်ခံသည့်အတွက် အရည်အချင်း မပြည့်မီသည့် သံဃာတော်များ၊ ကျမ်းတစောင်မျှ မပြုစုဘူးသည့် သံဃာတော်များပင် နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဘွဲ့တံဆိပ်တော် ရသည့် အဖြစ်မျိုး ရှိသည်ဟု ရန်ကုန်တိုက်အုပ်ဆရာတော်ကြီးများက အမိန့်ရှိသည်။အဘိဓဇနှင့် တိပိဋက ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ရ ဆရာတော်များဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အစိုးရပိုင် ကုန်းကြောင်း၊ ရေကြောင်း၊ လေကြောင်း သုံးမျိုးဖြင့် ခရီးထွက်လျှင် အခမဲ့စီးနင်းခွင့် ပေးထားပြီး ကပ္ပိယဒကာနှစ်ဦးပါ အစိုးရစရိတ်ဖြင့် လိုက်ပါခွင့်ပေး၏။ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတနှင့် အဂ္ဂမဟာ သဓမ္မ ဇောတိကဓဇဘွဲ့ရ ဆရာတော်များကိုမူ အစိုးရပိုင် ကုန်းကြောင်း၊ ရေကြောင်းနှစ်မျိုးဖြင့် ခရီး သွားလျှင် အခမဲ့ စီးနင်းခွင့်ပြုပြီး တနှစ်လျှင် ဆွမ်းစရိတ် ငွေ (၁) သောင်း ထောက်ပံ့သည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်များ ဖောင်းပွနေသည့် အကြောင်းတရားများအနက် ကျမ်းတစောင်မျှမပြုစုဖူးဘဲ ငွေနှင့်လာဘ်ထိုးပြီး ရယူထားသည့် ဆရာတော် အများအပြားရှိသည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုများသမဂ္ဂအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဦးခေမာစာရက အမိန့်ရှိသည်။အံ့သြဖို့ကောင်းသည့်အချက်မှာ လက်ရှိ စစ်အစိုးရ လက်ထက်၌ သိန်း (၅၀) အထက် စစ်အစိုးကို ပေးသူမှန်သမျှအား အမျိုးသား သူဌေးသူကြွယ်ဘွဲ့၊ အမျိုးသမီး သူဌေးသူကြွယ်ဘွဲ့ များ အပ်နှင်း ပေးသည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများကို ပေးအပ်သည့် သူဌေးဘွဲ့ (၄) မျိုးအနက် အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ မဏိဇောတဓဇ ဘွဲ့က အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများအတွက် အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မ သိင်္ဂီဘွဲ့က အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။မြန်မာစစ်အစိုးရ ပေးအပ်သည့် အမြင့်ဆုံး အမျိုးသမီးသူဌေးသူကြွယ်ဘွဲ့ရသူများ စာရင်းတွင် ကမ္ဘောဇဘဏ်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ကိုဝင်း၏ ဇနီး ဒေါ်နန်းသန်းထွေး၊ ရွှေသံလွင်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးကျော်ဝင်း၏ ဇနီး ဒေါ်နီနီစသည့် ထင်ရှားသည့် စီးပွားရေးသမားများလည်း ပါဝင်သည်။အမြင့်ဆုံး အမျိုးသား သူဌေးသူကြွယ်ဘွဲ့ရသူများထဲတွင် မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များနှင့် ရင်းနှီး သူဟု နာမည်ကြီးသည့် ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် ဦးခင်ရွှေ၊ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေးနှင့် ရင်းနှီး သူ ကမ္ဘောဇဘဏ်ပိုင်ရှင် ဦးအောင်ကိုဝင်းခေါ် (ဆရာကျောင်း)၊ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအဖွဲ့ ဖြစ်သည့် PNO ပအို့ဝ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင် ဦးအောင်ခမ်းထီ စသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များ ပါဝင်သည်။ဦးအောင်ခမ်းထီသည် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက် ကိုင်အဖွဲ့ (၁၇) ဖွဲ့အနက် အဂ္ဂမဟာ သီရိသုဓမ္မ မဏိဇောတဓဇ သူဌေးဘွဲ့ရထားသည့် တဦး တည်းသော တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၀၇ ခုနှစ် သံဃာ့အရေးတွင် သံဃာတော်များအား စစ်အစိုးရဒလန်များက လူမဆန် စွာ ရက်စက်ခဲ့သည်ကိုပင် နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများက ၀င်ရောက် ဟန့် တားခြင်း မပြုခဲ့ပေ။ ထိုမျှမက ဆန္ဒပြသည့် သံဃာတော်များကိုပင် စစ်ခေါင်းဆောင်များ လမ်း ကြောင်းပေးသည့်အတိုင်း ၀ိနည်းချိုးဖောက်သယောင် စစ်အစိုးရ မီဒီယာများကတဆင့် လ်ိမ်ပေး ခဲ့သည့် သာဓကများ ရှိခဲ့သည်။ယခုလည်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်အား နိုင်ငံတော်သံဃာ့မဟာနာယက ဆရာ တော်ကြီးများ မည်သည့်စကားမျိုး မိန့်ကြားမည်ကို မှန်း၍ရနေသည်ဟု ရန်ကုန် သံဃာတော်များ က မိန့်ကြားသည်။ ။ Summary only...
ထက်ဝင်း အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ 05 2008 12:19 - မြန်မာစံတော်ချိန် စစ်အစိုးရကြောင့် လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း သိသာစွာ ချိနဲ့သွားသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမညစ်ဘူးဆိုလျှင် နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံများ အနေဖြင့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် ပါတီစုံ ရွေးကောက်ပွဲ၌ နိုင်ခြေ ရှိနေသေးသည်။ သို့သော် မိမိတို့ ထိန်းချုပ် ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းရှိသည့် ခြေလှမ်းဖြင့် တိုင်းပြည်ကို ရှေ့သို့ တက်လှမ်းနိုင်စေရန် ဆိုလျှင် ဒီမိုကရေစီစိတ် ပြည့်ဝသည့် နိုင်ငံရေးသမား နောက်ထပ် အများအပြားကို တိုင်းပြည်က အရေးတကြီး လိုအပ်နေသေးသည်။ ဤအချက်ကို မကြာသေးခင်က ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းလိုက်သည့် ထိပ်တန်း အမျိုးသားရေး ဝါဒီများ၊ အတိုက်အခံများ၊ နိုင်ငံရေးသမားများ၏ ဤဖြစ်အပျက်က ပိုမို ဆိုးရွားသွားစေသည်။ သို့သော် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး ပါတီများအနေဖြင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လူထု ထောက်ခံမှုမဲ အများစုကို ရရှိရန် အတွက်မူ စိတ်ချလက်ချ စိတ်အေးလက်အေး နေနိုင်သည်။ စစ်အစိုးရ အားပေး ထူထောင်ထားသည့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အသင်း (USDA) ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများမှ ခေါင်းခေါက်ရွေးချယ် စေလွှတ်သည့်သူများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဆိုလျှင်ပင် ပူစရာ မရှိပါ။“၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အတိုက်အခံတွေ နိုင်မှာ သူတို့ကို သာမန် ပြည်သူလူထုတွေက သဘောကျလို့ မဟုတ်ဘူး၊ စစ်အစိုးရနဲ့ သူမွေးထားတဲ့ (USDA) လို အဖွဲ့တွေကို လူတွေက စိတ်ပျက်နေကြလို့။ ဒီအဖွဲ့တွေကို စက်မှု (၁) ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်း၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း လို အကြီးတန်းအမှုဆောင်တွေက ခေါင်းဆောင်နေတာ” ဟု စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းနှင့် နီးစပ်သည့် ထိပ်တန်း စီးပွားရေးသမားနှင့် နိုင်ငံရေး အကဲခတ် တဦးက ပြောကြားသွားသည်။လူထုက လက်ရှိ အခြေအနေကို ဘာကြောင့် ဒီလောက် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေရပါသလဲ? ထိုသို့ ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းများတွင် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် နှောင်းပိုင်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အတိုက်အခံတို့၏ ဆန္ဒပြပွဲများကို စစ်အစိုးရက နှိမ်နင်းရာတွင် သံဃာအချို့ အပါအဝင် လူပေါင်း ၃ဝ မျှ သေကြေကြသည်ကို တွေ့မြင်ခဲ့ရခြင်းနှင့် လူပေါင်း ၁၃၈ဝဝဝ မျှ သေကြေခဲ့ရပြီး လူပေါင်း ၂ သန်းမျှ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည့် လွန်ခဲ့သောနှစ် မေလအတွင်းက တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ်ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်းအပြီး အစိုးရ၏ မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ် လုပ်မှုများကြောင့် ဖြစ်သည်။“ရည်ရွယ်သည် ဖြစ်စေ၊ မရည်ရွယ်ဘဲ လုပ်တာဖြစ်စေ၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ လှုပ်ရှားမှုကြောင့် သံဃာတော်တွေရဲ့ နိုင်ငံရေး သြဇာက အရမ်း အရေးပါလာတယ်” ဟု အဆိုပါ အကဲခတ်က ရှင်းလင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။နောက်ထပ် ဤသို့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအချက် တခုမှာ စစ်အစိုးရ၏ အာဏာ မက်မောမှုကြောင့် တိုင်းပြည်၏ စီးပွားရေး အခက်အခဲများ ပိုမို တာရှည်ခဲ့ရပြီး လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် ၃ ခု အတွင်းသန်းပေါင်း ၅ဝ မျှရှိသော ပြည်သူလူထု၏ ဆင်းရဲဒုက္ခကို တိုးပွားလာစေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ဤအခြေအနေတွင် စစ်အစိုးရကို ထာဝရ အစားထိုးနိုင်ရန် ပြည်သူလူထုနှင့် အတိုက်အခံတို့ လိုအပ်နေသည့် အရာမှာ တခုတည်းဖြစ်သော အမျိုးသားရေး နိုင်ငံရေး ပါတီတရပ် ပေါ်ထွက်လာရေး ဖြစ်သည်။ဤသို့ အမျိုးသားရေး နိုင်ငံရေးသမားများ၏ အနေအထားကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန်အတွက် ပြည်တွင်း အတိုက်အခံများနှင့် နိုင်ငံတကာ ဖိအားတို့အနေနှင့် ညီညာစွာ မပြောင်းမလဲ လုပ်ရမည့်အရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွှတ်ပေးရေးအတွက် စစ်အစိုးရကို တွန်းအားပေးရေး ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စအတွက် နိုင်ငံတကာမှ အဓိက အင်အားစုများ ဖြစ်သော ကုလသမဂ္ဂ၊ အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံတို့ ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။“ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ပိုပြီး တံခါးဖွင့် ပေးလာဘို့ ပိုမို ပွင့်လင်းလာဘို့ အတွက် တရုတ်မှာ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ သဘောထား ရှိနေတယ်လို့ ကျယ်ပြန့်စွာ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ အခုအထိတော့ သူ့နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး အကျိုးစီးပွားအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကို အမြတ်ထုတ်နိုင်ဘို့ကို ပထမဦးစားပေးအဖြစ် သဘောထားနေပုံရပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ တိုးတက်မှုကိုလည်း ကျေနပ်နေပုံပါပဲ” ဟု ရန်ကုန်အခြေစိုက် ရှေ့နေတဦးက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ် ပြသွားခဲ့ပါသည်။မြန်မာစစ်အစိုးရသည် တိုင်းပြည်ကို အပြုသဘော တိုးတက် ဖြစ်ထွန်းစေသည့် လမ်းကြောင်းအတိုင်း ရှေ့ရှုသွားနိုင်စေရန် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြောင်း သက်သေ မပြနိုင်ခဲ့သည် သာမက ဤသို့ တိုင်းပြည်၏ အမှန်တကယ် တိုးတက်ရေးအတွက် အထောက်အခံ ပြုနိုင်မည့်သူများအားလည်း ပြည်တွင်းမှဖြစ်စေ၊ ပြည်ပမှဖြစ်စေ မည်သူ့ကိုမျှ နေရာ မပေးချင်လောက်အောင်ပင် ငါစွဲကြီးသူများ ဖြစ်သည်ဟုလည်း အဆိုပါ ရှေ့နေကပင် သတိပေး ပြောကြားသွားခဲ့သည်။အလားတူပင် အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီး၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ကြီးနှင့် တရုတ်တို့ အနေဖြင့်လည်း အတိုက်အခံ အုပ်စုများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ စတင်ပြုလုပ်ပါရန် စစ်အစိုးရကို အားပေးသင့်သည်။ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးသည်သာ အကောင်းဆုံးလမ်း ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝသော နိုင်ငံရေး ကိုယ်စားလှယ်များက အရေအတွက် အကန့်အသတ်နှင့်သာ ရှိနေခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လက်ရှိ ရှိနှင့်ပြီးဖြစ်သော မတည်ငြိမ်သည့် နိုင်ငံရေး ဝန်းကျင်တွင် အထူးသဖြင့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲများ မတိုင်မီ နိုင်ငံရေး အချောင်သမားများ အလုံးအရင်းနှင့် ဝင်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်တော့ ရှိနေသည်။ဤအခြေအနေတွင် ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး၌ လက်ရှိ စစ်အစိုးရနှင့် ဘာမှမထူးသည့် အစိုးရသစ်တရပ် ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ဘွယ်လည်း ရှိနေပြန်သည်။ သို့သော် အဆိုပါ အစိုးရသစ်သည်လည်း နိုင်ငံရေး ရင့်ကျက်မှုထက် စီးပွားရေး ကိစ္စများကိုသာ ပိုမို စိတ်ဝင်စားသည့် ငယ်ရွယ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်လေးများ ပါဝင်လာမှုကြောင့် ဘာမှ လုပ်မရဘဲ ရှိနေလိမ့်မည်။ ဤသို့ ပါဝင်လာကြမည့်သူ အများစုမှာ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး အင်အားစုများအတွင်းမှ မဟုတ်ဘဲ ထင်ရှား ကျော်ကြားသူများနှင့် စီးပွားရေး နယ်ပယ်မှလာသည့် အချောင်သမားများသာ ဖြစ်လိမ့်မည်။ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အမျိုးသား နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ၏ အရေအတွက် နည်းလေလေ၊ စစ်အုပ်စုက အနိုင်ရရန် သေချာလေ ဖြစ်လိမ့်မည်။“မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လမ်းပြမြေပုံရဲ့ အဆင့် ၅ ဖြစ်တဲ့ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲဟာ အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်” ဟု စစ်အစိုးရ လိုလားသော အမျိုးသားညီလာခံ တက်ရောက်ခဲ့သူ ဖြစ်သည့် အကြီးတန်း ပုဂ္ဂိုလ်တဦးက ပြောကြားသွားသည်။ အဆိုပါ အမျိုးသားညီလာခံက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ် မူကြမ်းအတွက် အခြေခံမူများကို ချမှတ်ပေးခဲ့သည်။ ဤအခြေခံမူများက မည်သည့် ရွေးကောက်ခံ အစိုးရတက်တက် စစ်တပ်၏ လွှမ်းမိုး ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကို သေချာစေရန် အာမခံပေးထားသည်။“ဥပဒေစည်းကမ်းတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားပေမယ့် ဒီတခါတက်လာမဲ့ အစိုးရက ထိရောက်စွာ မရှိတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မရှိတဲ့ အစိုးရဖြစ်နေရင် နောက်တကြိမ် စစ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့ ကြုံရနိုင်တယ်ဆိုတာ စစ်အစိုးရက ကြိုတွက်ထားပုံရတယ်” ဟု အဆိုပါ အမျိုးသားညီလာခံ ကိုယ်စားလှယ်ကြီးက မကြာသေးခင်က ပြောကြားသွားခဲ့သည်။ သူက ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေတွင် ပါသည့် အရေးပေါ် အခြေအနေတရပ် ပေါ်ပေါက်ပါက သမတက တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထံ အာဏာ လွှဲပြောင်းပေးရမည့် အပိုဒ်ကို ရည်ညွှန်းပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ဤအခြေအနေကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် မှန်ကန်သော လမ်းကြောင်းဖြင့် သွားနိုင်ရေးအတွက် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲသည် ခြေလှမ်းတရပ် ဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြေခံကျသော အပြောင်းအလဲအချို့ကို ယင်းမတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ရလိမ့်မည်။လက်ရှိ ရှိနေသည့် လွတ်လပ်မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲများ ဆိုသည်မှာ ဤကိစ္စအတွက် မလုံလောက်သေးပါ။ ဤ အခက်အခဲကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် ပြည်တွင်း မီဒီယာများကို လူထုအား လွတ်လပ်စွာ သတင်းတင်ပြခွင့်များ ပေးအပ်ရမည်။ ဤမဲဆန္ဒပေးပွဲ၏ အရေးပါပုံကို ပြည်သူလူထုအား နိုးကြားသိရှိလာအောင် လုပ်ပေးရမည်၊ သူတို့၏ ရွေးချယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသိပေး တင်ပြနိုင်ရမည်၊ ဤကိစ္စသည် ဒီမိုကရေစီသို့ သွားရာလမ်းနှင့် စစ်အစိုးရကို ဖယ်ရှားရေး၌ အဘယ်မျှ အရေးပါ အရာရောက်ပုံကို လူထုအား တင်ပြ အသိပေးနိုင်ခွင့် ရှိစေရမည်။နိုင်ငံရေးကို စိတ်ဝင်စားဘွယ် ရှိသော်လည်း နိုင်ငံရေးနှင့် ဝေးဝေးနေလိုသည့် လူအများအပြား ယခုအခါ ပေါ်ပေါက်လာနေသည်။ စစ်အစိုးရက ဖန်တီးထားသောကြောင့် မြန်မာပြည်သူများ အကြောက်တရား အောက်တွင် နေနေရသည် ဆိုသည်မှာ မှန်ပါသည်။ ဤအကြောက်တရားကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် သူတို့အနေနှင့် ရေဒီယို နားထောင်နိုင်စွမ်း ရှိရမည်၊ အထူးသဖြင့် အကြားအမြင်များသည့် ပြည်ပ မီဒီယာများက ဖြန့်ချိပေးနေသည့် သတင်းစာများကို ဖတ်ခွင့် ရှိရမည်၊ တိုင်းပြည်၏ လာတော့မည့် နိုင်ငံရေး အရေးအခင်းကြီးများတွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင် ဆင်နွှဲကြရန် လိုသည်။ Summary only...
ဆောင်းပါး ငြိမ်းဝေ အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ 05 2008 12:42 - မြန်မာစံတော်ချိန် ဟေမန္တ ... ။ ၁၉၇၈-ခု ။ ဘေဂျင်းမြို့တခုလုံး နှင်းတွေ ဖုံးနေလျက်။ မြို့အရှေ့ဘက် ဆင်ခြေဖုံးတနေရာ။ လူဦးရေ အနည်းငယ်သာ နေထိုင်တဲ့ ရွာကလေးတရွာ။ ညစ်ပတ်နောက်ကျိနေတဲ့ ချောင်းကလေးတခုကို ကျော်ပြီး ဘေဂျင်းမြို့ နယ်နိမိတ်ထဲက သံရုံးရပ်ကွက်ဆီ လှမ်းမြင်နေရတဲ့နေရာ ... ။ ဒီရွာကလေးဟာ စိုက်ပျိုးရေး ရွာကလေးတရွာ ဆိုပေမယ့် တိတ်ဆိတ်မှုတော့ မရှိလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း မြို့တော်ကြီးရဲ့ မျက်ကွယ်ဖြစ်နေတဲ့ နေရာတနေရာ သဘောတော့ ဆောင်ပါတယ်။ ပြတင်းပေါက်တွေမှာ ဟောင်းနွမ်းလှတဲ့ ခန်းဆီးပိတ်စတွေ တပ်ထားတဲ့ တဲကလေးတလုံး။ အဲဒီ တဲကလေးထဲမှာ လူငယ် ခုနှစ်ယောက်ဟာ ခနော်နီခနော်နဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ ပုံနှိပ်စက်တလုံးကို ၀ိုင်းထိုင်နေကြပါတယ်။ အဲဒီ ခုနှစ်ယောက်ထဲက လူငယ်တယောက်ဟာ ကျနော်ပဲပေါ့။ သုံးရက်နဲ့သုံးည ရှိတဲ့အခါ "ယနေ့" လို့ အမည်ပေး ထားတဲ့ စာစောင်တခုကို ကျနော်တို့တတွေ အောင်မြင်စွာ ထုတ်ဝေ လိုက်နိုင်ကြပါတော့တယ်။ ဒါဟာဖြင့် ၁၉၄၉-ခုနှစ် ... ကွန်မြူနစ်ပါတီ အာဏာ ရလာပြီးနောက်ပိုင်း တရုတ်ပြည်မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် တရားမ၀င် ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ စာစောင်ပါပဲ။ ကျနော်တို့တတွေ မြို့တော်ကြီးထဲက စားသောက်ဆိုင် တဆိုင်ဆီ စက်ဘီးကိုယ်စီ စီးပြီး သွားခဲ့ကြပါတယ်။ အရက်ခွက်ကိုယ်စီ ကိုင်မြှောက်ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု အသီးအပွင့်အတွက် တိတ်ဆိတ်စွာပဲ ဂုဏ်ပြုပွဲ ကျင်းပ လိုက်ကြပါတယ်။ နောက်တနေ့ကြတော့ ကျနော်နဲ့ တခြား သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်၊ မြို့တော်ကြီးထဲ ၀င်လာကြပြီး "ယနေ့" ဂျာနယ် စာရွက်တွေကို နံရံတွေမှာ လိုက်ကပ်ကြပါတယ်။ ပုလိပ်တွေ မျက်စေ့လည်အောင်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ စက်ဘီး နံပါတ်ပြားတွေကိုလည်း တယောက်နဲ့တယောက် လဲပြီး စီးကြရပါတယ်။ ၁၉၇၈-ခု၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက်နေ့ လောက်ကြတော့ ဘေဂျင်းမြို့ထဲက အစိုးရရုံးတွေ၊ မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေ၊ တက္ကသိုလ် ကျောင်းဝန်းအတွင်းနဲ့ တီယံအာမင် ယင်ပြင်မှာ၊ "ယနေ့" ဂျာနယ်ကို လူတွေ ဖတ်ခွင့် ရခဲ့ကြပါပြီ။ ကျနော်တို့ ဖြန့်ဝေတဲ့ "ယနေ့" ဂျာနယ် အပေါ် လူတွေက ဘယ်လို သဘောထားနဲ့ တုန့်ပြန်ကြသလဲ ဆိုတာကို သိချင်တော့ နောက်ပိုင်းမှာ၊ လူစည်ကားတဲ့ နေရာတွေမှာ လူအုပ်ထဲရောပြီး၊ စာစောင်တွေ ဝေကြပါတယ်။ လူတွေဟာ အနှစ် (၃၀) အတွင်း၊ အခုလို ကဗျာ ဆောင်းပါး၊ ၀တ္ထုတွေကို တခါမှ မဖတ်ခဲ့ရ၊ မတွေ့ခဲ့ရလို့ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုပြီး အားတက်သရော ယူကြ၊ တောင်းကြ ဖတ်ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ "ယနေ့" ဂျာနယ် ဖြစ်လာဖို့အတွက် အဓိက မူလတွန်းအားကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၉၆၀ ခုနှစ် အလွန်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တာလို့ပဲ ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ မော်စီတုံးရဲ့ မဟာပစ္စည်းမဲ့ တော်လှန်ရေး ကာလတုန်းကပါ။ ဆင်းရဲနဲ့ အလယ် အလတ်တန်းစား လယ်သမား လူတန်းစားရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ဆိုပြီး အထက်တန်း ကျောင်းသားတွေကို တပြည်လုံးအနှံ့ စေလွှတ်လိုက်တဲ့အချိန်။ မော်စီတုံးရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အတိုက်အခံတွေကို အသံတိတ်သွားစေဖို့၊ ပုန်ကန် ခြားနားချင်သူတွေကို ချေမှုန်းပစ်ဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း၊ အမြင့်ပိုင်းက ကျလာတဲ့ တပ်နီလူငယ်တွေကို တွန်းအားတခု ပေးတဲ့အနေနဲ့၊ သူတို့တတွေ ... လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ် တင်နေတဲ့အကြွေးကို ဆပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုပြီး မော်စီတုံးရဲ့ ဝေါဟာရ အရပြောရရင် "ပြည်သူ့ဘုံအဖွဲ့" ထဲက ကျေးလက်ဘ၀ တကယ့်လက်တွေ့နဲ့ သူတို့ရဲ့ ယူဆချက်တွေ၊ ထင်မြင်ချက်တွေ ဘယ်လောက်အထိ ကွာဟနေသလဲဆိုတာ သိဖို့ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျေးလက်တွေကို ပို့လိုက်တာပါ။ ဒီတပ်နီ လူငယ်တွေဟာ အမှန်တရား ရှာဖို့အတွက် စာအုပ်တွေဆီ တခါ ပြန်လာကြရတာလဲ ရှိပါတယ်။ သူတို့စိတ်ထဲက ရှုပ်ထွေး မှားယွင်းနေတဲ့ ခံစားချက်တွေကိုလည်း ဖွင့်ဟ ရေးသားစေပါတယ်။ ဆောင်းရာသီ ရောက်တဲ့ အချိန်တိုင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွေ စတဲ့ အချိန်တိုင်း၊ တချို့တပ်နီလူငယ်တွေဟာ "ဘေဂျင်း" ကို ပြန်လာပြီး စာအုပ်တွေလဲကြ၊ သာမန် လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးချင် လုပ်ချင်တဲ့ အုပ်စုတွေနဲ့ တွေ့ကြရပါတယ်။ ဒီတုန်းက ၊ ကျနော်က အသက်နှစ်ဆယ်။ "ရှီဆီ" ရဲ့ ကဗျာတွေကို ဖတ်ရတဲ့အခါ ကျနော် ဘယ်လောက်အထိ စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို အခုထက်ထိ ကျနော် မမေ့နိုင်ဘူး။ "ရှီဆီ" ဆိုတာက စာပေ နယ်ပယ်မှာ "လက်ချောင်း ကလေးများရဲ့ထိပ်" ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ကဗျာဆရာပါပဲ။ "ရှီဆီ" ဟာ ၁၉၆၇- ခုနှစ်မှာ စာတွေ စတင်ပြီး ရေးပါတယ်။ သူဟာ နောင် နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော် အကြာမှာ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် "ကဗျာသစ် လှုပ်ရှားမှု" ကို အုပ်မြစ်ချသူ တဦးပါပဲ။ သူ့ကဗျာတွေဟာ ကျနော်တို့ကို နိုင်ငံရေးအရ ရိုက်သွင်းမှုတွေ နဲ့ ကင်းပြတ်စေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လတ်ဆတ် သစ်လွင်တဲ့ နိမိတ်ပုံတွေ၊ သူ့ကဗျာတွေရဲ့ ရွတ်ဖတ်လို့ ကောင်းလှတဲ့ နရီ အနိမ့် အမြင့်တွေဟာ လူငယ်တွေကို ယစ်မူးစေတော့တာပေါ့။ လူငယ်တွေဟာ သူ့ကဗျာတွေကို လက်ရေးနဲ့ ကူးပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောင် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ "လက်ချောင်းကလေးများရဲ့ ထိပ်" နဲ့ ကျနော် တွေ့ခွင့်ရပါတယ်။ ဒီအချိန်ကြတော့ သူဟာ စိတ်ဝေဒနာရှင်တဦး ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။ သူဟာ သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး အချိန်တွေကို သူ့အိမ်နဲ့ ဆေးရုံ၊ ခေါက်တုန့် ခေါက်ပြန်ကူးရင်း ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ "လက်ချောင်းကလေးများရဲ့ထိပ်" ရဲ့ စာတွေကိုဖတ်ပြီး ကျနော်ဟာ ကဗျာရေးတဲ့အလုပ်ကို တိုးမြှင့်ပြီး လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတုန်းက ကျနော်က ဆောက်လုပ်ရေး အလုပ်သမားပါ။ ဘေဂျင်းမြို့နဲ့ မိုင်နှစ်ရာ လောက် ဝေးတဲ့ လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေး စက်ရုံတရုံမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာ ကျနော်ဟာ တော်တော့ကို အထီးကျန်ဆန်စွာ နေခဲ့ရပါတယ်။ အခုလို အထီးကျန်ဆန်တဲ့အခါ ကျနော့်စိတ်ကို ထွက်ပေါက်ပေးနိုင်ဖို့ တစုံတခုတော့ လိုအပ်လာတာပေါ့။ ဒီတုန်းက ကဗျာဆရာ တယောက်အနေနဲ့ "မော်စီတုံး" ရဲ့ သြဇာတွေက ကျနော့်အပေါ် ရှိခဲ့တယ်။ မော်စီတုံးရေးတဲ့ ကဗျာပုံစံဖြစ်တဲ့ တရုတ် ရှေးဟောင်းကဗျာ ရေးနည်းကို ကျနော်ယူခဲ့တယ်။ လူတိုင်းလိုလိုပဲ မော်စီတုံးရဲ့ ကဗျာတချို့ကို တုပပြီး ရေးခဲ့ကြတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်။ ကျနော်လည်းပဲ ရှေးဟန်နဲ့ ကဗျာတွေရေးတာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ပိုပြီး ရှုပ်ထွေးခက်ခဲလာနေတဲ့ ခံစားချက်တွေ၊ ဘ၀အလွမ်း အမောတွေ၊ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ခွဲခွါနေရသူရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဒီပုံစံခွက် ကဗျာရေးဖွဲ့နည်းဟာ မလုံလောက်တော့ဘူး ဆိုတာကို ကျနော် ချက်ချင်း သိလာခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ကွက်အတွင်း အဆောင်တခုမှာ ကျနော်ဟာ တခြားလူ ဒါဇင်ပေါင်းများစွာနဲ့ အတူနေခဲ့ပါတယ်။ သန်းခေါင်ကျော် သန်းခေါင်လွဲ အချိန်ကြတော့ အိပ်ပျော်လို့ ဟောက်တဲ့ အသံအမျိုးမျိုးကို ခြံရံပြီး စားပွဲတင် မီးအိမ်တခု အောက်မှာ၊ ကျနော်ကဗျာတွေရေး၊ စာတွေ ဖတ်တော့တာပါပဲ။ ဒိနောက်ပိုင်းမှာ အပျော်တမ်း ဓါတ်ပုံရိုက်အလုပ်ကို အကြောင်းပြုပြီး၊ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး အဖွဲ့တဖွဲ့ကို အဲဒီ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ကွက်ထဲမှာပဲ ဖွဲ့ကြပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ အမှောင်ခန်းတခုကိုလည်း ဖန်တီးခွင့် ရလာခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အခန်းထဲမှာပဲ ကျနော့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လ အနည်းငယ် အကြာမှာတော့ ကျနော်ဟာ ၀တ္ထုလတ်တပုဒ် ရေးပြီးခဲ့ပြီး၊ ကဗျာ အတော်များများကိုလည်း စီစစ် တည်းဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတုန်းမှာပဲ ကျနော်ရဲ့သူငယ်ချင်း "ရှော်ယီဖန်" အဖမ်းခံရပါတယ်။ သူဟာ မြေအောက် စာပေလုပ်ငန်းတွေကို စုစည်းရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စာရွက်စာတန်းတွေကို ပုလိပ်က အသေအချာ စစ်ဆေးတဲ့အခါ ကျနော့်ရဲ့ ၀တ္ထုနဲ့ ကဗျာတွေကိုလည်း တွေ့သွားကြပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော့်ကို မူလ အလုပ်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ အလုပ်သမား ကြီးကြပ်ရေး အလုပ်ကို ပြန်လုပ်ဖို့ အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်ကတည်းက ကျနော်ဟာ အချိန်မရွေး အဖမ်းခံရနိုင်တဲ့ အခြေအနေအတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို စတင်ပြီး ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင် အချိန်တွေမှာ ကားဘီးလိမ့်သံ ကြားရရင် ကျနော်က အိပ်ယာထဲက အထိတ်တလန့်နဲ့ အိပ်မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ပုလိပ်တွေဟာ ကျနော့် ကဗျာတွေကို ခေါင်းစဉ်တပ် စွပ်စွဲဖို့အတွက် အဲသလောက်အထိ နားမလည်ကြပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ စာပေ သုတေသန ဌာနကို အကူအညီ တောင်းကြပါတယ်။ စာပေ သုတေသန ဌာနကလည်း သူတို့ကို ကူညီကြပါတယ်။ အဲဒီ အကူအညီကြောင့်ပဲ ကျနော်ဟာ အဖမ်းခံရမယ့်ဘေးက လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော့် ကဗျာတွေဟာ အနောက်တိုင်း ကဗျာတွေကို ကူးချထားတာသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စာပေသုတေသနဌာန အကြံပေးတွေရဲ့ ကောက်ချက်က ကျနော့်ကို ကယ်လိုက်တာပါ။အဲဒီအချိန် အဲဒီကာလကတော့ တနည်းအားဖြင့် စာအုပ်တွေ မြေမြှုပ် သဂြိုလ်ခံရတဲ့ ကာလပါပဲ။ စာအုပ်တွေဟာ လူတွေရဲ့မြင်ကွင်း နောက်ကွယ်မှာပဲ ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ ပိတ်ထားတဲ့ စာကြည့်တိုက်တွေထဲ ၀င်ပြီး စာအုပ်တွေ ခိုးတာမျိုး၊ စာအုပ် အဟောင်းဆိုင်တွေထဲမှာ စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် ဆန်ကာချပြီး စာအုပ်ရှာရ တာမျိုး၊ တခြား ကျနော်တို့လို စာအုပ်တွေကို တောနင်းပြီး ရှာဖွေနေကြတဲ့ သူတွေဆီက ငှါးဖတ်ရတာမျိုး ...။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ကြားမှာ ဒီတုန်းက "ပေါရှု" ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရစကားလုံး (လှည့်ပတ် ပြေးနေသော စာအုပ်) အသစ်တခု တိုးလာခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်ကောင်းတအုပ် တွေ့ဖို့ဆိုရင် သင်ဟာ နေရာအနှံ့ ပြေးရပါလိမ့်မယ်။ ဇွဲလည်း ကောင်းရပါလိမ့်မယ်။ ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်း လုပ်တတ်ရမယ်။ ကတိ တည်ရမယ်။ အပြန်အလှန် အပေးအယူ ရှိရပါလိမ့်မယ် ...။လူငယ်တဦးအဖို့ အကြောင်းအရာတခုကို ဖတ်ပြီဆိုရင် သူ့ဘ၀အတွက် တစုံတခုတော့ ရကိုရရပါလိမ့်မယ်။ ပထမတော့ ကျနော်တို့ဟာ စာအစုံဖတ်ရင်းနဲ့ အခြေအတင် ငြင်းခုန်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်ကောင်း သန်ပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ကျနော်တို့ဟာ ရွေးချယ် စီစစ် လာတတ်ကြရမှာပါ။ ကျနော်တို့ဟာ "အ၀ါရောင် အဖုံးဖုံးထားတဲ့ စာအုပ်တွေ" အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ရဲ့ နှလုံးသားကို တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီစာအုပ်တွေဟာ အတွဲပေါင်းတရာရှိတဲ့ စာပေဆိုင်ရာ စာအုပ်တွေပါပဲ။ ဒီစာအုပ်တွေဟာ ဥရောပ ခေတ်ပေါ်စာပေ၊ ဆိုဗီယက်ယူနီယံနဲ့ အရှေ့ဥရောပ "နှင်းခဲပျော်ချိန်" ကာလ စာပေ အကြောင်းအရာတွေကို စုစည်းတဲ့ စာအုပ်တွေပါပဲ။ တကယ်တော့ ဒီစာအုပ်တွေဟာ အဆင့်မြင့် တာဝန်ရှိသူတွေသာ ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ ကန့်သတ်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေပါ။ ပြီးတော့ စောင်ရေ အင်မတန်နည်းစွာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီး၊ တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ကန့်သတ်ထားတာပါ။ "ဘေဂျင်း" မှာ ရှိတဲ့ သာမာန် လွတ်လပ်လပ် နေချင်တွေးချင်သူတွေ ကြားထဲမှာတော့ လေးနက်တဲ့ အကြောင်းအရာ ရတနာသိုက်ကို လိုက်လံရှာဖွေတဲ့သူတွေ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရပါတယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် စာအုပ်ချင်းလဲဖတ်၊ ငှါးဖတ်ဖို့ အချိန်ပြည့် စီစဉ်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ဟာ ဆိုရင် တခါတရံမှာ အချင်းချင်းကြားမှာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ ရက်အနည်းငယ် ယူရတာမျိုး၊ နာရီ သတ်မှတ်ချက်နဲ့တကွ၊ စာအုပ်တွေ ဖလှယ်ပြီးဖတ်ကြဖို့ အချိန်ဇယား ဆွဲတာမျိုးတွေအထိ လုပ်ကြပါတယ်။မြေအောက် စာရေးဆရာတွေအဖို့၊ ဒီ "အ၀ါရောင်အဖုံးနဲ့ စာအုပ်တွေ" ဟာ စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ ခိုလှုံလို့ရတဲ့ တခုတည်းသော မြင်ကွင်းအသစ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီစာပေ ပုံသဏ္ဌန်ဟာဖြင့် တရားဝင် တည်ရှိနေတဲ့ ဆိုရှယ်လစ် သရုပ်မှန်စာပေနဲ့ အခြေခံက အစ ကွဲပြားမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ နမူနာကိုတော့ ရခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကို အဲဒီအခါတုန်းက "ဘာသာပြန်စတိုင်" လို့ ခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်တော့ တရုတ် စာရေးဆရာတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ၁၉၄၀-ခုနှစ် နောက်ပိုင်း အထင်ရှားဆုံး ကဗျာဆရာတွေ အပါအ၀င်ဖြစ်တဲ့ "မူဒန်" ၊ "ယွမ်ဂေရှား" ၊ "ချန်ဇင် ဂရောင်း" ၊ "ဇန်မင်း" နဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ "သစ်ရွက် ကိုးရွက်စာပေအုပ်စု" အဖြစ် ထင်ရှားလာသူတွေ၊ ပြီးတော့ ၁၉၄၈-ခုနှစ် နောက်ပိုင်း ... သူတို့တတွေက ကျနော်တို့အတွက် ပေးနိုင်ခဲ့တာတွေကတော့၊ နိုင်ငံရေး အသစ် လမ်းညွှန်ချက်ရဲ့ အောက်မှာ တီထွင် စမ်းသပ်ရေးဖွဲ့ကြဖို့။ ပြီးတော့ နိုင်ငံရပ်ခြားစာပေတွေကို သုတေသန ပြုကြဖို့၊ ဘာသာပြန်ကြဖို့ တွန်းအားပေး ခဲ့ကြတာတွေပါပဲ။ အဲဒီ "တရုတ် ဘာသာပြန်စတိုင်" ဟာ ကျနော်တို့ မျိုးဆက်ကို မွေးဖွားပေးလိုက်ပြီး၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကို ဖော်ပြနိုင်တဲ့၊ ပို့ဆောင်ရေး ယာဉ်တခု သဘောဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ (စာပေယာဉ်တခု သဘောဆောင်ခဲ့ပါတယ်။) ၁၉၇၈-ခုနှစ် နွေဦးမှာ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီ ထိပ်ပိုင်း အာဏာ လွန်ဆွဲမှုတခုအဖြစ်၊ ယာယီအားဖြင့် ယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ်မှာ ပြန်လည် လန်းဆန်းရေး ကာလဆိုတာ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ မြေအောက်မှာပဲ ထုတ်ဝေခဲ့ရတဲ့ စာစောင်တွေ၊ ဥပမာအားဖြင့် "ယနေ့" လို စာစောင်တွေဟာ၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲ ထုတ်ဝေလာနိုင်ကြပါတယ်။ တခြား တရားမ၀င် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ၊ ဓါတ်ပုံပညာ နယ်ပယ်အဆုံး လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ အလုပ် လုပ်လာနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်လာတာတွေဟာ တရားဝင် ရေးသားထားတဲ့ ဟောပြောချက်တွေ၊ ရေးသားချက်တွေကို အဓိက စိန်ခေါ်တဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အနေနဲ့ အာဏာပိုင်တွေကြားမှာ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။"ယနေ့" စာစောင်မှာ၊ အထူးသဖြင့် ကဗျာတွေကို ဦးစားပေး အများဆုံးဖော်ပြပြီး၊ "မောင်စီ" ၊ "ဂူချန်" ၊ "ဒေါဒေါ" ၊ "ရှုတင်း" ၊ "ယန်လီ" ၊ "ယောင်လန်" ၊ "ဇန်ဟီ" တို့ရဲ့ စာပေတွေနဲ့ တခြား အဓိကကျတဲ့ ကဗျာဆရာ တွေရဲ့ စာပေလက်ရာတွေ၊ ကဗျာတွေကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီတုန်းက ကျနော်တို့ရဲ့ ပုံနှိပ်စက်က အင်မတန် ရှေးကျတဲ့ စက်ကြီးဖြစ်ပြီး၊ ကျနော်တို့ရဲ့ အယ်ဒီတာ ရုံးခန်းဆိုတာကလည်း မိသားစု လက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်တဲ့ အခန်းတခန်းထက် နည်းနည်းပဲ ကျယ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ (၂) နှစ် အတွင်း၊ မဂ္ဂဇင်း (၉) ခု နဲ့ စာအုပ် (၄) အုပ်ကို ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့ကြပါတယ်။ကျနော်တို့ဟာ တခြား စာပေလှုပ်ရှားမှု တချို့ကိုလည်း စည်းရုံး လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါသေးတယ်။ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားထု အတွင်းမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ စာပေလုပ်ငန်းတွေကို လစဉ် ပုံမှန် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ပါတယ်။ ၁၉၇၉-ခု၊ နွေဦးမှာတော့ ဘေဂျင်းမြို့၊ ယူယောင်တန် ပန်းခြံထဲမှာ ကဗျာရွတ်ပွဲတခုကို ကျနော်တို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပါတယ်။ နောင်တချိန်မှာ ထင်ရှားတဲ့ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ ဖြစ်လာမယ့် "ချန်ကွေ့" လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတုန်းက သူက "ဘေဂျင်း" ရုပ်ရှင် အကယ်ဒမီကျောင်းက ကျောင်းသားတယောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ပုလိပ်တွေဟာ ကျနော်တို့ကို နီးနီးကပ်ကပ် စောင့်ကြည့်ကြပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်တော့ ကျနော်တို့ရဲ့ ကဗျာရွတ်သံ စာကြောင်း တကြောင်းချင်းစီကို၊ လူတထောင်လောက်က ထိုင်ပြီး စိတ်ပါလက်ပါ နားထောင်ခဲ့ကြတဲ့ ကိစ္စဟာ ပုလိပ်တွေ အတွက် ပဟေဠိတပုဒ် ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပစေ ... ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့တကွ အဲဒီ တိုတောင်းလှတဲ့ ခဏပန်း အခြေအနေဟာ အလျှင်အမြန် နိဂုံးချုပ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ "တိန့်ရှောင်ပင်" ဟာ "ဝေဂျင်ရှန်း" နဲ့ တခြား ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှား တက်ကြွသူတွေကို ဖမ်းဆီးဖို့ ချက်ချင်းပဲ အမိန့်ပေးပါတော့တယ်။ "ယနေ့" စာစောင်ကို ၁၉၈၀-ခု၊ ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ပိတ်ပစ်ဖို့ အမိန့်ထုတ်ခံရတဲ့ အချိန် အာဏာပိုင်တွေက ကျနော့်အပေါ် သံသယ ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ "ယနေ့" စာစောင်နဲ့ ကျနော် ပါဝင် ပါတ်သက်ခဲ့မှုအပေါ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည် ဝေဖန်ဆန်းစစ်ဖို့ ဖိအားပေးကြပါတယ်။ ကျနော်ဟာ "ဇင်းဒေါ" မှာ အပျော်ခရီး ထွက်နေရာက ချက်ချင်း ပြန်လာခဲ့ပြီး အဲသလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်ဝေဖန်ရေး လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ ကျနော်ဟာ ရာထူး ချထားခံရတဲ့ အကျိုးပါပဲ။ တညနေခင်းမှာတော့ ကျနော့်လိုပဲ ရာထူးချထားခံရတဲ့ ကျနော့်ရဲ့သူငယ်ချင်းတယောက်က၊ ကျနော်ဟာ အဖမ်းခံရမယ့် စာရင်းထဲမှာ ပါနေတဲ့ အကြောင်း ဒီစာရင်းကို သူ့အနေနဲ့ ဌာနတွင်း လျှို့ဝှက် အစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်း ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် လွတ်နိုင်ပါဦးမလား ... ။ ကျနော့်ဇနီးနဲ့ ကျနော်ဟာ ညဉ့်နက် သန်းခေါင်တိုင်သည် အထိ စကားပြောခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တော့ ဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီ နေသွားရင်း အသေအချာ စောင့်ကြည့်နေဖို့ကိုပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေ အချိန်တော်တော်ကြာ နောက်တကြိမ် ထပ်ပြီး ဖြစ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဒီတခါမှာတော့ ကျနော်ဟာ နောက်တစ်ကြိမ် ကံအားလျော်စွာ အသက်ရှင် ရပ်တည်လို့ ရနိုင်ပြန်ပြီလို့ပဲ ခံစားမိပြန်ပါတယ်။"ယနေ့" စာစောင်ကတော့၊ အပိတ်ခံလိုက်ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ စာစောင်ထဲက ကဗျာတွေကတော့ တရားဝင် ထုတ်ဝေခွင့်ရတဲ့ မဂ္ဂဇင်းတွေထဲက ယေဘုယျ ခေါင်းစဉ်တခုဖြစ်တဲ့ "မရှင်းလင်းသော ကဗျာများ" ခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာ စတင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံနဲ့အ၀ှမ်း ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးကြရတဲ့ "အဲဒီ မရှင်းလင်းတဲ့ ကဗျာတွေ" ဟာ နှစ်များစွာ ကြာတဲ့အထိ အပြင်းအထန် ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ လူငယ် စာဖတ်ပရိသတ်ဟာ တရားဝင် ဘာသာဗေဒနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေ အတွင်းမှာပဲ အသက်ရှူလို့ရတဲ့ လေအသစ်ကို တွေ့သွားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ ဆွဲဆောင် ဖမ်းစားမှုကြောင့်ပဲ လူတိုင်းလိုလိုဟာ ကဗျာရေးဖွဲ့တဲ့ အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ကြပါတယ်။ ကဗျာကလပ်တွေနဲ့ ဆက်သွယ် ပူးပေါင်းလာခဲ့ကြပါတယ်။ ကဗျာတွေ စုပေါင်း ထုတ်ဝေကြ ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကဗျာတွေဟာ စာမျက်နှာတခုရဲု့ ဘေးမှာရှိတဲ့ ကွက်လပ်မာဂျင်ထဲကို တွန်းပို့ခြင်း နောက်တကြိမ် ကြုံရပြန်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ ကြုံခဲ့သည့်တိုင် "ယနေ့" စာစောင်ဟာ ကဗျာဆရာ မျိုးဆက်သစ်တခုရဲ့အပေါ်မှာ သူ့ကိုယ်သူ တိမ်တိုက်တခုလို ဆွဲချိပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ "တတိယမျိုးဆက်" လို့ ခေါ်တဲ့ ကဗျာဆရာတွေဟာလည်း "ယနေ့ဂျာနယ် ကဗျာဆရာတွေ" နဲ့ မတူကွဲပြား ခြားနားလာခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ဘာပြုလို့လည်းဆိုတော့ သူတို့ဟာ ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး နောက်ကြမှ ကြီးပြင်းလာကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေ ဖြစ်လို့ပါပဲ။ သူတို့ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ ပညာရေးနဲ့ ပျော်မွေ့နေကြပါပြီ။ ဒီအထဲက ပမာဏတချို့အတွက်တော့ သူတို့ဟာ သမိုင်းရဲ့ လေးပင်တဲ့ တာဝန်တွေပိပြီး လဲကျသွားနိုင်ပါသေးတယ်။ တချို့ကတော့ ဒီကနေ့ရဲ့ အဖြစ်အပျက် အမှန်တွေကို ပိုပြီး တိုက်ရိုက် မြင်တွေ့နိုင် ကြပါတယ်။ တချို့ကတော့ အဓိကနဲ့ သာမညထဲက မိတ်ဖက် အသံတွေကို ရွေးပြီး ရေးနိုင်သားနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီလို အရေးပါတဲ့ ကဗျာဆရာ အုပ်စုထဲမှာ "ဘေဟွာ" ၊ "ဇန်ဇောင်" ၊ "ဆီချွန်" ၊ "ဟွေယောင်ဂျန်ဂီ" ၊ "ဆောင်လင်" ၊ "ဇေယောင်မင်း" ၊ "ဟန်ဒေါင်" ၊ "ဇန်းဇန်" တို့ ပါဝင်ကြပါတယ်။ အများစုဟာ "ဇီချွန်" ပြည်နယ်က ဖြစ်ကြပါ တယ်။ အများစုဟာ ကျနော့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဟာ တယောက်နဲ့ တယောက် မတူညီတဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေကို ဖလှယ်ကြဖို့ ဆိုတဲ့ အချက်ကို တွေ့လာကြပါတယ်။ တီယံအာမင်ယင်ပြင်ပေါ်မှာ သေနတ်သံတွေ ကြားရပြီးတဲ့ နောက်တနှစ်၊ ၁၉၉၀-ခုနှစ်မှာ တရုတ် ကဗျာဆရာ အုပ်စုတစုဟာ နော်ဝေးနိုင်ငံ "အော်စလို" မြို့မှာ ဆုံကြပါတယ်။ "ယနေ့" စာစောင်ကို ပြန်လည် လန်းဆန်းအောင် လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီ အချိန်က စလို့ ပြန်ပြီး ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေလာလိုက်တာ ဒီကနေ့အထိ ပါပဲ။ "ယနေ့" စာစောင် ရဲ့ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်သမိုင်း ...၊ သူ့ရဲ့ မွေးဖွားခြင်းမှသည် သေဆုံးခြင်း၊ တခါ ... သူ့ရဲ့ ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း ...၊ ဒါတွေဟာ ခေတ်ပြိုင် တရုတ်ကဗျာရဲ့ နိုးကြားတက်ကြွခြင်း လက္ခဏတွေလို့ပဲ ဆိုရပါ လိမ့်မယ်။ ။ ( "THE POETRY OF OUR WORLD" စာအုပ်မှ၊ တရုတ်ကဗျာဆရာ "BEI DAO" ရဲ့ "HOW THE REVOLUTION OCCURRED IN CHINESE POETRY" ဆောင်းပါးကို ဆီလျော်အောင် ဘာသာ ပြန်ဆိုပါတယ်။
မဲဆောက်မှာ သမ္မတကတော်ခရီးစဉ်အတွက် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မြန်မာအလုပ်သမား (၂၀၀) ကျော် အဖမ်းခံရNEJ/ ၅ သြဂုတ် ၂၀၀၈ယမန်နေ့ညနေက အဖမ်းခံရသည့် မြန်မာများကို မဲဆောက်ရဲစခန်းတွင် တွေ့ရစဉ်မကြာခင် လာရောက်မည့် အမေရိကန်သမ္မကတော် လော်ရာဘုရ်၏ လုံခြုံရေးတွက် မဲဆောက် မြို့တွင် တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်နေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား (၂၀၀) ခန့်ကို အာဏာပိုင်များက ယမန်နေ့ညက ဖမ်းလိုက်သည်။ယခုဖမ်းဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရဲဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး နိုင်ကျစ်ရာစာ မဟီ မေရမ်က “လော်ရာဘုရ်ှရဲ့ ခရီးစဉ်လုံခြုံရေးအတွက် တာ့ခရိုင်ဝန်နဲ့ တာ့ခရိုင်ရဲမှူးတို့ရဲ့ လုံခြုံရေး အစီအစဉ်အရ မြန်မာအများစု နေထိုင်တဲ့ ရပ်ကွက်တွေကို ၀င်ရောက်ရှင်းလင်းတာဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။အဆိုပါမြန်မာ (၂၀၀) ကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှုဖြင့် မြန်မာဘက်ခြမ်း မြ၀တီမြို့ သို့ပြန်ပို့မည် ဖြစ်သည်ဟု ရဲ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးက သတင်းထောက်များအား ပြောကြားသည်။အဖမ်းခံရသူ ကိုအောင်ဝင်းက “သူလာတာ မြန်မာတွေအတွက် အကျိုးရှိတာ၊ မရှိတာ အသာထား အခုလောလောဆယ် မြန်မာတွေ အဖမ်းခံနေရပြီး ဟိုဘက်ကမ်း သွားသွန်မှာနဲ့ဆိုရင် လေးငါးဆယ် ရက်တော့ အလုပ်ပျက်ပြီး မိသားစုကလည်းများတော့ ဒီလို တချီတချီ ထိလိုက်ရင် မချောင်ဘူး” ပြောသည်။အဝေးသင်တက်နေသည့် အထည်ချုပ် အလုပ်သမတဦးဖြစ်သူ မစန်းက “ဒီနေ့ လစာထုတ်ရက်မှာ အဖမ်းခံရတယ်။ မြ၀တီကို သွားမှာနဲ့ လာမှာနဲ့ဆိုရင် ကုန်ပြီး။ ကျမ အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘန်ကီ မွန်းတောင် ချာလပတ်လည်သွားတာပဲ။ ဒီလိုနယ်စပ်မှာ လာတာလောက်တော့ ဖိုးသန်းရွှေကြီး ရီမှာပေါ့” ဟု မဲဆောက် အချုပ်ခန်းအတွင်းမှ ပြောသည်။ယနေ့တွင်လည်း မဲဆောက်ဒေသအတွင်းရှိ မြန်မာအများစု နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်များနှင့် မြို့ပြင်ရှိ ရဲဂိတ်များတွင် ပုံမှန်ထက် အဖမ်းအဆီးနှင့် စစ်ဆေးမှုများ ရှိကြောင်း၊ အချို့နေရာများတွင် စစ်သုံး ခွေးနှင့် မိုင်းရှာကိရိယာများ သုံးကာ စစ်ဆေးကြသည်ဟု နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းမှ မဲဆောက်လာသူ တဦးက လမ်းခရီး အခြေအနေများကို ပြောပြသည်။မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူများ၏ စုရပ်များအား ဒေသခံ အာဏာပိုင်များမှ တစုံတရာ ၀င်ရောက် စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း အာဏာပိုင်များ အလိုမကျဖြစ်မည့် ကိစ္စမျိုး မဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုအပ်သည့် စီိစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသည်ဟု တာဝန်ရှိသူ တဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။လာမည့်ကြာသပတေးနေ့တွင် အမေရိကန်သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှသည် မဲဆောက်မြို့သို့ လာရောက်ပြီး မယ်တော်ဆေးခန်းနှင့် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းသို့ သွားရောက် လေ့လာမည်ဖြစ် သည်။ ။ ကိုဇော်သက်ထွေး မိသားစုနှင့် တွေ့ခွင့်ရ ဖနိဒါ အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ 05 2008 20:28 - မြန်မာစံတော်ချိန် ချင်းမိုင်။ ။ အင်းစိန်ထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် လေဘေးဒုက္ခသည်များ ကူညီပေးသူနှင့် အားကစားဆောင်းပါး ရေးသူ ကိုဇော်သက်ထွေးကို ယနေ့တွင် မိသားစုဝင်များက တွေ့ခွင့်ရခဲ့သည်။၂ လခန့်ကြာ ထိန်းသိမ်းပြီးနောက် ပြီးခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ကိုဇော်သက်ထွေး ခေါ် ကိုသက်ဇော်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့သော်လည်း မိသားစုနှင့် တွေ့ဆုံခွင့်မပြုဘဲ ယနေ့မှ ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။“ဒီနေ့ ပထမဆုံး တွေ့တယ်ဆိုတော့ အကြာကြီး စကားပြောဖြစ်တယ်။ အိမ်က ယူခဲ့သမျှ အကုန်ပေးလို့ ရတယ်။ ၁၂ နာရီလောက်မှာ တွေ့ခဲ့တယ်။ ကျန်းမာပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ ပိန်သွားတယ်။ အထဲမှာ နေတော့လေ” ဟု ကိုဇော်သက်ထွေး၏ ဇနီးသည် မခိုင်ချိုဇော်ဝင်းတင့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။သူက ဆက်ပြီး “မတွေ့တာ ၂ လလောက် ရှိသွားပြီ ဆိုတော့ ဝမ်းလည်းသာတယ်။ ကျန်းမာတယ်၊ ကျန်တာ နောက်မှ ရှင်းရမယ်လေ။ စိတ်ထဲမှာ အင်းစိန်မှာ ရောက်ပြီး သိပ်မကြာ တွေ့လို့ရတော့ ပျော်ပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ၃-၄ လမှ ပြန်တွေ့လို့ ရတယ်လို့ ကြားဖူးထားတယ် ဆိုတော့လေ။ သမီးလေးကိုလည်း ခေါ်သွားတော့ သူလည်း တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲ” ဟု ဆက်ပြောသည်။ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ပထမအကြိမ် အင်းစိန်ထောင် အနောက်ပိုင်းခရိုင် အထူးတရားရုံးတွင် လူရွှင်တော် ကိုဇာဂနာ၊ ကိုဇော်သက်ထွေးနှင့် အခြား ပုဂ္ဂိုလ် ၅ ဦးအား ရုံးထုတ်ခဲ့ကာ၊ သူတို့ကို လူထု မငြိမ်မသက် ဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်မှု - ပုဒ်မ ၅ဝ၅ (ခ) အပြင် အခြားပုဒ်မများဖြင့် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ တရားရုံးက ရုံးချိန်းရက်ကို ယခုလ ၇ ရက်နေ့သို့ ပေးခဲ့သည်။ဗဟိုတရားရုံး ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က “အမှုက တော်တော်များတယ် ပြောတယ်။ အနည်းဆုံး ၆ ခုလောက် ရှိတယ် ပြောတယ်။ အန်ကယ်တို့လည်း မနေ့ကမှ power ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ နောက် ၇ ရက်မှာ အသေးစိတ် သိရမယ်” ဟု ပြောသည်။အလားတူ ယမန်နေ့က ဟာသ သရုပ်ဆောင် ကိုဇာဂနာကိုလည်း မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံခွင့် ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။နာဂစ်မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များကို ထောက်ပံ့ကူညီနေသည့် ကိုဇာဂနာအား အာဏာပိုင်များက ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးကာ၊ အတူလက်တွဲ လုပ်ဆောင်နေသည့် ကိုဇော်သက်ထွေးကိုမူ ဇွန်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့သည်။ကိုဇော်သက်ထွေးသည် မြန်မာ့အားကစား လောကတွင် အဂတိ လိုက်စားမှုများအကြောင်း ရေးသားခဲ့သည့် ဆောင်းပါးတပုဒ်ကြောင့် အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ၂ဝဝ၃ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် သေဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်သို့ ပြစ်ဒဏ်လျှော့ချခံရကာ ပြန်လွတ်ခဲ့သည်။ ကိုဇာဂနာသည် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာတွင် ဆန္ဒပြ သံဃာတော်များကို ဆွမ်းကပ် လှူဒါန်းခဲ့သဖြင့် ၂၁ ရက်ကြာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသေးသည်။ သူတို့ နှစ်ဦးအား မည်သည့်နေရာတွင် ဖမ်းဆီးထားခြင်းကို မသိရဘဲ တလကြာ ထိန်းသိမ်းထားပြီး ရုံးထုတ် စစ်ဆေးခဲ့ရာတွင် မိသားစုများပင် မသိရှိခဲ့ရပေ။ယနေ့တွင် အင်းစိန်ထောင်တွင်း ရုံးချိန်းရက် ဖြစ်သော်လည်း ကုလလူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် သောမတ်စ် အိုဟေးကွင်တန်နာသည် လာရောက် လည်ပတ်နေသဖြင့် ဘလောတ်ဂါ နေဘုန်းလတ်နှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုစည်သူမောင်၊ လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ် မြှင့်တင်သူများ ကွန်ရက်မှ ကိုမျိုးသန့်၊ ၂ဝဝ၇ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုဇင်လင်းအောင်၊ ကိုသိန်းဆွေ၊ ကိုရဲမင်းဦး၊ မောင်ရဲမြတ်ဟိန်း၊ ကိုကြည်ဖြူတို့အား ရုံးမထုတ်ဘဲ ရက်ချိန်းသာပေးခဲ့ကြောင်း ဗဟိုတရားရုံးချုပ် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ရှိန်က ပြောသည်။သူက “စည်သူမောင် ၇ ဦးနဲ့ နေဘုန်းလတ်တို့ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် ဝင်လာတယ်။ သူက တနာရီခွဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဝင်လာတော့ အချုပ်သားတွေကို အပြင် မထုတ်ဘူး။ သီးသန့်ထောင်ဘက် ဝင်သွားတယ်။ ၂ နာရီလောက်မှာ ထွက်လာတယ်။ ထောင်မကြီးကို ပြန်ဝင်သွားတယ်။ အန်ကယ်တို့လည်း စောင့်ရင်း စောင့်ရင်း ၄ နာရီထိ မပြန်သေးဘူး။ ရုံးချိန်းတောင်းပြီး ပြန်လာခဲ့တယ်။ အန်ကယ်တို့ ပြန်တဲ့အထိ မထွက်သေးဘူး” ဟု ပြောသည်။ စီးပွားရေးကြောင့် သားမယားကျွန်ပြုခံရဟု ကချင်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ပြောကြား ဖနိဒါ အင်္ဂါနေ့၊ သြဂုတ်လ 05 2008 18:20 - မြန်မာစံတော်ချိန် ချင်းမိုင်။ ။ ဆင်းရဲကျပ်တည်းမှုကြောင့် ကချင်အမျိုးသမီးများသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ရောင်းစားခံရကာ သားမယား ကျွန်ပြုခံနေရကြောင်းကို ကချင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ) (KWAT) က ယနေ့တွင် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်သည်။“အရှေ့ခြမ်းမှ တည်းနှောင်ခံရမှု” အမည်ရှိ အစီရင်ခံစာကို ၂ဝဝ၄ မှ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်အတွင်း တရုတ်ပြည်သို့ လူကုန်ကူးခံရသူ အမျိုးသမီး ၁၆၃ ဦး၏ အဖြစ်အပျက်၊ သတင်းအချက်များနှင့် ပြုစုထားသည့် အစီရင်ခံစာကို ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် အခမ်းအနား ကျင်းပကာ KWAT က ထုတ်ဝေလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။“တရုတ်နိုင်ငံကို လူကုန်ကူးခံရတဲ့ အမှုတွေကို ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာကြည့်ရင် ၆၄ ရာခိုင်နှုန်းက ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေပါ။ ၁၇ ရာခိုင်နှုန်းက လမ်းခုလတ်ကနေ ပြန်လွတ်လာတဲ့ အမှုဖြစ်တယ်။ ၄ ရာခိုင်နှုန်းက အိမ်ဖော်၊ ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ရောင်းစားခံရတယ်။ ၃၇ ရာခိုင်နှုန်းက သားမယားအဖြစ် ရောင်းစားခံရတယ်” ဟု KWAT မှ သုတေသနပြုစုသူ ဂျူလီယာက အခမ်းအနားတွင် ပြောသည်။ လူကုန်ကူးခံရသူ အများစုသည် တရုတ်ပြည် အရှေ့ပိုင်းခရိုင်များမှ တရုတ် အမျိုးသားများ၏ မယားကျွန်ပြုခံရပြီး ၄ဝ ရာခိုင်နှုန်းသည် ခြေရာခံမရဘဲ ပျောက်နေသည်ဟု KWAT ၏ ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသားထားသည်။လေ့လာတွေ့ရှိသည့် သတင်း အချက်အလက်များအရ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ မိသားစု ညီအကိုမောင်နှမ ကျောင်းစရိတ် ရှာဖွေသည်ဖြစ်စေ၊ အလုပ်ရှာဖွေစဉ် ရောင်းစားခံရခြင်း၊ အချို့မှာ ဖခင်ဖြစ်သူက မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲသဖြင့် မိသားစုအား ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် အလုပ်ရှာဖွေစဉ် ရောင်းစားခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း မဂျူလီယာက ပြောသည်။ လူကုန်ကူးရောင်းစားခံရသည့် အမျိုးသမီးများမှာ အများအားဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ကချင်၊ ဗမာ၊ ရှမ်း၊ တရုတ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မန္တလေး၊ ရန်ကုန်၊ ပျဉ်းမနား စသည့် နေရာများမှ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ရောင်းစားခံရသူများသည် အသက် ၁၄ နှစ်မှ ၂၄ နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးများဖြစ်ပြီး ၃ ပုံ ၂ ပုံမှာ ကချင်ပြည်နယ်၊ ၃ ပုံ ၁ ပုံမှာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှ ဖြစ်ကြကာ သူတို့ကို ပျမ်းမျှအားဖြင့် တရုတ်ယွမ်ငွေ ၁၃ဝဝဝ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ဝဝဝ) ခန့်ဖြင့် တရုတ် လယ်သမားများထံ ရောင်းချခံနေရသည်ဟု KWAT က ဆိုသည်။ KWAT မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါ်ရှယ်လီဆိုင်းကလည်း လူကုန်ကူး ရောင်းချခံရခြင်းမှာ အဓိကအားဖြင့် စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှု၊ ကျဆင်းမှု၊ နအဖ ၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် လူများကို ပြောင်းရွှေ့မှု ဖြစ်ပွားစေပြီး ယခုလက်ရှိ ကုန်ဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခြင်းသည်လည်း အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသမီးငယ်များကို ပြောင်းရွှေ့မှု ပိုပြီး တွန်းအားပေးနေသလို ဖြစ်နေကြောင်း ပြောသည်။၂ဝဝ၅ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် အစိုးရမှ လူကုန်ကူးမှု ဆန့်ကျင် ကာကွယ်ရေး ဥပဒေတခု ပြန်ဋ္ဌာန်းခဲ့သော်လည်း လူကုန်ကူးမှုကို မတားဆီးနိုင်သည့်အပြင် လူကုန်ကူးခံရသူများ၏ အခွင့်အရေးများကို အကာကွယ် မပေးနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။စစ်အစိုးရ၏ ဥပဒေတွင် ပထမ ရည်ရွယ်ချက်သည် မြန်မာလူမျိုးများ တန်းဖိုးထား ထိန်းသိမ်းသင့်သော မြန်မာပြည်သားများ၏ အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည့်အတွက် လူကုန်ကူးခြင်းအား အမျိုးသားရေး တာဝန်တရပ်အဖြစ် နှိမ်နင်းရန်နှင့် ကာကွယ်ရန် ဖော်ပြခဲ့သည်။“သူတို့ (နအဖ) ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ မရှိဘူးလို့ အသေအချာ ပြောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လူကုန်ကူးခံရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက တရုတ်နယ်စပ် ပြန်လာချိန် အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အကူအညီကို တောင်;ဆိုချိန် ငြင်းပယ်ခံရရုံတင်မက အသိအမှတ် မပြုတဲ့အပြင် ရိုင်းစိုင်းတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ပြောပြီး နှင်ထုတ်ခံရတယ်” ဟု ဒေါ်ရှယ်လီဆိုင်းက ပြောသည်။ အစီရင်ခံစာကို ပြုစုသူ မဂွမ်ခေါင်ကလည်း “လျော့နည်းခြင်း မရှိဘဲ ပိုမိုတိုးမြင့်လာတာကို တွေ့ရတယ်။ များပြားလာတယ်။ ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေးကို စနစ်တကျ ချိုးဖောက်နေတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ အောက်မှာ လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေး ဥပဒေက ဘာမှ အဓိပ္ပာယ် မရှိတဲ့အပြင် အစိုးရရဲ့ မူဝါဒက ပြည်သူတွေကို အတင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ တွန်းပို့နေတာ ဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။ပီးကင်းမြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးကို လူကုန်ကူးခံရသူများက အကူအညီ တောင်းရာ ငြင်းဆိုမှုများနှင့် မိမိနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်ရန် ငြင်းပယ်ခံရခြင်းများ ရှိသည့်အပြင် လူကုန်ကူးမှုတွင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင်နေသည်ဟု စွတ်စွဲခံရကာ အမျိုးသမီးတဦး ဆိုလျှင် ထိန်းသိမ်းထားစဉ် မုဒိန်း ကျင့်ခံခဲ့ရသည်ဟု သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။ရောင်းစားခံရသည့် အမျိုးသမီးများအား ကချင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KIO) မှ လက်ခံထားကာ KWAT က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသသည့် အစီအစဉ် Counseling ၊ ကျောင်းတက်ချင်သူများအား ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အချို့ လက်မှုလုပ်ငန်း သင်တန်းများ သင်ကြားစေခြင်းနှင့် အချို့မှာ KWAT တွင် တက်ကြွစွာ ပါဝင်လှုပ်ရှား နေသူများလည်း ရှိသည်ဟု လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး တာဝန်ခံ မဂွမ်ခေါင်က ပြောသည်။လူကုန်ကူးခံရသည့် အမှု၏ မှတ်တမ်းများအရ စီးပွားရေး ကျပ်တည်းမှု၊ တိုင်းပြည်မငြိမ်သက်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ဖြေရှင်းနိုင်မှသာလျှင် အဆိုပါ လူကုန်ကူးမှု ကျဆင်းလာနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ဒေါ်ရှယ်လီဆိုင်းက “နိုင်ငံတကာကိုလည်း တိုက်တွန်းချင်တယ်။ လူကုန်ကူးမှု ပြဿနာတွေကို တိတိကျကျ ခြုံငုံသုံးသပ်ဖို့ လိုနေပါပြီ။ နအဖ ဟန်ပြ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးမှုအပေါ်မှာ မနစ်မျောဖို့၊ နောက်ပြီး သူတို့ လုပ်နေတာဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု ထပ်ဖြစ်နေပြီး အားပေးအားမြှောက်ရာ ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို သတိပြုဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အချိန်တိုအတွက် လုပ်နေသလို၊ အချိန်ကြာအတွက်လည်း နိုင်ငံရေး ပြောင်းလဲဖို့ လိုပါတယ်” ဟု ပြောသည်။ KWAT သည် ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် ‘တွန်းပို့ခံရခြင်း’ အမည်ရှိ ကချင်အမျိုးသမီးများ လူကုန်ကူးခံရခြင်းနှင့် ရောင်းစားခံရခြင်း အစီရင်ခံစာကို ထိုင်း၊ အင်္ဂလိပ်၊ မြန်မာ၊ ဂျပန်ဘာသာများဖြင့် ထုတ်ဝေခဲ့သေးသည်။ ရှစ်လေးလုံးနေ့မှာ အနက်ရောင်ဝတ်ကြမည်ကိုသက် | သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၀၈ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံတွင် ပါဝင်ခဲ့ဖူးသူများက အနှစ် ၂၀ ပြည့်သည့်နေ့တွင် ၀မ်းနည်းခြင်း အထိန်းအမှတ်အဖြစ် အနက် ရောင်ဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ကြမည်ဟု သိရသည်။ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတဦးက “လူဟောင်းတွေကတော့ အဲဒီနေ့ကျရင် အနက် ရောင်ဝတ်တာတို့ ဘုရားသွားပြီး ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်တာတို့ လုပ်ကြမှာပါ။ ကျမတို့ကတော့ ဆွမ်းကပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။ တခြားတော့ ဘာမှလုပ်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။“လူတွေမှာက စီပွားရေးအဆင်မပြေတာနဲ့ အဲဒီဘက်ကို စိတ်မရောက်နိုင်ပါဘူး … အိမ်ရှေ့ ၇ အိမ်၊ အိမ်နောက် ၇ အိမ်ကို မနည်းလှုံ့ဆော်ရမယ့် သဘောမှာရှိတယ်။ ရှစ်လေးလုံးနေ့ကိုတောင် မှတ်မိကြတာမဟုတ်ဘူး၊ လုံခြုံရေးတွေ အရမ်းချထား လို့သာ ဘာတွေဖြစ်နေပါလိမ့် … သြော်ဟုတ်သားပဲ အနှစ် ၂၀ တောင်ပြည့်ပြီလို့ သိကုန်ကြတာ” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ၁၉ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားအဖွဲ့က ရန်ကုန်မြို့ ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားရှိ သာသနာ့သိပ္ပံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပရိသတ် ၅ ထောင်ကျော် တက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်က ဧရာဝတီကို ယမန်နှစ်က ပြောဆိုဖူးသည်။အဆိုအပါအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြသူအများစုသည် ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံတွင် ပါဝင်ခဲ့ကြသူများ ဖြစ်ကြပြီး မျိုးဆက်သစ်ကျောင်းသားများ၊ အနုပညာရှင်များ၊ စာနယ်ဇင်းသမားများနှင့် နိုင်ငံခြားသံတမန်များလည်း ပါဝင်သည်။ယခုအခါ ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံ ၁၉ နှစ်ပြည့် အခမ်းအနားကို ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သည့် ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးထားပြီး သာသနာ့သိပ္ပံကျောင်းကိုလည်း လွန်ခဲ့သည့် ဇွန်လက ချိတ်ပိတ် လိုက်သည်။နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူအများစုသည် စစ်အစိုးရ၏ မတရားဖိနှိပ်မှုများနှင့် မိသားစုဘ၀များကြောင့် လှုပ်ရှားမှုများ၏ ဝေးရာသို့ တဖြည်းဖြည်းရောက်ရှိကုန်ကြသော်လည်း ကျောင်းသား၊ လူငယ်တို့၏လှုပ်ရှားမှုများ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်း မရှိပေ။ယခုလဆန်းမှစ၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင် စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်စာများနှင့် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံ အကြောင်းရေးသားထားသည့် လှုံ့ဆော်စာများ ပျံ့နှံ့လျက် ရှိသည်။ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရှိ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများက စစ်အာဏာရှင်ကို ၎င်းတို့နှင့်ပူးပေါင်းတော်လှန်ရန် ပါမောက္ခချုပ်အား စာပို့ကြသည်ကို ကြားသိရသည်ဟု ဒဂုံတက္ကသိုလ်ရှိ ဆရာမတဦးက ပြောသည်။၎င်းအပြင် တခြားတက္ကသိုလ်များ၌လည်း ‘ရှစ်လေးလုံးနေ့ တို့မမေ့’ ၊ ‘ကျောင်းသားရှိလျှင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ရှိရမည်’ အစရှိသည်စာများ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။စစ်အစိုးရကလည်း ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း လုံခြုံရေးတပ်သားများကို တိုးချဲ့တပ်လှန့်ထားကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောဆိုကြသည်။ အမေရိကန် သမ္မတနှင့် မြန်မာအတိုက်အခံများ နေ့လယ်စာ အတူစားမည်ဧရာဝတီ | သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၀၈အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ရှ် ဒဗလျူဘုရ်ှသည် သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် ပေကျင်းအိုလံပစ် ဖွင့်ပွဲသို့ မသွားမီ သြဂုတ် ၇ ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့၌ ပြည်ပရောက် မြန်မာ အတိုက်အခံများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ နေ့လယ်စာ အတူစား သောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။(ဓာတ်ပုံ - အေပီ) “မြန်မာ အတိုက်အခံတွေနဲ့ တွေ့ပြီး နေ့လယ်စာစားရင်း သူတို့နဲ့ စကားပြော လိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ပြည်ပ အခြေစိုက် မြန်မာ မီဒီယာတွေကို အင်တာဗျူး ပေးပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီမီဒီယာ တွေကို ပြည်တွင်းက နားထောင်နေကျ ဆိုတော့ ဘုရ်ှအနေနဲ့ မြန်မာ ပြည်သူလူထုကို တိုက်ရိုက် သတင်းစကား ပါးနိုင်မယ့် သဘောပေါ့” ဟု အိမ်ဖြူတော် သတင်း ထုတ်ပြန်ရေး အရာရှိ ဒန်းနစ် ဝိုင်လ်ဒါက ပြောသည်။သမ္မတဘုရ်ှသာမကဘဲ သမ္မတ ကတော် လော်ရာဘုရ်ှသည်လည်း ထိုင်း မြန်မာ နယ်စပ်၊ မဲဆောက်မြို့သို့ သွားရန် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း သိရသည်။လော်ရာဘုရှ်၏ မဲဆောက်ခရီးစဉ်အတွင်း နယ်စပ်ရှိ အကြီးဆုံး ဒုက္ခသည် စခန်းဖြစ်သည့် မယ်လ ဒုက္ခသည်စခန်းနှင့် ဒေါက်တာ စင်သီယာမောင်၏ မယ်တော် ဆေးခန်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က သတင်း ထုတ်ပြန်သည်။“ဘုရ်ှအနေနဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ တကယ်ကို စိတ်ဝင်စားတာဗျ။ သူနဲ့ လော်ရာဘုရှ် နှစ်ယောက်လုံး အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံတွေထဲက နိုင်ငံတနိုင်ငံကို စိတ်ဝင်တစား ဂရုစိုက် တယ်ဆိုတာ ပြတာပဲ” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ချူလာ လောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာရှင် ထက်ထနီ ပွန်ဆူဒရစ်ခ် က သုံးသပ်သည်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဥာဏ်ဝင်းက ယခုကဲ့သို့ အမေရိကန်သမ္မတနှင့် ပြည်ပရောက် မြန်မာအတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်များ တွေ့မည့် အရေးကိစ္စကို ကြိုဆိုသည်ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။“ဒါ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုအတွက် အရေးကြီးတဲ့ ဆောင်ရွက်မှု တခုပဲ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးဟောင်းနှင့် ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားကြီးတဦးဖြစ်သူ သခင်ချန်ထွန်းကလည်း “ဒီကိစ္စက မြန်မာ့ သမိုင်းမှာ ပထမဆုံးပဲ။ အရင်က ဒါမျိုးတခါမှ မကြုံဖူးဘူး။ အမေရိကန် သမ္မတအနေနဲ့ မြန်မာ အတိုက်အခံတွေနဲ့ တွေ့မယ် ဆိုတော့ ကြည့်ရတာ သူတို့ လင်မယား နှစ်ယောက်စလုံး မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးကိစ္စကို ဘယ်လောက် ထောက်ခံ အားပေး ချင်နေတယ် မသိဘူး” ဟု ပြောသည်။၂၀၀၃ ခုနှစ် ဇွန်လဆန်းက သမ္မတဘုရ်ှသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နေအိမ် အကျယ် ချုပ်မှ လွှတ်ပေးသင့်ကြောင်းနှင့် မြန်မာပြည်ရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေး ရန် မြန်မာစစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ၂၀၀၃ ဇူလိုင်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရအား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများ ပြုလုပ်ရန် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့၏။ ၄ နှစ်အကြာ၊ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလ၌ မြန်မာပြည်အတွင်း သံဃာတော်များ ဦးဆောင် သော ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်တွင် အမေရိကန် အစိုးရအနေနှင့် စစ်အစိုးရနှင့် ပတ်သက်နေသည့် မြန်မာစီးပွားရေးသမား တဦးစီကို ပစ်မှတ်ထား ဆောင်ရွက်သည့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြန်သည်။ အမေရိကန်နှင့် အနောက်နိုင်ငံများက မြန်မာစစ်အစိုးရကို စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ပြီး ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ပြုလုပ်ရန် တောင်းဆိုနေချိန်တွင် ယခုနှစ် မေလဆန်းက မြန်မာပြည် အတွင်း နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ပြင်းထန်စွာ ဝင်ရောက်တိုက် ခိုက်သွားခဲ့ရာ မြန်မာ စစ်အစိုးရက အမေရိကန်နှင့် အနောက်ဥရောပ နိုင်ငံများ၏ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများ ဝင်ရောက် မှုကို ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ပြီး မကြာမီ အချိန်တွင် သမ္မတဘုရ်ှက မြန်မာ့ရေပိုင်နက် နှင့် အနီးဆုံးနေရာသို့ ကယ်ဆယ် ရေးလုပ်သားများပါဝင်သည့် အမေရိကန် လေယာဉ်တင် စစ်သင်္ဘောများများ စေလွှတ်ကာ အဆင်သင့် စောင့်ဆိုင်းနေစေ ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာ စစ်အစိုးရက ယင်း စစ်သင်္ဘောများ ဝင်ရောက်မှုကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပြန်သည်။“သမ္မတ ဘုရ်ှအနေနဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ထိုင်းနဲ့ တခြား အာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုပါ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ အရေးကိစ္စအတွက် ပါဝင်ဖို့ တွန်းအားပေးဖို့လိုပါတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ ကုန်သွယ် မှု လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေအားလုံးကို တိုက်တွန်းဖို့လိုတာပါ။ စစ်အစိုးရကို ရှုံ့ချနေရုံ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံနေရုံ လုပ်နေတာနဲ့တော့ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီရဖို့ လက်တွေ့ကျကျ ကြိုးပမ်းရာ မရောက်ပါဘူး” ဟု ထက်ထနီ ပွန်ဆူဒရစ်ခ်က ပြောသည်။ဧရာဝတီကားလမ်းများ ပျက်စီးလေဘေးကူညီသူတို့ လမ်းခရီးကြန့်ကြာပီတာအောင်/ ၅ သြဂုတ် ၂၀၀၈ ရန်ကုန်မှ ဧရာဝတီတိုင်း နာဂစ်ဒဏ်ခံရသည့် မြို့များသို့သွားသည့် ကားလမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာက ပြင်ဆင်မပေးသဖြင့် ကားလမ်းများပျက်စီးနေပြီး ဒေသခံများအပါအ၀င် အကူအညီပေးမည့်သူများ ခရီးနှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုနှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။ယခင်က (၅) နာရီခန့်ကြာသည့် ရန်ကုန်မှ ဘိုကလေး ခရီးကို (၈) နာရီကျော်ကြာအောင် သွားနေ ရပြီး ရန်ကုန်-လပွတ္တာ (၁၀) နာရီခန့် ခရီးမှာ (၁၇) နာရီခန့်ကြာအောင် သွားရသည်ဟု ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များနှင့် ဒေသခံတို့က ပြောသည်။ မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များအတွက် အစားအစာနှင့် ငွေကြေးအကူ သွားပေးသူတဦးက “ကယ်ဆယ်ရေး ကားတွေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးကားတွေ သွားတဲ့အခါကျတော့ (၁၀) ဘီးကား၊ (၁၂) ဘီးကားတွေ ၀ိတ်အများကြီးနဲ့ သွားတာပေါ့။ မိုးတွင်းကလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့ ဒီလမ်းက အကုန်လုံးပျက်ကုန် တာပေါ့။ လမ်းပြင်တဲ့ဟာတွေကို မတွေ့ဘူး။ လုံးဝကို ပြင်မပေးတာ။ တော်တော်ကို ပျက်နေတယ်။ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမ ဟိုင်းဝေးမှာကို ပျက်နေတာ။ လပွတ္တာ- မြောင်းမြဘက်ကျတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ သဲလမ်း၊ မြေလမ်းဆိုတော့ အကုန်လုံးပျက်နေတာ” ဟု ပြောသည်။ ရန်ကုန်မြို့မှအထွက် လှိုင်သာယာကတည်းက ကားလမ်းမကောင်းတော့ဘဲ ဆားမလောက်- မအူပင် လမ်းပိုင်းလည်း သိသိသာသာ ပျက်စီးနေကြောင်း၊ ပျက်စီးမှု အဆိုးရွားဆုံးအပိုင်းမှာ ဖျာပုံ-ဘိုက လေးလမ်းပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ခရီးသွားတို့ထံမှ သိရသည်။ ဘိုကလေးဒေသခံတဦးက “ကားလမ်းက လယ်မြေပေါ်မှာ ဂ၀ံကျောက်ခင်းထားတာ။ ကယ်ဆယ် ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကားတွေ တန်မနည်းဘူး ၀င်တဲ့အခါကျတော့ လမ်းတွေ ပဲ့ထွက်ပြီးတော့ ရွှံ့တွေ များပြီး ဗွက်ထပြီးတော့ ပျက်တာပေါ့။ နဂိုကတည်းက လမ်းက ကား (၂) စီး ရှောင်လို့မရတော့ အခုကျတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့။ တချို့ကားတွေလည်း နွံနစ်ကုန်တာပေါ့။ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်တွေ ကလည်း ဒီကားလမ်းလေးကို အခြေပြုပြီး လာရတယ်။ လမ်းအရမ်းဆိုးနေတဲ့အခါကျတော့ မလာနိုင်ကြတော့ဘူးလေ။ အရမ်းဒုက္ခရောက်ကြရတယ်” ဟု ပြောသည်။လေဘေးအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းများ ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန် ပျက်စီးနေသည့်လမ်းများကို သက်ဆိုင်ရာက အမြန်ဆုံးပြန် လည်ပြင်ဆင်ဖောက်လုပ်ပေးသင့်သည်ဟု ဒေသခံများနှင့် အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များက ပြောကြားသည်။ နအဖစစ်အစိုးရကမူ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကျပ်ငွေ ဘီလီယံ (၅၀) ကျော်သုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပထမအဆင့် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဒုတိယအဆင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အပါအ၀င် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဟု တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။နအဖခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကလည်း ပင်လယ်ပိုင်းဒေသများအထိ ကားလမ်းများ ဖောက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသကြီးသည် စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဘက်စုံတိုးတက်သည့် အဖွံ့ဖြိုးဆုံးဒေသဖြစ်လာမည်ဟု ပြီးခဲ့သည့်မေလ ဧရာဝတီတိုင်းခရီးစဉ်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ ။ ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်အစိုးရခန့် ဆရာတော်ကြီးများနှင့်သာ တွေ့ခွင့်ရကိုဝိုင်း/ ၅ သြဂုတ် ၂၀၀၈ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်သစ် တောမတ်စ် အိုဟေး ကွင်တန်နာသည် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ယခုလ (၃) ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိပြီး ယမန်နေ့တွင် နိုင်ငံတာ် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ အကျိုးတော်ဆောင် ဆရာတော်အပါအ၀င် စစ်အစိုးရခန့်ထားသည့် နိုင်ငံတာ် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်သစ်နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရသည့် နိုင်ငံတာ် သံဃာ့ မဟာနာယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ကြီးများထဲတွင် နိုင်ငံတော် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ အကျိုး တော်ဆောင် ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ အဘိဓဇ မဟာရဌဂုရု ဘဒ္ဒန္တသြသဓာဘိဝံသ ပါဝင်သည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။ နိုင်ငံတာ် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ကြီးများနှင့် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ်အား တွေ့ဆုံခွင့်ပေးသည့်အတွက် သံဃာထု၏ မကျေနပ်မှုကို သိခွင့်ရမည် မဟုတ် ကြောင်း၊ အဆိုပါ ဆရာတော်ကြီးများသည် မိမိတို့ ရာထူးတည်မြဲရေးသာ အာရုံထားသည်က များ သည်ဟု ရန်ကုန်တိုက်အုပ်ဆရာတော်ကြီးတပါးက ထောက်ပြသည်။နိုင်ငံတာ် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့ဝင် ဆရာတော်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးသည်ကို စစ်အစိုးရက ထုတ်ပြန်ခြင်း မရှိ သေးပေ။ သို့သော် မစ္စတာကွန်တင်နာအနေဖြင့် ယခင်နှစ် စက်တင်ဘာလက ဖြစ်ပွားခဲ့သော သံဃာ့ လှုပ်ရှားမှုအား မြန်မာအာဏာပိုင်များက အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်သော အချက် အလက်အမှန်ကိုမူ ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုများသမဂ္ဂ ဥက္ကဋ္ဌ အရှင်ခေမာစာရက အမိန့်ရှိသည်။အရှင်ခေမာစာရက “သံဃာ့နာယကအဖွဲ့ကို သွားတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ ဥစ္စာက သူတို့က ဟိုဘက်က လူပဲ။ သူတို့ကတော့ အကောင်းကြီးပဲ ပြောမှာပေါ့။ ဘယ်လိုမှ အချက်အလက် မရနိုင်ဘူး” ဟု မိန့်ကြားသည်။ထို့အပြင် နိုင်ငံခြားအဖွဲ့တခုက မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးများ နှင့်ပတ်သက်၍ သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့အား တွေ့ရိုးတွေ့စဉ်မရှိသဖြင့် ယခုတွေ့ဆုံမှုသည် ထူး ခြားသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီကြိုးပမ်းနေသည့် နှစ် (၂၀) အတွင်း သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့က သံဃာနှင့်ပြည်သူဘက်၌ ရပ်လေ့ရပ်ထ မရှိခဲ့ကြောင်း အရှင်ခေမာ စာရက ဆက်လက်မိန့်ကြားသည်။“မဟာသံဃာ့နာယကအဖွဲ့က ဘယ်တုန်းကမှ ပြည်သူဘက်က၊ သံဃာတွေဘက်ကရပ်တာ မရှိပါ ဘူး။ သူတို့ သာမာန်အားဖြင့်တော့ ပြောတာပေါ့၊ သူတို့ထဲမှာ မကျေနပ်မှုရှိတယ်။ မကျေနပ်မှုရှိ တယ်ဆိုတာက ကြပ်ပြေးမှာ သူတို့ တခုပဲ ထောက်ပြနိုင်ခဲ့တာပေါ့။ သရဲတွေ၊ သစ္ဆေတွေ ခြောက် လို့ ပရိတ်ရွတ်တာပေါ့နော်။ ပရိတ်ရွတ်တဲ့အခါကျတော့ သူတို့ ဘာပြောလည်းဆိုရင် ကြပ်မင်းတို့ကို ခြောက်ရုံ မခြောက်ပါနဲ့ တခါတည်း ဂုတ်ကို ချိုးသတ်လိုက်ပါပေါ့။ ဒီကောင်တွေကို အဲလောက်ပဲ ပြောတာပါပဲ” ဟု အရှင်ခေမာစာရက ထောက်ပြသည်။ယခင်နှစ် စက်တင်ဘာသံဃာ့လှုပ်ရှားမှုတွင် စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များ၏ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုကြောင့် လူ (၃၁) ဦးသေဆုံးပြီး၊ (၇၄) ဦး ပျောက်ဆုံးနေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးအကျဉ်း သား (၁,၈၀၀) ကျော်ရှိပြီး မတရားဖမ်းဆီးမှုများလည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြောင်း ကုလလူ့ အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟောင်း ပေါ်လိုဆာဂျီရို ပီညဲရိုးက သူ၏အစီရင်ခံစာ၌ ဖော်ပြခဲ့ သည်။ ပြီးခဲ့သည့် မေလတွင် ယခုတာဝန်ကို ရယူခဲ့သော မစ္စတာကွန်တင်နာသည် အခြားဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များအပါအ၀င် စစ်အစိုးရသာသနာရေးဝန်ကြီး၊ နာဂစ်မုန်တိုင်း ကူညီရေးအဖွဲ့များနှင့် လည်း ယမန်နေ့က တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လောလောဆည် ဧရာဝတီတိုင်းသို့ သွားရောက်နေသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ ။ တရုတ်ပြည်သို့ လူကုန်ကူးခံရသည့် ကချင်အမျိုးသမီးဦးရေသုံးနှစ်အတွင်း (၂၀၀) နီးပါးတိုးလာကျော်ထင်/ ၅ သြဂုတ် ၂၀၀၈ တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီး လူကုန် ကူးခံရသော အမျိုးသမီးဦးရေမှာ သုံးနှစ် အတွင်း (၂၀၀) နီးပါးရှိပြီး လေးပုံတပုံမှာ (၁၈) နှစ်အောက် အမျိုးသမီးများ ပါဝင် သည်ဟု ကချင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး (ထိုင်းနိုင်ငံ) KWAT မှ ယနေ့ ထုတ်ပြန် သည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။“အရှေ့ခြမ်းမှ တည်းနှောင်မှု” Eastward Bound ဟု အမည်ပေးထားသော အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် ထုတ်ပြန်သည့် အဆိုပါ အစီ ရင်ခံစာတွင် ၁၉၉၂- ၂၀၀၃ အကြား အခြေ နေများနှင့်နှိုင်းစာလျှင် ၂၀၀၄ မှ ၂၀၀၆ ခုနှစ်များအတွင်း၌ လူကုန်ကူးခံရမှုသည် (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းကျော်အထိ များပြားလာ သည်ဟု ပါရှိသည်။အဆိုပါအစီရင်ခံစာကို KWAT မှ သုတေ သီများက တရုတ်-မြန်မာနယ်စပ်၌ ၂၀၀၄ မှ ၂၀၀၇ ခုအတွင်း လူကုန်ကူးခြင်းခံရသူ (၁၆၃) ဦး၏ အချက်လက်များအပေါ် အခြေပြုရေးသားထား ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့၌ ကျင်းပသည့် အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် KWAT ၏ ကွင်းဆင်းသုတေသီတဦးက “ကျမတို့တွေက တိုက်ရိုက်ကွင်းဆင်း ကောက်ခံတဲ့ အချက်လက်တွေ ရှိသလို များသောအားဖြင့်က လူပျောက်သွားတယ်။ သူတို့သမီးတွေ ပျောက် သွားတယ်ဆိုရင် ကျမတို့ဆီမှာ လာလာတိုင်ကြတယ်၊ ရှာပေးပါဦး၊ ဘယ်တုန်းက ပျောက်သွား တယ်ဆိုတာက အစပေါ့။ နောက်ပြီး ရောင်းစားခံရပြီး ပြန်လည်လွတ်လာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေက လည်း ပြောပြကြတယ်” ဟု ပြောသည်။မြန်မာစစ်အစိုးရသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့်လက ထုတ်ပြန်ချက်တွင် လွန်ခဲ့သည့် (၃) နှစ်အတွင်း လူကုန်ကူးခံရသူ (၄၇၁) ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကာ ၎င်းတို့အထဲမှ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းသည် တရုတ်ပြည်သို့ လူကုန်ကူးခံရသူများ ဖြစ်ကြောင်း ပါရှိသည်။လူကုန်ကူးမှု တိုးမြင့်လာခြင်းသည် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ကျဆင်းမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု များကြောင့်ဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရသည် လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်ပွားရခြင်းအဓိက အကြောင်းခံကို မဖြေရှင်း သည့်အပြင် တရုတ်အာဏာပိုင်များမှ ကယ်တင်ခံရပြီး လွတ်မြောက်လာသူများကိုလည်း ပြန် လည်လက်ခံရန် ငြင်းပယ်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာအတွက် အချက်အလက်စုဆောင်းသူ မထုံခေါင်က ပြောသည်။၎င်းက “တရုတ်နဲ့ မြန်မာက ဒီကိစ္စအတွက် နားလည်မှု သဘောတူစာချုပ် လုပ်ထားတယ်လေ။ တရုတ်ဘက်ကလည်း လူကုန်ကူးခံနေရသူကို တွေ့နေရင်တောင်မှ ပိုက်ဆံမရှိဘူးလေ။ တရုတ်ငွေ ယွမ် (၆,၀၀၀) လောက် ကုန်မယ်ဆိုတော့လည်း ဗမာဘက်က မပေးဘူးလေ။ တချို့ကေစ့်တွေမှာ တရုတ်တာဝန်ရှိသူတွေက လမ်းစရိတ်တွေကို စိုက်ထုတ်လာတယ်။ ဒီဘက်မှာ ပြန်တောင်းတော့ မရဘူး။ အချို့ဆို ကယ်တင်ခံလာခဲ့ရပြီးမှ ဗမာဘက်က လက်မခံတာတွေလည်းရှိတယ်။ သူတို့ ကိုတော့ တရုတ်ဘက်က ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့အကူညီနဲ့ ပြန်ပို့ရတာတွေလည်း ရှိတယ်” ဟု ပြောသည်။KWAT ၏ အစီရင်ခံစာတွင် လူကုန်ကူးခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့ထံ တိုင်တမ်းချက်များအရ ကချင်ပြည်နယ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ လူကုန်ကူးခံရသူ အားလုံး၏ (၃၇) ရာခိုင်နှုန်းသည် တရုတ် အမျိုးသားများ၏ ဇနီးမယားအဖြစ် ပြုလုပ်ရန် ရောင်းချခံရသူများဖြစ်ကာ အိမ်ဖော်နှင့် ဖျော်ဖြေ ရေးလုပ်ငန်းများတွင် (၄) ရာခိုင်နှုန်း၊ (၁၇) ရာခိုင်နှုန်းမှာ လူကုန်ကူးခံရစဉ် ပြန်လည်လွတ်မြောက် လာခဲ့ပြီး (၄၆) ရာခိုင်နှုန်းမှာ မည်သည့်နေရာတွင် ရောက်ရှိနေသည်ကို မသိရကြောင်း ဖော်ပြ ထားသည်။ KWAT သည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်ကလည်း အလားတူ အစီရင်ခံစာတစောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ သည်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ၂၀၀၇ ခုနှစ် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီရင်ခံစာ၌ မြန်မာစစ်အစိုးရအား လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးကို ထိရောက်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်သည့်ပြင် လူကုန်ကူးခံရသူများ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေပါ လူကုန်ကူးမှု ပပျောက်ရေးအတွက် လိုအပ် သည့် အခြေခံစံနှုန်းများ မမီသည့် နိုင်ငံအဆင့်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုပ်သံချယ်နယ် (၆) ခုထိ တိုးချဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းဖမ်းယူနိုင်သည့် ဂြိုဟ်တုစလောင်းများကို ပိတ်ထားဆဲNEJ/ ၅ သြဂုတ် ၂၀၀၈ မြဝတီရုပ်သံလွှင့်ဌာနက နောက်ထပ် ချယ်နယ် (၂) ခု တိုးမြှင့်ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည့်အတွက် မြန်မာ နိုင်ငံ၌ ရုပ်သံချယ်နယ် စုစုပေါင်း (၆) ခုထိ ရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် နိုင်ငံတကာ လိုင်းပေါင်း(၂ဝဝ) ကျော်ဖြင့် ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဂြိုဟ်တုစလောင်းနှင့် ဖမ်းစက်များကိုမူ ပိတ်ပင်ထားဆဲ ဖြစ်သည်။မြဝတီရုပ်သံအတွက် အစီအစဉ်အချို့ ထုတ်လုပ်ပေးနေသူ တဦးက “မြဝတီရုပ်သံမှာ MWD-2, MWD-3 ဆိုတဲ့ ချယ်နယ် (၂) ခု တိုးပြီး ထုတ်လွှင့်နေတယ်။ ဒါကြောင့် ချယ်နယ် (၃) ခုဖြစ်သွားပြီး အစိုးရ ချယ်နယ် (၂) ခုအပါအ၀င် MRTV-4 နဲ့ ပေါင်းရင် စုစုပေါင်း ချယ်နယ် (၆) ခု ရှိသွားပြီ” ဟု ပြောသည်။မြဝတီရုပ်သံတွင် မူရင်းချယ်နယ်က ပုံမှန်အတိုင်း ထုတ်လွှင့်နေပြီး ထပ်တိုးသည့် ရုပ်သံချယ်နယ် (၂) ခုတွင်မူ ဖျော်ဖြေရေး အစီအစဉ်များကို ထုတ်လွှင့်ပေးနေသည်။ သတင်းကြေညာချိန်၌မူ ရုပ်သံချယ်နယ် (၃) ခုစလုံးက သတင်းများကို တပြိုင်နက်တည်း ထုတ်လွှင့်ပေးနေသည်ကို တွေ့မြင် ရသည်။မြဝတီမှ တိုးမြှင့်ရုပ်သံချယ်နယ် (၂) ခုကို ဒီဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပြီး Digital Terrestrial Receiver ဖမ်းစက်များဖြင့် ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။္ကအဆိုပါစက်များကို MRTV-4 နှင့် အခပေး ရုပ်သံများကို ထုတ်လွှင့်နေသည့် ဖင်မလီ အင်တာတိန်း မင့်ကုမ္ပဏီက တင်သွင်း ရောင်းချထားသဖြင့် အဆိုပါစက်ရှိသည့် အိမ်များ၌သာ မြဝတီရုပ်သံလိုင်း (၃) လိုင်းကို အခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်သည်။စစ်အစိုးရက ၎င်း၏ရုပ်သံအစီအစဉ်များကို ယခုကဲ့သို့ တိုးချဲ့ထုတ်လွှင့်နေသော်လည်း နော်ဝေ ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (ဒီဗွီဘီ) ရုပ်သံ အစီအစဉ်များကို နိုင်ငံတကာ လိုင်းပေါင်း (၂ဝဝ) ကျော်ဖြင့် ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်သည့် ဂြိုဟ်တုစလောင်းနှင့် ဖမ်းစက် အရောင်းဆိုင်များကိုမူ ဖမ်းဆီး အရေးယူခဲ့ပြီး နောက်နောင် မရောင်းချတော့ပါဘူးဆိုသည့် ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မြဝတီအစီအစဉ်များကို ရန်ကုန်တမြို့တည်း၌သာ ဖမ်းစက်ရှိသူများ ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်သည့် အတွက် အခြားမြို့များတွင်လည်း ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ရန် တိုးချဲ့သွားမည်ဖြစ်ပြီး အခပေး ရုပ်သံ ချယ်နယ်များကိုပါ ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြဝတီအတွက် အစီအစဉ်များ ထုတ်လုပ်ပေး နေသူက ပြောသည်။မြန်မာစစ်အစိုးရက နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်း၏ ရုပ်သံထုတ်လွှင့်မှုများကို အနာလော့ဂ်စနစ်မှ ဒီဂျစ်တယ် စနစ်သို့ ပြောင်းလဲထုတ်လွှင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဥရောပနိုင်ငံများတွင် အသုံးပြုသည့်စနစ်ကို တရားဝင် မှတ်ပုံတင် အသုံးပြုမည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၌ မြဝတီ ချယ်နယ် (၃) ခုအပြင် စစ်အစိုးရ၏ MRTV နှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့် ထုတ်လွှင့်သည့် MRTV-3၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဆန်း၏သားပိုင် ဖင်မလီအင် တာတိန်းမင့်က ထုတ်လွှင့်သည့် MRTV-4 ချယ်နယ်များ ရှိသည်။ဖင်မလီအင်တာတိန်းမင့်သည့် MRTV-4 ချယ်နယ်အပြင် တည်းဖြတ်ထားသည့် CNN နှင့် အခြား နိုင်ငံတကာ အားကစား၊ ရုပ်ရှင်ချယ်နယ်များကိုလည်း အခပေးစနစ်ဖြင့် ထုတ်လွှင့်ပေးလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။ ။ မဲဆောက်မှာ သမ္မတကတော်ခရီးစဉ်အတွက် လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မြန်မာအလုပ်သမား (၂၀၀) ကျော် အဖမ်းခံရNEJ/ ၅ သြဂုတ် ၂၀၀၈ ယမန်နေ့ညနေက အဖမ်းခံရသည့် မြန်မာများကို မဲဆောက်ရဲစခန်းတွင် တွေ့ရစဉ်မကြာခင် လာရောက်မည့် အမေရိကန်သမ္မကတော် လော်ရာဘုရ်၏ လုံခြုံရေးတွက် မဲဆောက် မြို့တွင် တရားမ၀င် အလုပ်လုပ်နေသည့် မြန်မာအလုပ်သမား (၂၀၀) ခန့်ကို အာဏာပိုင်များက ယမန်နေ့ညက ဖမ်းလိုက်သည်။ယခုဖမ်းဆီးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရဲဒု-ဗိုလ်မှူးကြီး နိုင်ကျစ်ရာစာ မဟီ မေရမ်က “လော်ရာဘုရ်ှရဲ့ ခရီးစဉ်လုံခြုံရေးအတွက် တာ့ခရိုင်ဝန်နဲ့ တာ့ခရိုင်ရဲမှူးတို့ရဲ့ လုံခြုံရေး အစီအစဉ်အရ မြန်မာအများစု နေထိုင်တဲ့ ရပ်ကွက်တွေကို ၀င်ရောက်ရှင်းလင်းတာဖြစ်တယ်” ဟု ပြောသည်။အဆိုပါမြန်မာ (၂၀၀) ကို တရားမ၀င် ၀င်ရောက်မှုဖြင့် မြန်မာဘက်ခြမ်း မြ၀တီမြို့ သို့ပြန်ပို့မည် ဖြစ်သည်ဟု ရဲ ဒု-ဗိုလ်မှူးကြီးက သတင်းထောက်များအား ပြောကြားသည်။အဖမ်းခံရသူ ကိုအောင်ဝင်းက “သူလာတာ မြန်မာတွေအတွက် အကျိုးရှိတာ၊ မရှိတာ အသာထား အခုလောလောဆယ် မြန်မာတွေ အဖမ်းခံနေရပြီး ဟိုဘက်ကမ်း သွားသွန်မှာနဲ့ဆိုရင် လေးငါးဆယ် ရက်တော့ အလုပ်ပျက်ပြီး မိသားစုကလည်းများတော့ ဒီလို တချီတချီ ထိလိုက်ရင် မချောင်ဘူး” ပြောသည်။အဝေးသင်တက်နေသည့် အထည်ချုပ် အလုပ်သမတဦးဖြစ်သူ မစန်းက “ဒီနေ့ လစာထုတ်ရက်မှာ အဖမ်းခံရတယ်။ မြ၀တီကို သွားမှာနဲ့ လာမှာနဲ့ဆိုရင် ကုန်ပြီး။ ကျမ အမြင်ပြောရမယ်ဆိုရင် ဘန်ကီ မွန်းတောင် ချာလပတ်လည်သွားတာပဲ။ ဒီလိုနယ်စပ်မှာ လာတာလောက်တော့ ဖိုးသန်းရွှေကြီး ရီမှာပေါ့” ဟု မဲဆောက် အချုပ်ခန်းအတွင်းမှ ပြောသည်။ယနေ့တွင်လည်း မဲဆောက်ဒေသအတွင်းရှိ မြန်မာအများစု နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်များနှင့် မြို့ပြင်ရှိ ရဲဂိတ်များတွင် ပုံမှန်ထက် အဖမ်းအဆီးနှင့် စစ်ဆေးမှုများ ရှိကြောင်း၊ အချို့နေရာများတွင် စစ်သုံး ခွေးနှင့် မိုင်းရှာကိရိယာများ သုံးကာ စစ်ဆေးကြသည်ဟု နို့ဖိုးဒုက္ခသည်စခန်းမှ မဲဆောက်လာသူ တဦးက လမ်းခရီး အခြေအနေများကို ပြောပြသည်။မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူများ၏ စုရပ်များအား ဒေသခံ အာဏာပိုင်များမှ တစုံတရာ ၀င်ရောက် စစ်ဆေးမှုများကို ပြုလုပ်ခြင်း မရှိသေးသော်လည်း အာဏာပိုင်များ အလိုမကျဖြစ်မည့် ကိစ္စမျိုး မဖြစ်ပေါ်စေရန် လိုအပ်သည့် စီိစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများ ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသည်ဟု တာဝန်ရှိသူ တဦးက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။လာမည့်ကြာသပတေးနေ့တွင် အမေရိကန်သမ္မတကတော် လော်ရာဘုရ်ှသည် မဲဆောက်မြို့သို့ လာရောက်ပြီး မယ်တော်ဆေးခန်းနှင့် မယ်လဒုက္ခသည်စခန်းသို့ သွားရောက် လေ့လာမည်ဖြစ် သည်။ ။ ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် အင်းစိန်ထောင် လေ့လာ 05 August 2008 ဦးအောင်လွင်ဦး - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) ဦးအောင်လွင်ဦး - နားဆင်ရန် (MP3) ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်တော်သစ်ဖြစ်တဲ့ တိုးမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနား (Tomas Ojea Quintana) ဟာ သူ့ရဲ့ ဒုတိယနေ့ခရီးစဉ်ဖြစ်တဲ့ ဒီကနေ့မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အများအပြားကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားရာ ရန်ကုန်မြို့က အကျဉ်းထောင်ကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ အခုလို မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ရောက်နေတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်သစ်အနေနဲ့ ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် အကျဉ်းသားတွေလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ အခြေအနေတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်သွားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုသံတွေကိုလည်း ကြားနေရပါတယ်။ အကြောင်းစုံကိုကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် တိုးမတ်စ် အိုဟေး ကင်တားနားကသူ့ရဲ့ ဒုတိယနေ့ခရီးစဉ် တစိတ်တပိုင်းအဖြစ်နဲ့ အင်းစိန်ထောင်ကို သွားရောက်ခဲ့တာပါ။နေ့လယ်ပိုင်းက သွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတချို့နဲ့ တွေ့ဆုံဖွယ်ရာရှိတယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ရပေမယ့် ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေ ပါဝင်မယ်ဆိုတာတော့ မသိရသေးဘူးလို့ အင်းစိန်ထောင်ရှေ့ကို ဒီကနေ့ သွားရောက်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တဦးက ပြောပါတယ်။ "ရောက်နေတယ်။ ဘယ်သူတွေနဲ့ တွေ့နေလည်းတော့ မသိဘူး။ ၂ နာရီလောက်ကရောက်တာ။ အခုထက်ထိတော့ မပြန်သေးဘူး။ ၂၀၀၇ အသုတ်ဆိုတော့ ဒီငြိမ်းလင်းနဲ့တွေ့မလားတော့ မသိဘူး။ အဲဒီလိုအသံတော့ ထွက်နေတယ်။"အခုလို အထူးကိုယ်စားလှယ်မတိုင်ခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်တဲ့အနေနဲ့ အစောပိုင်းမှာတုန်းက ထောင်တွင်းမှာကျွေးမွေးတဲ့ အစားအသောက်၊ အနေအထိုင် အခြေအနေတချို့ တိုးတက်ခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို တနေရာကနေတနေရာရွှေ့ပြောင်းတာမျိုး၊ ထောင်ဝင်စာတွေ ပိတ်ပင်ထားတာမျိုးတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း ဒီအကျဉ်းသားမိသားစုဝင်ကပဲ ပြောပါသေးတယ်။"ထူးခြားမှုကတော့ အဆောင်တွေ ခြိမ်းလိုက်တာပေါ့။ လူတွေ ဘယ်လိုထားမလဲတော့မသိသေးဘူး။ တွေ့ပေးမယ့်လူပဲ ခွဲထားလိုက်လား၊ ကျန်ခဲ့တဲ့တပတ်လောက်ကတော့ဟင်းအစိုလေးတွေ နှစ်မျိုးလောက် ပြန်ပေးခိုင်းတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ ပေးလို့မရဘူး။"တကယ်တော့ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေအပြင် စွပ်စွဲချက်တွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ ထောင်တွေထဲမှာ ထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အနေနဲ့က ဥပဒေကြောင်းအရအကာအကွယ်တွေကလည်း မရှိသလောက် ဖြစ်နေရတယ်လို့ မိသားစုဝင်တွေ၊ အကျဉ်းသားတွေအတွက် လိုက်ပါကူညီပေးနေတဲ့ ရှေ့နေတွေကလည်း ပြောနေကြတာပါ။ဒီအထဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် စက်တင်ဘာ သံဃာတော်တွေဦးဆောင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေအတွင်းထင်ရှားခဲ့တဲ့ သံဃာတော်တပါးဖြစ်တဲ့ အရှင်ဂမ္ဘီရရဲ့အမှုကို လိုက်ပါကူညီပေးဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ရှေ့နေ ဦးညီညီလှိုင်ကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ကြုံနေရတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခုလိုဆိုပါတယ်။ "ဦးဂမ္ဘီရလိုလူတွေက ဘာပုဒ်မနဲ့ အရေးယူထားပြီး ဘာပုဒ်မနဲ့ အဖမ်းခံထားရမှန်း မသိဘဲနဲ့ ထောင်ထဲမှာပဲ ခုခံချေပခွင့် မရဘဲနဲ့ အချုပ်ခံထားရတာ ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျနော်တို့ကို မည်သည့်ပုဒ်မနဲ့ အရေးယူထားပြီး မည်ကဲ့သို့ ခုခံရမယ်ဆိုတာ သိသာထင်ရှားအောင် လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ထောင်ထဲမှာပဲ ချုပ်ရက်တွေအကြာကြီး ခုခံချေပခွင့်မရဘဲနဲ့ ဒီအတိုင်းပဲ အချုပ်ခံနေရတဲ့အတွက် အများကြီး လူ့အခွင့်အရေး ထိခိုက်နစ်နာနေပါတယ်ဆိုတာ ပြောသင့်ပါတယ်။ ဒါမျိုး အခြားလူတွေမှာလည်း ရှိပါတယ်။"ဥပမာ ကျနော်လိုက်တဲ့အမှုထဲက ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားထဲက ကိုကျော်ဆန်းဆိုရင်သူက အေးစေတီဘုရားမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် တခြားအန်န်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်တွေနဲ့ ဆုတောင်းကြတယ်။ ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာ သူတို့စိတ်ထဲကနေ သူတို့ လွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီး ဆုတောင်းတာ။ ဘယ်သူမှလည်း မကြားနိုင်ဘူး၊ မသိနိုင်ဘူး။ ဒီဟာကိုပဲ ရုံးတင်စစ်ဆေးတဲ့အခါကြတော့ ပုဒ်မ ၁၄၇၊ ၅၀၅(ခ)တို့နဲ့ စစ်ဆေးတဲ့အခါကြတော့ ဘုရားဝတ်ပြုနေတဲ့ပုံကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပြီး ဒါ ပြစ်မှုကျူးလွန်နေပါတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲထားတာမျိုးတွေပေါ့။"ဒါ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေးပဲ။ လူတိုင်းမှာရှိတဲ့ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ဆုတောင်းပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးလေးတောင် မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် လူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်က တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး အဖြေတခု ထုတ်သင့်ပါတယ်။ ဒါ ကျနော်တို့ရဲ့ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးတာဖြစ်တယ်။"ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် လူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းဆုံး ၂,၀၀၀ လောက် ရှိတယ်ဆိုပြီးစာရင်းပြုစုထားပေမယ့် မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဆိုတာမရှိဘူး၊ ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုနဲ့ အရေးယူထားတာသာ ဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကာကွယ်ပြောဆိုနေတာပါ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့ ဥပဒေအကျိုးဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးညီညီလှိုင်ကတော့ …"နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အမှန်တကယ် ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ အဖမ်းခံထားရတဲ့လူတွေ အမှန်တကယ်ရှိနေပါတယ် ဆိုတာကိုတော့ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ကို သိစေချင်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်၊ အုပ်ချုပ်တဲ့မူကိုမကြိုက်လို့ ပြောကြဆိုကြတဲ့လူတွေ အဖမ်းခံရတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့အတွက် အမှုရင်ဆိုင်ရတယ်။ ဒါ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပါ၊ နိုင်ငံရေးပြစ်မှုပါဆိုတာ သိသာထင်ရှားစေချင်တယ်။"ရန်ကုန်မြို့က ရှေ့နေ ဦးညီညီလှိုင်ပါ။မနေ့တုန်းကလည်း နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ AmnestyInternational က လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် မြန်မာနိုင်ငံရောက်နေခိုက်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆိုသလိုပဲ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဝေဖန်ပြစ်တင်လိုက်ပါသေးတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတာ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ ကတိတွေသာ ပေးနေတာကို ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ လက်ခံနေဖို့မသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်း ပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။ ရှစ်လေးလုံးအကြို ပဲခူးမြို့မှာ လုံခြုံရေးတင်းကျပ် 05 August 2008 ဦးအောင်လွင်ဦး - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) ဦးအောင်လွင်ဦး - နားဆင်ရန် (MP3) မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှစ်လေးလုံးလို့ လူသိများတဲ့ ၁၉၈၈ ခုနှစ် လူထုအုံကြွမှုကို သွေးထွက်သံယို နှိမ်နင်းခဲ့တာ အနှစ် ၂၀ ပြည့်မြောက်တော့မယ့်အချိန် နီးကပ်လာတာနဲ့အမျှမြန်မာနိုင်ငံ နေရာတချို့မှာ အာဏာပိုင်တွေက လုံခြုံရေးအစီအမံတွေ တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လာနေတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံရေး ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတချို့ ရှိနေချိန်မှာ အခုလို လုပ်ဆောင်လာတာပါ။ အကြောင်းစုံကို ကိုအောင်လွင်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီတောင်းဆို လှုပ်ရှားမှုကို နှိမ်နင်းခဲ့တာ အနှစ် ၂၀ တင်းတင်းပြည့်တော့မှာ ဖြစ်ပေမယ့် ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ အနေနဲ့က မမေ့နိုင်ဘဲ ဒါကို ပြန်ပြောင်းအမှတ်ရစေဖို့ လှုပ်ရှားမှုတချို့ ထွက်ပေါ်လာနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ အာဏာပိုင်တွေကလည်း လုံခြုံရေးတွေကို တိုးမြှင့်ချထားတာပါ။ လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးတွေအပြင်၊ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်တွေ၊ စွမ်းအားရှင်တွေပါ မြို့ကြီးတချို့မှာ ဖြန့်ကြက်ချထားတယ်လို့ မြို့ခံတွေက ပြောပြကြပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့မြောက်ဘက် ပဲခူးမြို့မှာလည်း အစိုးရဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုသတင်းတွေ ထွက်နေလို့ လုံခြုံရေးအစီအမံတွေ ရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မြို့ခံတယောက်က ပြောပြတာကတော့ …"ပဲခူးမှာတော့ လုံခြုံရေး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားတယ်။ မနက်ဖြန်ဆိုရင် ပဲခူးမြို့မှာသွေးစွန်းတဲ့ရက်လေ။ ၆ ရက်နေ့ဆိုတာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က ပဲခူးမြို့မှာ သွေးစွန်းခဲ့တဲ့ရက်။ပဲခူး အမှတ် ၃ ကျောင်းရှေ့မှာ ကျောင်းသားတွေ တော်တော်များများ ပစ်သတ်ခံခဲ့ရတယ်။ အဲဒီကျောင်းရှေ့မှာ ပန်းခွေချမယ်၊ ပန်းခြင်းချမယ် စသည်ဖြင့် သတင်းတွေထွက်နေတယ်။ အဲလို ထွက်နေတဲ့အပေါ်မှာ လုံခြုံရေးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချထားတယ်။"ပဲခူးမှာ အခုအချိန်ထိတော့ ဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။ အာဏာပိုင်တချို့ကကျတော့လည်းဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ပြောနေကြတယ်။ ဒီရက်မှာ ပန်းခွေချရင် ဖမ်းမယ်ဆီးမယ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူ ပန်းခွေချမှာလဲ၊ ဘာလဲဆိုတာ အာဏာပိုင်တွေက လိုက်စုံစမ်းနေတယ်။ ပဲခူးမြို့ယာဉ်ဝင်းထဲမှာလည်း ရဲတွေ၊ လက်နက်ကိုင်လုံခြုံရေးတွေ ချထားတာတွေ့ရတယ်။လမ်းတွေ လမ်းတွေမှာလည်း လုံခြုံရေးတွေ ချထားတာ တွေ့ရတယ်။ လမ်းအသီးသီးမှာရဲတွေ၊ ရဲတွေ။"ဒီလို ရှစ်လေးလုံး လူထုအုံကြွမှု နှစ်ပတ်လည်ကာလ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေတကျော့ပြန်ပေါ်လာမှာကို ကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ လုံခြုံရေးအစီအမံတွေ ရှိနေသလို၊ ထူးထူးခြားခြား ဆိုသလိုပဲ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတိပေးချက်တွေကိုလည်း အာဏာပိုင်တွေက ထုတ်ပြန်ထားတာတွေလည်း ရှိတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မယ့်သူတွေ ရှိနေတယ်၊ ဒီလူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းပေးဖို့ ပဲခူးမြို့မှာ အာဏာပိုင်တွေက နှိုးဆော်ထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။"ဗုံးဖောက်ဖို့အတွက် လူလေးယောက် ဓာတ်ပုံတွေ လိုက်ကပ်ထားတယ်။ အဲဒီလူတွေတွေ့ရင် အကြောင်းကြားပေးဖို့ပေါ့။ ဆုငွေပါထုတ်ထားတယ်ပြောတယ်။ ဓာတ်ပုံဆိုတာလည်း သိပ် သဲသဲကွဲကွဲကြီး မဟုတ်ပါဘူး။ ခဲပန်းချီပုံစံမျိုး။ အဲဒါကို မိတ္တူကူးပြီးတော့လိုက်ကပ်ထားတာ။ ယာဉ်ဝင်းတွေရော ဈေးရုံတွေမှာရော လိုက်ကပ်ထားတယ်။တကယ့် လူအထင်ကရ နေရာတွေမှာ လိုက်ကပ်ထားတာပေ့ါ။ ဗုံးဖောက်ခွဲမယ့်လူလေးယောက် ရောက်နေတယ်ပေါ့။ အဲဒါကို သတင်းပေးနိုင်ရင် ဆုငွေဘယ်လောက်ပေးမယ်ပေါ့။ အဲလိုရေးထားတယ်။"မကြာသေးခင်လတွေကလည်း ပဲခူးတိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နေရာတချို့မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ ဒါတွေဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါ လက်ချက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုတော့ အာဏာပိုင်တွေဘက်က စွပ်စွဲပြောဆိုမှု တချို့သာရှိပေမယ့်ခိုင်ခိုင်မာမာ ထုတ်ဖော်နိုင်တာမျိုးတော့လည်း မရှိသေးပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့်ချထားတာ၊ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်သူတွေ ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဒေသခံတွေကြား သဘောထားတွေကတော့ အခုလိုပါလို့ ဒီမြို့ခံကပဲပြောပြပါတယ်။"ပဲခူးမြို့ခံတွေက ဒါတွေ ရိုးနေပြီ။ ဘယ်သူမှလည်း ရင်လည်းမခုန်တော့ဘူး၊ ဒီကိစ္စတွေက။ ဒါတွေက ဘယ်သူတွေလုပ်တယ်ဆိုတာ ပဲခူးမြို့ခံတော်တော်များများက သိနေတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရင်လည်းမခုန်တော့ဘူး၊ ဂရုလည်းမစိုက်ကြတော့ဘူး။"ရှစ်လေးလုံး ဒီမိုကရေစီတောင်းဆိုတဲ့ လူထုအုံကြွမှု အနှစ် ၂၀ ပြည့်တော့မယ့်အချိန်လုံခြုံရေးတွေ တိုးမြှင့်ချထားတဲ့ မြို့တမြို့ဖြစ်တဲ့ ပဲခူးမြို့က အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြို့ခံတယောက် ပြောပြသွားတာပါ။ ဒီအတောအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာလည်း အာဏာပိုင်တွေက လုံခြုံရေးအစီအမံတွေတင်းကျပ်ထားပြီး ဒေသခံတွေကို မသင်္ကာရင် မသင်္ကာသလို စစ်ဆေးမေးမြန်းတာမျိုးတွေလည်း ရှိနေတယ်ဆိုပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှအခြေစိုက် Kaladan သတင်းတပုဒ်ကလည်းဖော်ပြပါသေးတယ်။ သမ္မတဘုရှ် တောင်ကိုရီးယားခရီးစဉ် ဆန္ဒပြမှုများနှင့်ကြုံ 05 August 2008 အပြည့်အစုံ - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) အပြည့်အစုံ - နားဆင်ရန် (MP3) အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ဂ်ျ ဘုရှ် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့ရောက်လာတာကို တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား ၂၀,၀၀၀ လောက်ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ သမ္မတဘုရှ် ဒီကနေ့ရောက်သွားတာနဲ့အတူတောင်ကိုရီးယားရဲတွေက မီးသတ်ပိုက်တွေသုံးပြီး ဆန္ဒပြသူတချို့ကို ရေနဲ့ထိုး ဖြိုခွဲခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဘုရ်ှနဲ့ အမေရိကန်အမဲသားတင်ပို့တာကိုကန့်ကွက်တဲ့ကြွေးကျော်သံတွေကို ဆန္ဒပြသူတွေက အော်ဟစ်ခဲ့ကြသလို တခြားဆန္ဒပြသူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ တောင်ကိုရီးယားအစိုးရကိုယ်တိုင်နဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖြန့်ကျက်မှုတို့ကို ကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆန္ဒပြသူ ၁၂ ယောက်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုဆန္ဒပြပွဲဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လကစီစဉ်ခဲ့တဲ့ သမ္မတဘုရ်ှရဲ့ခရီးစဉ်ကို ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ထိဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဆန္ဒပြပွဲတွေလောက် မပြင်းထန်ခဲ့ပါဘူး။တရုတ်ပြည် ရှင်းကျန်းပြည်နယ် တိုက်ခိုက်မှု ၀ီဂါမူဆလင် ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီး 05 August 2008 သတင်း - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) သတင်း - နားဆင်ရန် (MP3) ကက်ရ်ှကာမြို့ရှိ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခံရသည့် နေရာအနီးတွင် တရုတ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ကင်းလှည့်နေစဉ်။ မနေ့က တရုတ်နိုင်ငံ ရှင်းကျန်းပြည်နယ်ကက်ရ်ှကာမြို့မှာ တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၆ ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြင်းထန်စွာပြစ်တင်ရှုတ်ချလိုက်ပါတယ်။သေဆုံးသွားတဲ့ တရုတ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျန်ရစ်သူ မိသားစုတွေအတွက် ၀မ်းနည်းကြောင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဂွန်ဇာလို ဂဲလက်ဂေါ့စ်(Gonzalo Gallegos) က ဆိုပါတယ်။လက်သည်တရားခံတွေဟာ ၀ီဂါ မူဆလင်တိုင်းရင်းသား ၂ ဦးဖြစ်တယ်လို့ အစိုးရရဲ့ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ကြေညာပါတယ်။ အသက် ၂၈ နှစ်နဲ့ ၃၃ နှစ်ရှိကြတဲ့ ဗုံးခွဲတရားခံ ၂ ဦးကိုလည်း နောက်ပိုင်းမှာ ဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဘေဂျင်း ကမ္ဘာ့နွေရာသီအိုလံပစ် အားကစားပွဲတော် စတင်ကျင်းပဖို့ လေးရက်အလိုမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဒီဗုံးပေါက်မှုဟာ မနက်စောစော ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး အပြေးလေ့ကျင့်နေတဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆီကို အမှိုက်တင်ထရပ်ကားတစီးက မောင်းဝင်ပြီးပါလာတဲ့ ဗုံးခွဲသမားတွေက ဗုံးလည်းခွဲ၊ ရဲတွေကိုလည်း ဓားနဲ့ထိုး တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကုလကိုယ်စားလှယ် မြန်မာခရီးစဉ်အပေါ် AI အဖွဲ့ မျှော်လင့်ချက်သိပ်မရှိ 05 August 2008 မခင်ဖြူထွေး - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) မခင်ဖြူထွေး - နားဆင်ရန် (MP3) ကုလသမဂ္ဂ၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့် အရေး အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး တိုးမတ်(စ်) အိုဟေး ကင်တားနား၊ ဇွန် ၉၊ ၂၀၀၈ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်သစ် တိုးမတ်(စ်) အိုဟေး ကင်တားနား(Tomas Ojea Quintana) မြန်မာနိုင်ငံကို ၅ရက်ကြာခရီးစဉ် ရောက်ရှိနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတာအပြင်တခြားလူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ ကတိတွေသာပေးနေတာကို ကုလသမဂ္ဂဘက်က ဆက်ပြီးလက်ခံနေဖို့ မသင့်တဲ့အကြောင်း နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ (AmnestyInternational) က မနေ့က ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို မခင်ဖြူထွေးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ တိုးပြီးလုပ်ပါ့မယ်လို့အမျိုးမျိုးကတိပေး ပြောဆိုနေပေမယ့်လည်း လက်တွေ့မှာတော့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပြီး တခြား လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ကြီးက ပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ သတင်းစာဆရာကြီးဦးဝင်းတင် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကို ချွင်းချက်မရှိ ချက်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးဖို့ကိုလည်း အဖွဲ့ကြီးက တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က အခုလို ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ဟာ ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တားနား မြန်မာပြည်ကို ရောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ တချိန်တည်းဖြစ်တာကြောင့်အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ မစ္စတာကင်တားနားရဲ့ အခုခရီးစဉ်ကနေ တစုံတရာ မျှော်လင့်မှုများရှိနေလားလို့ မေးကြည့်တော့ မစ္စတာကင်တားနားရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်ဟာ သူ့ရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ် ခရီးစဉ်ဖြစ်တာကြောင့် ဒီခရီးစဉ်ကနေ ထူးထူးခြားခြား အပြောင်းအလဲတခု လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်တဲ့အကြောင်း AI အဖွဲ့ရဲ့မြန်မာ့အရေး သုတေသနမှူး ဘင်ဂျမင် ဇ၀က်ကီး (Benjamin Zawacki) က ဆိုပါတယ်။"မျှော်လင့်ဖို့ ခက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီခရီးစဉ်က သူ့ရဲ့ ပထမဆုံးခရီးစဉ်ပါ။ သူ့အနေနဲ့က မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးကလူတွေ ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်မှာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျနော်တို့ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကတော့ တော်တော်ကို နည်းပါတယ်။ ဒီလနှောင်းပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ဖို့ရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဂမ်ဘာရီရဲ့ ခရီးစဉ်ကို ကျနော်တို့က ပိုပြီးတော့ မျှော်မှန်းတာပါ။"ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ လအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို သုံးကြိမ်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာဂမ်ဘာရီအနေနဲ့လည်း ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား ရလဒ်ကောင်းတစုံတရာရအောင် မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ရှေ့တခေါက် မစ္စတာဂမ်ဘာရီ မြန်မာပြည်ကို သွားပြီးရင်တော့ တိကျသေချာတဲ့ ရလဒ်တစုံတရာ ရရှိအောင် လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အနည်းဆုံးအဆင့် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းချခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတဲ့အထိ လုပ်နိုင်သင့်ပါတယ်။"AI အဖွဲ့ရဲ့ မြန်မာ့အရေး သုတေသနမှူး ဘင်ဂျမင် ဇ၀က်ကီး ပြောခဲ့တာပါ။အထူးကိုယ်စားလှယ်သစ် မစ္စတာကင်တာနားဟာ သူ့ရဲ့ အခုခရီးစဉ် ပထမဆုံးနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံက လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့တွေက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ ဘယ်လိုနေရာတွေကို သွားခွင့်ရမယ်၊ ဘယ်သူတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရမယ်ဆိုတာ မသေချာပေမယ့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(အန်န်အယ်လ်ဒီ) ပါတီကတော့ အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖို့ မျှော်လင့်နေသလိုမြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုဆွေးနွေးဖို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ အန်န်အယ်လ်ဒီပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။"ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ မစ္စတာပင်ညဲရိုး (Mr. Pinheiro) တုန်းကလည်း တွေ့ခဲ့ကြတော့ အခုလည်း တွေ့ခွင့်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ အဲဒါကြောင့် တွေ့လို့ရှိရင်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တဲ့ဟာတွေကတော့ အများကြီးပေါ့၊ အဲဒီအထဲကမှဘယ်အချက်တွေကို ပြောသင့်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကကြိုတင်စီစဉ် စဉ်းစားထားပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်မှာ အများကြီးပဲ။ ဒီအထဲက အရေးကြီးတဲ့ဟာ၊ လတ်တလော ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ဟာတွေကို ဦးစားပေးပြီး ဆွေးနွေးမှာပါ။"အစိုးရလက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့ အစိုးရနဲ့ကင်းကွာတဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့သင့်တယ်၊ ဒါမှသာ အထူးကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သိချင်တာတွေကို သိခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ်သစ်အနေနဲ့ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်နဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့အပြင် တခြား လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရကို တိုက်တွန်းပြောဆိုသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးနေ့အကြို ရန်ကုန်မြို့လုံခြုံရေး တင်းကျပ်ဧရာဝတီ | သြဂုတ် ၄၊ ၂၀၀၈အနှစ် ၂၀ ပြည့် ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ့ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ရန်ကုန်နှင့် တခြားမြို့ကြီးများတွင် စစ်အစိုးရက လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို တိုးချဲ့တပ်ဖြန့်ထားပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၂ ပတ်ကတည်းက ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များသို့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပြောင်းရွှေ့ထားသည်။(ဓာတ်ပုံ - မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များအစည်းအရုံး) ရန်ကုန်ရှိ အန်ဂျီအို ၀န်ထမ်းတဦးက “စစ်သားနဲ့ လုံထိမ်းတွေကို နေရာအနှံ့မှာ တွေ့နေရတယ်။ ရှစ်လေးလုံးနေ့ နီးလာလို့ လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာရင် အချိန်မီတားဆီးနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားတာ ဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ရန်ကုန်မြို့ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူတဦးကလည်း “နေရာအနှံ့မှာ ရဲတွေချည်းပဲ … ရန်ကုန်တမြို့လုံး ဆိုပါတော့ ဗျာ။ ပွဲတိုင်းကျော်တဲ့ တပ်မ ၁၁ နဲ့ တပ်မ ၇၇ လည်း ပါတာပေါ့ … မြို့အ၀င်တွေမှာ ပိုများတယ်” ဟု ပြောသည်။ယခုလဆန်းကစ၍ ပြည်တွင်းရှိ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများက ဆိုင်းဘုတ်များ၊ နံရံများတွင် ဆေးအနီရောင်သုတ်သည့် အနီ ရောင်လှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်။ရန်ကုန်အခြေစိုက် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ အစည်းအရုံး၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ကိုမိုးသွေးက ဒီမိုကရေစီနှင့် လွတ်လပ်ခွင့် တို့အတွက် ကျောင်းသားလူငယ်များ အသက်ပေးခဲ့ကြသည်ကို မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ နားလည် အသိအမှတ်ပြုစေရန် ရည်ရွယ်၍ အနီရောင်လှုပ်ရှားမှုကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။ဆေးအနီရောင်သုတ်သည့် လှုပ်ရှားမှုအပြင် ရန်ကုန်ရှိ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများတွင်လည်း ရှစ်လေးလုံး အထိမ်းအမှတ်စာ များနှင့် စစ်အစိုးရဆန့်ကျင်စာများကို ကျောင်းသားများက ကပ်ခြင်း၊ နံရံများတွင် ရေးသားခြင်းများ ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။“ကျောင်းသားရှိရင် သမဂ္ဂ ရှိရမယ်ဆိုတဲ့စာတွေ ကျောင်းတွေထဲမှာ ပလူပျံနေတယ်ဗျ။ နံရံတွေမှာရေးတာ … အဲဒီကိစ္စ ပြဿနာ တက်နေတယ်” ဟု လှိုင်သာယာ ဒေသခံက ပြောသည်။ဒဂုံတက္ကသိုလ်မှ ဆရာမတဦးကလည်း စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၊ ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်နှင့် ဒဂုံတက္ကသိုလ်တို့တွင် စစ်အစိုးရ ဆန့်ကျင်စာများကို ယနေ့ကပ်သည်ဟု ပြောသည်။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ သောမတ်စ် ဟိုဟေး ကင်တာနာ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေ သဖြင့် ရန်ကုန်တွင် လုံခြုံရေးများတိုးမြှင့်ထားသည်ဟုလည်း သိရသည်။ကုလသမဂ္ဂရုံးခန်း အများစုဖွင့်လှစ်ထားသည့် ထရိတ်ဒါးဟိုတယ်တွင် ရဲနှင့် စစ်သားများ လုံခြုံရေးချထားသည်ကို တွေ့ရ သည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။ ကုလ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် ရန်ကုန်ဆိုက်ရောက်အေးချမ်းမြေ့ | သြဂုတ် ၄၊ ၂၀၀၈ယမန်နေ့က မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိလာသော ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့် အရေးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကိုယ်စားလှယ် တောမတ်စ် အိုဟေးကင်တာနာသည် ၎င်း၏ မြန်မာပြည် လေးရက်တာခရီးစဉ်အဖွင့်အနေနှင့် နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယက အဖွဲ့၊ တခြားသော ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့တို့နှင့် ယနေ့ စတင်တွေ့ခွင့်ရကြောင်း အေပီ သတင်းဌာနက ရေးသားဖော်ပြ ထားသည်။၎င်း၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်မူ မြန်မာ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များ၊ နိုင်ငံရေး အတိုက်အခံ အဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းများနှင့် တရားဝင် တွေ့ခွင့်ရရန် တောင်းဆိုထားသည်။ကင်တာနာက “မြန်မာ ပြည်သူလူထုအတွက် လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တိုးတက် ကောင်း မွန်လာဖို့ အာဏာပိုင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်” ဟု သူ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ရေးသား ဖော်ပြထားသည်။ ထို့ပြင် နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဒဏ် ပြင်းထန်စွာခံခဲ့ရသော ဧရာဝတီ တိုင်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခွင့်ရရန်လည်း တောင်းဆိုထား၏။တနင်္ဂနွေနေ့က မြန်မာပြည်သို့ ရောက်ရှိနေသော ကင်တာနာသည် ၈ လေးလုံးအရေးတော် ပုံ နှစ် ၂၀ ပြည့်သည့်နေ့ မတိုင်ခင် တရက်အလို သြဂုတ် ၇ ရက်နေ့ထိ မြန်မာပြည်တွင် နေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အေပီ သတင်းတွင်ဖော်ပြထားသည်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တဦးဖြစ်သည့် ဦးဥာဏ်ဝင်းကမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ကင်တာနာတို့ တွေ့ခွင့် ရ၊ မရ မပြောနိုင်သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဆရာဝန် ပြခွင့်ရရန် တောင်းဆို မည်ဟု ပြောကြားကြောင်း ၎င်း သတင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိသည်။“ကျနော်တို့ အရေးတကြီးလိုအပ်တာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် ပုံမှန်ကြည့်ပေးမယ့် ဆရာဝန် တယောက်ပါ” ဟု ဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောကြားကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတွင် ၈ လေးလုံး နှစ်ပတ်လည် မတိုင်မီ တပတ်ကျော်ကာလ ကတည်းက လုံခြုံရေး တင်းကျပ်မှုများ ရှိနေပြီး ယခုအခါ ကင်တာနာ လာသည့်အတွက် လုံခြုံရေးများကို ပိုမိုတင်းကျပ်သည်ဟု ဒေသခံများက ပြောသည်။“ညဘက်တွေမှာ စစ်သားတွေ ကင်းလှည့်တာ တပ်စိတ် တစိတ်စာလောက်ရှိတယ်။ လက်နက် အပြည့်အစုံနဲ့ လမ်းလျှောက် ပြီးလှည့်ကြတာ။ ကားတွေနဲ့လည်း လုံထိန်းတွေ ကင်းလှည့်တယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့၊ ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ တဦးကပြောသည်။ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းမှ အတွင်းရေးမှူး ကိုတိတ်နိုင်က မစ္စတာကင်တာနာအနေနှင့် မြန်မာပြည်ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ဖွယ်ရှိ သည် ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ သို့သော်လည်း မစ္စတာ ကင်တာနာအရင် မြန်မာပြည်သို့ သွားခဲ့သည့် မစ္စတာ ပီညဲရိုးကိုယ်တိုင် လူ့အခွင့် အရေးချိုးဖောက်ခံခဲ့ရသော်လည်း နိုင်ငံတကာ အသိုင်း အဝန်းမှ မြန်မာ စစ်အစိုးရအပေါ်ဆက်ဆံရာတွင် ပျော့ပြောင်း လွန်းသည်ဟု ၎င်းကဆိုသည်။“ကုလသမဂ္ဂအပါအဝင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်းက နအဖကို ဆက်ဆံတာ သိပ်ကို သံတမန် ဆန်လွန်းတယ်။ မစ္စတာ ပီညဲရိုးတုန်းကဆို သူလုပ်ခဲ့တဲ့ ၇ နှစ်အတွင်းမှာ မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၁၀၀၀ ကျော် ထပ်တိုးသွားတယ်” ဟု ဆက်ပြောသည်။ လူ့အခွင့်အရေး ပညာပေးဌာန (မြန်မာပြည်) ၏ ဒါရိုက်တာ ကိုအောင်မျိုးမင်းကမူ ယခု လူ့အခွင့်အရေး ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာကင်တာနာအနေနှင့် ရာထူးစယူစဉ်ကာလကတည်းက မြန်မာပြည် လူ့အခွင့် အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှု မရှိကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သူဖြစ်သောကြောင့် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ကိုင် မည်ဟု မျှော်လင့်ရကြောင်း ပြောကြားသည်။“သွားရုံနဲ့တော့ တိုးတက်မှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ခုအချိန်မှာ နိုင်ငံတကာကကော အာဆီယံနိုင်ငံတွေကပါ မြန်မာပြည် လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စကို ဝိုင်းအော်နေကြပြီဆိုတော့ အဲဒီဖိအားပေးမှုတွေကို နအဖက ဘယ်လောက်ထိ တောင့်ခံနိုင်မလဲ ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။မစ္စတာကင်တာနာအရင် ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ပေါ်လိုဆာဂျီယိုပီညဲရိုးမှာမူ ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလက မြန်မာပြည်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့် မရရှိခဲ့ပေ။ မြန်မာ့အရေး ဘုံသဘောထား ထားရန် လှုံဆော်သူများက တိုက်တွန်း မဇ္ဈိမသတင်းဌာန တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ 04 2008 19:02 - မြန်မာစံတော်ချိန် ချင်းမိုင်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း အခြေခံကျသော အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက် နေပြည်တော်ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများအပေါ် ထားရှိသည့် နိုင်ငံတကာ၏ သဘောထားမှာ တသမတ်တည်း တူညီနေကြရန် လိုသည်ဟု မြန်မာ့ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအရေး ဆော်သြစည်းရုံး လှုပ်ရှားနေသည့် အဓိက အဖွဲ့ကြီးတခုက ပြောကြားလိုက်ပါသည်။ “၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပွါးအပြီး အနှစ် ၂ဝ အကြာတွင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် ခြွင်းချက်မရှိ ဆက်ဆံရေး၊ လူမသိသူမသိ သံခင်းတမန်ခင်း၊ အာဆီယံ၏ ခေါ်ဆိုလေ့ရှိသော အပြုသဘော ဆက်ဆံရေး အားလုံးသည် အလုပ်မဖြစ် ကျရှုံးခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရန်လိုသည်” ဟု မြန်မာ့ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံ နှစ် ၂ဝ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ထုတ်ပြန်လိုက်သည့် ကြေညာချက်တွင် ယှဉ်ပြိုင်အာဆီယံ အဖွဲ့ကြီး (ALTSEAN) က ပြောဆိုသွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိ အမေရိကန် ဦးဆောင်သည့် ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများ မအောင်မြင်ရခြင်းသည် မြန်မာ့ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ဘက် နိုင်ငံများက ဤနိုင်ငံတကာ ဘုံရပ်တည်ချက်ကို ပါဝင်ပူးပေါင်းခြင်း မရှိခြင်းကြောင့် ဟု ဤအဖွဲ့ကြီးက ရှုမြင်ပါသည်။ “နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရက သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလအတွင်း စစ်မှန်သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်လာစေရန် ဘုံရပ်တည်ချက် သဘောထားတရပ် ချမှတ် လုပ်ဆောင်ရမည်” ဟု (ALTSEAN) က ယနေ့ ထုတ်ပြန်လိုက်သော ကြေညာချက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ “အာဆီယံနိုင်ငံများ၊ တောင်နှင့် အရှေ့အာရှ နိုင်ငံများ၊ အထူးသဖြင့် တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သည် ဤသို့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း စစ်မှန်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများ ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက် အဓိက တာဝန်ရှိသော နိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည်” ဟု အဆိုပါ ကြေညာချက်တွင် ဆက်လက် ဖေါ်ပြထားသည်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွှတ်ပေးရန်လည်း တောင်းဆိုထားပြီး စစ်အစိုးရ၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) နှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ပါဝင်သည့် သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရေးသည် အဓိက အရေးကြီးသည့် လိုအပ်ချက်တရပ် ဖြစ်သည်ဟု (ALTSEAN) အဖွဲ့ကြီးက ရှုမြင်ပါသည်။ “ဤနိုင်ငံတကာ ဘုံရပ်တည်ချက်တွင် အဓိက ကာယကံရှင်များ ဖြစ်သည့် ဒီချုပ် (NLD) ၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များက စစ်အစိုးရနှင့်အတူ တရားဝင် လက်တွဲ ဆောင်ရွက်ဖက်များ အနေဖြင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရေးသည် အလွန်အရေးကြီးပြီး ယင်းကို အာမခံချက် ပေးထားရမည်” ဟု ဤအခွင့်အရေး တိုက်ပွဲဝင် အုပ်စုကြီး၏ ကြေညာချက်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောကြားထားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ဆက်လက် ဖြစ်ပွါးလျက်ရှိသော အကြပ်အတည်းကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းရေးတွင် ဒေသတွင်း ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ အကျိုးစီးပွါးသည် ထိပ်တန်းမှ ပါဝင်နေပြီး သူတို့အနေဖြင့် ဤစီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းလှသည့် အကျိုးအမြတ်များ ဆုံးရှုံးဖွယ်ရာ ရှိနေသောကြောင့် ဖြစ်သည် ဟုလည်း ALTSEAN အဖွဲ့ကြီးက ဆိုလိုက်ပါသည်။ ပြင်ပနိုင်ငံများက ဤသို့ တသံတည်းမထွက်၊ တူညီသည့် ဘုံသဘောထားတရပ် ကင်းမဲ့နေခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူများ၏ နေ့စဉ်ဘဝမှာ အလွန်အမင်း ဆိုးရွားနေပြီး၊ ၉ဝ% သော လူထုမှာ တနေ့လျှင် ၁ ဒေါ်လာအောက်သာ ဝင်ငွေရှိသည်ဟုလည်း ဆိုထားပါသည်။ ထို့ပြင် ၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဂျူလိုင်လမှ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဇွန်လ အထိ တနှစ်အတွင်း တိုင်းပြည်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား အရေအတွက်မှာ ၆၅ % တိုးလာပြီး ယခုအခါ ၁၉ဝဝ ရှိနေပြီ ဖြစ်သည်။ ၈၈၈၈ အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်ပွါးခဲ့သည်မှ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ အတွင်းကာလတွင် စစ်အစိုးရ၏ တဘက်သတ် အုပ်စိုးနေမှုအပေါ် ဆန့်ကျင် တွန်းလှန်နေကြသည့် အတိုက်အခံ အင်အားစုများ အကြားတွင်လည်း ကျယ်ပြန့် ကွဲပြားသည့် အသိုင်းအဝိုင်းတရပ် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ယင်းအတိုက်အခံ အင်အားစုကြီးတွင် “တိုင်းရင်းသား အင်အားစုများ၊ အကျိုးစီးပွါး အုပ်စုများ၊ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့ခွဲ အင်အားစုများ” ပါဝင်နေသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရများ အနေဖြင့်လည်း ဤအသစ် ဖြစ်ထွန်းတိုးပွါး ဖြစ်ပေါ်လာနေသည့် စစ်အစိုးရ၏ ပေါ်လစီ မူဝါဒများကို ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်နေသည့် မြန်မာ့ အတိုက်အခံ အင်အားစုများအတွင်း မြန်မာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများကို ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက်ရာတွင် အားလုံးကို ရောင်ပြန်ဟပ် လွှမ်းခြုံဖေါ်ပြနိုင်သည့် တသံတည်း ထွက်စေမည့် ဘုံသဘောထား ရပ်တည်ချက်တရပ် ထားရှိကြရန် အရေးတကြီး လိုအပ်နေပြီဟုလည်း ပြောဆိုသွားပါသည်။ “နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်း အနေဖြင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကြီးက အာရုံစိုက် ဖေါ်ပြနေသည့် အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာ အာဏာခွဲဝေ ကျင့်သုံးသည့် ပုံသေနည်းကို အတိအလင်း လူသိရှင်ကြား ထောက်ခံ အားပေးကြရမည်၊ ဤအဖြေရှာရေး ပုံစံတွင် နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ ဟု ခေါ်တွင်သည့် မြန်မာစစ်အစိုးရ အနေဖြင့်လည်း ပါဝင်ရန် တိုက်တွန်း အားပေးရမည်” ဟု ALTSEAN အဖွဲ့ကြီး၏ ကြေညာချက်က တိုက်တွန်း တောင်းဆိုထားသည်။သွေးစွန်းသော မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းများကို မဝယ်ကြပါရန် ကင်ပိန်း လှုပ်ရှားသူများက ပြော မုံပီး တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ 04 2008 23:52 - မြန်မာစံတော်ချိန် နယူးဒေလီ။ ။ မြန်မာမိုင်းတွင်း လုပ်သားများ၏ ဒုက္ခ ခံစားနေရမှုများကို ခံစား နားလည်သောအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ သွေးစွန်းနေသော ကျောက်စိမ်းများကို ဝယ်ယူခြင်း မပြုကြပါရန် ကမ္ဘာတဝှမ်းမှ လက်ဝတ်ရတနာ ဝယ်ယူသူများ၊ တရုတ် ပြည်သို့ အလည်အပတ် သွားရောက်ကြမည့်သူများ၊ အိုလံပစ် ပွဲကြည့် ပရိသတ်များ၊ အိုလံပစ် အားကစားသမားများကို အစီရင်ခံစာ တရပ်က တိုက်တွန်း မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါသည်။လှုပ်ရှား တက်ကြွသူအုပ်စု ၂ ခုဖြစ်သည့် ကချင်ပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား လူငယ်များအဖွဲ့ (AKSYU) နှင့် မြန်မာ့ ၈၈၈၈ အဖွဲ့တို့က ထုတ်ပြန်လိုက်သော အစီရင်ခံစာ တရပ်တွင် မြန်မာပြည်မှ ထွက်ရှိသော ကျောက်စိမ်းများသည် မိုင်းတွင်း လုပ်သားများ၏ သွေးများ စွန်းပေနေပြီး၊ သူတို့၏ အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများ ချိုးဖောက် ခံနေကြရကာ အဓမ္မ လုပ်အားပေးရမှုများဖြင့်လည်း အမြတ်ထုတ်ခံနေရသည်၊ သူတို့ မြေများကိုလည်း အဓမ္မ သိမ်းယူခြင်း ခံနေကြရသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ပီကင်း အိုလံပစ်ဖွင့်ပွဲ နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှ မြန်မာ့ကျောက်စိမ်း ဝယ်လိုအားမှာ တိုးတက်လာနေပြီး တရုတ်အစိုးရကလည်း ကျောက်စိမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အမှတ်တရ ပစ္စည်းများကို ရောင်းချရန် အားပေး မြှင့်တင်မှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်ဟု “သွေးစွန်းသော ကျောက်စိမ်း” ဟု အမည်ပေးထားသည့် အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ရေးသား ဖေါ်ပြထားပါသည်။“တရုတ်ပြည် ဈေးကွက်တွင် ရောက်ရှိနေသော ကျောက်စိမ်းအများစုသည် မြန်မာပြည်တွင်း လူ့အခွင့်အရေးမျိုးစုံ ချိုးဖောက်ခံနေရသည့် ကျောက်စိမ်း စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းကြီးမှ ထွက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရက ဤလုပ်ငန်းအပေါ်မှ အကျိုးအမြတ်များ ရလျက်ရှိသည်” ဟုလည်း အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။မြန်မာ့ကျောက်စိမ်း လုပ်ငန်းသည် လူသားတို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု ကင်းမဲ့ခြင်းတို့မှ ပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရက တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ထိန်းချုပ်ထားကာ ဤကျောက်စိမ်းများ ကမ္ဘာတဝှမ်း တင်ပို့ရောင်းချသည့် လုပ်ငန်းမှ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီ၍ စစ်အစိုးရအတွက် ဝင်ငွေရစေလျက် ရှိသည် ဟု အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဆက်လက် ရေးသား ဖေါ်ပြထားပါသည်။ကျောက်စိမ်းသည် အပေါ်ယံကြည့်လျှင် အမြင်အားဖြင့် လှပသော်လည်း ယင်းသည် အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း အဓိက ကျောက်စိမ်းမိုင်းတွင်းများရှိရာ ကချင်ပြည်နယ်ရှိ မြန်မာပြည်သူများ၏ အသက်သွေးများဖြင့် ရင်းနှီး ထုတ်လုပ်ထားရသော ပစ္စည်းဖြစ်သည် ဟု မြန်မာ့ ၈၈၈၈ အုပ်စု ဆိုသည့် အဖွဲ့ကလည်း ပြောကြားသွားပါသည်။“အလှဆိုသည်မှာ ကြည့်သူ၏ မျက်စေ့ထဲတွင်သာ ရှိသည်။ သို့သော် ဤကျောက်စိမ်းများကို မည်သို့မည်ပုံ ရရှိခဲ့သည်၊ ဤကျောက်စိမ်း လုပ်ငန်းမှ ရရှိသော အကျိုးအမြတ်များဖြင့် မြန်မာစစ်အစိုးရက လက်နက် တပ်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်လျက် ရှိသည်ကို သိရှိနေရသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့ မျက်စေ့ထဲတွင် ဤသွေးစွန်းသော ကျောက်စိမ်းများသည် ဘယ်လိုမှ လှပမနေနိုင်တော့ပါ” ဟု မြန်မာ့ ၈၈၈၈ အဖွဲ့ (၈-၈-ဝ၈ for Burma) ၏ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ခရစ်စတီးနားမွန်း (Christina Moon) က ပြောဆိုသွားပါသည်။ဤအစီရင်ခံစာအတွက် သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် (AKSYU) က မြန်မာစစ်အစိုးရကို သန်းပေါင်း များစွာသော အမြတ်အစွန်းများ ရရှိနေစေသည့် ကျောက်စိမ်းများကို မဝယ်ယူကြပါရန်နှင့် ဤကျောက်စိမ်း လုပ်ငန်းကြောင့် ဒေသခံ ပြည်သူများစွာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ခံစားခဲ့ကြရကြောင်းလည်း ပြည်သူများကို တိုက်တွန်း ပြောကြားသွားပါသည်။ကျောက်စိမ်းကို ၁၇၈၈ ခုနှစ်ကတဲက ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဒေသခံ ကချင်လူထုက တူးဖော် ထုတ်ယူခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် မြန်မာလူမျိုးများ အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးပေါင်းစုံ ပါဝင် တူးဖော်လာကြပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ (KIO) နှင့် တရုတ်လူမျိုးများ ပိုင်ဆိုင်သော ကုမ္ပဏီကြီးများက ပူးပေါင်း တူးဖေါ်ခဲ့ကြသည်။ (KIO) သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်အထိ မြန်မာစစ်အစိုးရကို တက်ကြွစွာ ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။သို့သော် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် (KIO) နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက် ရရှိပြီးသည့်အခါ မြန်မာ စစ်အစိုးရက ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ ကျောက်စိမ်း၊ စိန်၊ ပုလဲ နှင့် အခြားတန်ဘိုးရှိ ကျောက်မျက်ရတနာများ မှောင်ခို ခိုးထုတ်ခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်ရန် “မြန်မာ့ ကျောက်မျက်ရတနာ ဥပဒေ” ကို ပြဌာန်းခဲ့သည်။သို့သော် ကျောက်မျက်ရတနာ မှောင်ခို ရောင်းဝယ် ခိုးထုတ်မှုများမှာ ရှိမြဲရှိနေပြီး ဤဥပဒေကြောင့် ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီ ငယ်လေးများသာ စစ်အစိုးရ၏ ဈေးကြီးလှသည့် ကျောက်မျက် တူးဖေါ်ခွင့် ခွင့်ပြုချက် လိုင်စင်ကြောင့် ကျောက်မျက် လုပ်ငန်းမှ ထွက်ခွါသွားခဲ့ကြရသည်။“စစ်အစိုးရနှင့် အဆက်အစပ် မရှိဘဲ လွတ်လပ်စွာ တူးဖေါ် ထုတ်လုပ်သည့် ကုမ္ပဏီငယ်လေးများနှင့် သူတို့၏ အပေါင်းအဖေါ်များသည် ကျောက်မျက်တူးဖေါ် ထုတ်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်များကို ရယူခွင့်မှ ထိရောက်စွာ တားမြစ် ပိတ်ပင်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်” ဟု အဆိုပါ အစီရင်ခံစာတွင် ဆိုထားသည်။အဆိုပါ အစီရင်ခံစာအရ ယခုလောလောဆယ် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီ ၃ဝ ခန့် ကျောက်စိမ်းတူးဖေါ်ရေး လုပ်ငန်းတွင် လုပ်ကိုင်လျက် ရှိကြပြီး ယခင်က ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီငယ်လေးများကို ပိုင်ဆိုင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည့် သူများသည် ကျောက်စိမ်းတွင်း အလုပ်သမားများအဖြစ်သို့ လျောကျသွားခဲ့ရသည် ဟု သိရပါသည်။“မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သော စစ်အစိုးရ၏ ကိန်းဂဏန်းများသည် ယုံကြည်စရာ မရှိဘဲ စစ်အစိုးရ ရရှိနေသည့် ကျောက်စိမ်းတင်ပို့ခြင်းမှ အမြတ်အစွန်းများကို ဖေါ်ပြသည့် တိကျသော ကိန်းဂဏန်းများကို ရရှိရန်လည်း အလွန်ခက်ခဲသည်၊ ကျောက်စိမ်း ကုန်သွယ်ရေး လုပ်ငန်းသည် စစ်အစိုးရအတွက် နိုင်ငံခြားဝင်ငွေ ကြီးမားစွာ ရရှိစေသည့် လုပ်ငန်းလည်း ဖြစ်သည်” ဟု ၈၈၈၈ အဖွဲ့မှ ခရစ်စတီးနားမွန်း က မဇ္ဈိမကို ပြောကြားသွားပါသည်။“ကျမတို့ ခုပြောနေတာ စစ်အစိုးရအတွက် တနှစ်ကို ငွေမာ သန်းနဲ့ချီပြီး ရနေတဲ့ လုပ်ငန်းအကြောင်း ပြောနေတာပါ၊ ဝင်ငွေက သန်းရာနဲ့ချီပြီး ရနေတာပါ” ဟု မွန်း က ပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။အိုလံပစ် ဆုတံဆိပ်များတွင် ပါဝင်သည့် ကျောက်စိမ်းများသည် တရုတ်ပြည် ချင်းဟိုင်ပြည်နယ်မှ ထွက်ရှိသည့် ကျောက်စိမ်းများ ဖြစ်ပါသည်ဟု တရုတ်အစိုးရက ပြောကြားနေသော်လည်း ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရတနာတန်းဝင်သည့် အရည်ကျောက် (Imperial Jade) မှာ မြန်မာတနိုင်ငံတည်းကသာ ထွက်ရှိသည့်အတွက် ကင်ပိန်း လှုပ်ရှားသူများကမူ တရုတ်ပြည် ပြင်ပဈေးကွက်တွင် ရောင်းချနေသည့် အမှတ်တရ ပစ္စည်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ရှိသော ကျောက်စိမ်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်နေကြသည်။“ဈေးကွက်မှာ တွေ့နေရတဲ့ ပန်းပုတွေ၊ ရုပ်တုလေးတွေကို တရုတ်ပြည်ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချနေကြတယ်လို့ ကျမတို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဈေးကြီးလှတဲ့ မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ လက်ဝတ် ရတနာတွေကိုလည်း တရုတ်ပြည်မှာ အနှံ့အပြား တွေ့နေရပါတယ်” ဟု မွန်း က ဆက်လက် ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းများနှင့် ပြုလုပ်ထားသည့် အမှတ်တရပစ္စည်းများသည် လူသားတို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခများနှင့် ခွဲခြား၍ မရပါဟုလည်း သူမက ဆက်လက် ပြောဆိုသွားပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းသည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း မိုင်းတွင်းများ၌ ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေသည် သာမက မြန်မာ စစ်အစိုးရအတွက်လည်း ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းက အဓိက အများစုဖြစ်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းမှ နိုင်ငံခြားငွေကြေး အမြောက်အမြားကို ရရှိစေသည်ဟု ပြောဆိုသွားပါသည်။“ဆီရီယာလီယွန်၊ အန်ဂိုလာ၊ ဒီမိုကရက်တစ် ကွန်ဂိုသမတ နိုင်ငံတို့ကထွက်တဲ့ သွေးစွန်းတဲ့ စိန်တွေကို လူတွေက အသိစိတ်ရှိရှိနဲ့ အသေအချာ ရွေးချယ်ပြီး မဝယ်သလိုဘဲ မြန်မာပြည်က ထွက်တဲ့ သွေးစွန်းတဲ့ ကျောက်စိမ်းကိုလည်း လူတွေက သပိတ်မှောက်သင့်ပါတယ်” ဟု သူမက ထပ်မံ ပြောဆိုသွားပါသည်။ ငြိမ်းအဖွဲ့ လက်နက်ချ သန်းထိုက်ဦး တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ 04 2008 18:51 - မြန်မာစံတော်ချိန် ချင်းမိုင်။ ။ အပစ်အခတ် ရပ်စဲထားသော ရှမ်းပြည်အတွင်းရှိ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့တခုကို စစ်အစိုးရက လက်နက်ချရန် ဖိအားပေးခဲ့ရာ အောင်မြင်မှု ရရှိသွားခဲ့သည်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း ဆီဆိုင်မြို့နယ်ရှိ ဦးတာကလယ် ဦးဆောင်းသော ရှမ်းလူမျိုးပေါင်းစုံ ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ (ရလလဖ) အား ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းက လက်နက်ချရန် ဖိအားပေးခဲ့ရာ အနည်းဆုံး ၁ဝ ယောက် လက်နက်ချသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။“အတင်းအကြပ် ချခိုင်းတော့ ယခုလ ၃ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီမှာ တချို့ချလိုက်တယ် ။ တဆယ်။ နှစ်ဆယ်လောက်ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ တချို့ ကျန်နေသေးတယ်။ ဒီနေ့ ၄ ရက်နေ့မှာ အပြီးချကြဖို့ ဆိုပြီးတော့ အဲဒီလို ပြောထားတယ်လို့ ကြားတယ်” ဟု ဒေသတွင်း လှုပ်ရှားမှုကို စောင့်ကြည့်နေသူ စစ်အစိုးရကို လက်နက်ကိုင် ဆန့်ကျင်နေသည့် ပအိုဝ်း ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့၏ ဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာက ပြောသည်။ ရလလဖ ဌာနချုပ်နှင့် မနီးမဝေးတွင် နအဖ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း လက်အောက်ခံ တပ်များကိုလည်း တိုးချဲ့ချထားလိုက်သည်။ဦးတာကလယ် ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တွင် လူအင်အား ၆ဝ ခန့် ရှိပြီး ရလလဖအဖွဲ့သည် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲမှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖားကန့်မြေပြို လူ ၂ဝ သေဆုံး ဖနိဒါ တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ 04 2008 17:15 - မြန်မာစံတော်ချိန် ချင်းမိုင်။ ။ ဖားကန့်ကျောက်စိမ်းတွင်းများတွင် မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားကာ အနည်းဆုံး လူ ၂ဝ သေဆုံးသွားခဲ့သည်ဟု ဒေသခံများ အပြောအရ သိရသည်။မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားခရိုင် ဖားကန့် မှော်စီဇာ ကျောက်စိမ်းတွင်းတွင် ဇူလိုင် ၃ဝ ရက်နေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ကျောက်စိမ်း တူးဖော်သည့် ကုမ္ပဏီများက စွန့်ပစ်ထားသော မြေစာပုံနေရာတွင် ရွှေပြန်လည် ထုတ်ယူနေသူများအကြား မြေပြိုမှု ဖြစ်ပွားကာ သေဆုံးခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသများမှ လာရောက်ကာ လုပ်ကိုင်သူ လက်လုပ်လက်စားများ ဖြစ်ကြသည့် သေဆုံးသူများ၏ ရုပ်အလောင်း ပြန်လည်ရရှိမှု အခွင့်အလမ်း နည်းပါးနေပြီး မြေပြိုသည့်အတိုင်း ပစ်ထားလိုက်မည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်။“ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ ထုတ်ကြတယ်၊ နောက်နေ့ထိပေါ့နော်၊ အခုတော့ မထုတ်ကြတော့ဘူးနဲ့ တူပါတယ်၊ ကျမတို့ဆီကို ၃ - ၄ယောက်လောက်တော့ ရောက်လာတယ်” ဟု လုံးခင်းဆေးရုံးမှ သူနာပြု ဆရာမတဦးက မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။ရန်ကုန်မှ ကီလိုမီတာ ၉၆ဝ ခန့် ကွာဝေးသော ဖားကန့်ဒေသ ကျောက်စိမ်းနှင့် ရွှေတူးဖော်သည့် ဒေသတွင် မြေပြိုမှု ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိသော်လည်း အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်မှုကြောင့် သတင်းထွက်ပေါ်မှု နည်းလေ့ ရှိသည်။ဖားကန့်ဒေသမှ ထွက်ရှိသော ကျောက်စိမ်းများသည် ကမ္ဘာတွင် ထင်ရှားကျော်ကြားသည်။ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားနေချိန်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ကချင်ကျောင်းသားအဖွဲ့ တခုက မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ရှိသော ကျောက်စိမ်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အမှတ်တရ လက်ဝက်လက်စားများ တရုတ် အိုလံပစ်ပွဲတော်တွင် ၀ယ်ယူသုံးစွဲခြင်း မပြုရန် ဘေဂျင်း အိုလံပစ် ၂၀၀၈ ပွဲတော်ကို သွားရောက် ကြည့်ရှုအားပေးမည့် သူများကို ဆော်သြထားသည်။“ကျနော်တို့ရဲ့ တောင်တန်းတွေ ပျောက်ဆုံးပြီး ကျနော်တို့ လူငယ်တွေ သေကြေနေရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက သူတို့ရဲ့ စားဖော်စားဖက်ကြီးတွေကို ကျနော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်တွေကို လွင့်ပျောက်အောင် လုပ်နေတာ” ဟု ကချင်ပြည်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားလူငယ်များ သမဂ္ဂအဖွဲ့မှ နော်လက ပြောဆိုလိုက်သည်။ သမာဆက်တွင် မြန်မာပြည်အရေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန တနင်္လာနေ့၊ သြဂုတ်လ 04 2008 11:56 - မြန်မာစံတော်ချိန် ဘန်ကောက်။ ။ မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမို သိရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ သမာဆက် တက္ကသိုလ်တွင် မြန်မာပြည်အကြောင်း ဆွေးနွေးပွဲ တရပ်ကို ယမန်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ထိုင်းပညာရှင်များနှင့် မြန်မာအတိုက်အခံများ တက်ရောက် ပြောကြားကြပြီး အနှစ် ၂ဝ မြောက် လူထုအုံကြွမှု အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးသူအများက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးက ထိုင်းကို ရိုက်ခတ်နိုင်ခြင်းကို ဦးတည်ခဲ့ကြသည်။ “မြန်မာပြည်မှာ မတည်ငြိမ်သေးသ၍ ထိုင်းဘက်ကလည်း အန္တရာယ်ရှိနေတဲ့ သဘောမျိုးရှင်းပြတဲ့ သဘောမျိုးကို ဖော်ဆောင်တဲ့ စကားများကို ဆွေးနွေးသွားတယ်” ဟု ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ခဲ့သူ Ramkhamhaeng တက္ကသိုလ်မှ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ ဘာသာရပ်ကျောင်းသား ကိုကျော်လင်းဦးက ပြောသည်။ “မြန်မာပြည်ဟာ နှစ်၂ဝ အတွင်းမှာ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး နှင့် အစစအရာရာ ပျက်စီးသွားတယ်။ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် ဒါတွေက ပျက်စီးသွားတယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ကျန်တဲ့ နိုင်ငံ အပြောင်းအလဲကို လိုလားတဲ့ လူတွေဘက် အခုထိ ဆက်ပြီး အဖြေရှာဖို့ လိုသေးတယ်။ ၈၈ နှင့် စက်တင်ဘာ မတူတဲ့ အချက်တွေရှိတယ် ၈၈ တုန်းက ကျောင်းသားတွေ ဦးဆောင် လုပ်တဲ့အခါမှာ ဘယ်သူက လှုပ်ရှားမှုရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်တယ်။ သိနိုင်တယ်။ စက်တင်ဘာမှာတုန်းက ဆိုရင် သံဃာ တပ်ပေါင်းစုလို ဟာမျိုးက ဦးဆောင်မှုမျိုး ရှိတယ်။ နောက်တခုက နာဂစ်မှာကျတော့ တသီးပုဂ္ဂလ အလှူရှင်တွေ ပေါ်လာတဲ့ အတွက်ကြောင့် လူမှု အဖွဲ့အစည်း အသေးလေးတွေ ပေါ်လာတဲ့အတွက် မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရှေးရှုသွားနိုင်တယ်လို့ ဆွေးနွေး သွားတယ်”စင်ပြိုင် အာဆီယံအဖွဲ့နှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ထိုင်းလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ (တီအေစီဒီဘီ) တို့ ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဆွေးနွေး မြန်မာ့ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ ဒေါက်တာ Porntimol Trithobe ၊ ဒေါက်တာ သောင်းထွန်း၊ ကိုအောင်သူငြိမ်း ၊ နန်းဆိုင်နောင့်တို့ ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။သြဂုတ် ၈ ရက်နေ့ဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခင် တပါတီ အစိုးရကို နိုင်ငံအဝှမ်း ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်း အနှစ် ၂ဝ တိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ရှစ်လေးလုံး နှစ် ၂၀ ပြည့်အကြို တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ လှုပ်ရှား 04 August 2008 ဦးသိန်းထိုက်ဦး - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) ဦးသိန်းထိုက်ဦး - နားဆင်ရန် (MP3) ရှစ်လေးလုံး ၁၉ နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည် နေ့က ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ဦးဆောင်၍ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများ ကပ်လှူနေစဉ်။သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၀၆။ ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည် နီးကပ်လာချိန်မှာ ရန်ကုန်မှာ စာတွေ၊ ပိုစတာတွေကပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့၊ရွှေပြည်သာ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာရှစ်လေးလုံးကို မမေ့ကြနဲ့ဆိုတဲ့စာတွေကပ်နေတာ ရှိနေပါတယ်။ အနှစ် ၂၀ပြည့်မယ့် ရှစ်လေးလုံး လူထုအုံကြွမှုကြီးနှစ်ပတ်လည် လှုပ်ရှားမှုတွေ မပေါ်ပေါက်ရအောင် အာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ပြီး ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာပဲအခုလို စာကပ်၊ ပိုစတာကပ်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းစုံကို ဘန်ကောက်ရောက် ဗွီအိုအေ၀ိုင်းတော်သား ဦးသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့နဲ့ သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွေက ရန်ကုန်၊ ရွှေပြည်သာမှာရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသားတချို့က စာတွေကပ်ပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၂၀၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်က တတိုင်းပြည်လုံး အုံကြွခဲ့တဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကို မမေ့ဖို့ဆော်သြခဲ့ကြပါတယ်။ ကျောင်းမှာ စာတွေကပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းသားမိဘအသိုင်းအ၀ိုင်းက အခုလိုပြောပါတယ်။"အိမ်သာတွေထဲမှာလည်း ကပ်တယ်၊ ကျောင်းခန်းတွေထဲမှာလည်း ကပ်တယ်။ရှစ်လေးလုံးနေ့ တို့မမေ့ ဆိုတာကပ်တယ်။ နောက် ကျောင်းသားရှိရင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ရှိရမယ်။ ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် အနက်ရောင်ဝတ်စုံတွေ ၀တ်ကြဖို့ဆော်သြတယ်။ ၃၁ ရက်နေ့မှာ ဆရာကန်တော့ပွဲရှိတယ်။ ဆရာကန်တော့ပွဲမှာဆရာမကြီးက ကျောင်းသားတွေကို ရင်ဝယ်သားကဲ့သို့ ချစ်မြတ်နိုးကြောင်းပြောတယ်။အဲဒီမှာ ကျောင်းသားတယောက်က ဒါဆိုရင် ဖမ်းထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုတယ်။"ဒုတိယနေ့ကျတော့ အတန်းခန်းမတွေထဲမှာ သူတို့က မှုတ်ဆေးတွေနဲ့ ကလေးတွေကရေးထားတယ်။ စောစောကရေးသလိုပဲ ရှစ်လေးလုံးနေ့ တို့မမေ့၊ ကျောင်းသားရှိရင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကို မှုတ်ဆေးတွေနဲ့ ရေးထားတယ်။"ဒီလိုစာကပ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် အာဏာပိုင်တွေဘက်က လုံထိန်းကားတစင်းလွှတ်ပြီး လုံခြုံရေးတိုးချခဲ့တာမျိုးတွေ ရှိပေမယ့် တခြားလုံခြုံရေး အခြေအနေကတော့ သိသိသာသာ မရှိပါဘူးလို့ ရွှေပြည်သာတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတချို့ကပြောပါတယ်။ စာတွေကပ်ခဲ့တာကို သူတို့ မျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေကိုလည်းကျောင်းသားတယောက်က အခုလိုပြောပါတယ်။"စာက ကျောက်သင်ပုန်းမှာရေးထားတာ။ ရှစ်လေးလုံးနေ့ တို့မမေ့၊ ကျောင်းသားသဏ္ဍာန် ခွပ်ဒေါင်းဟန်တဲ့၊ အဲဒါတွေရေးထားတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ဆရာမ ၀င်တော့မော်ကွန်ထိန်းကလာပြီး တင်ဒါနဲ့ဖျက်သွားတယ်။ ဆော့ဖ်ပင်နဲ့ရေးထားတော့ဘောဖျက်နဲ့ဖျက်လို့မရဘူး၊ တင်ဒါနဲ့ လာဖျက်သွားတယ်။ သောကြာနေ့က လာရေးသွားတာ။ ကြာသပတေးနေ့က ၀ါဆိုသင်္ကန်းကပ်တယ်။ ယောက်ျားလေးအိမ်သာထဲမှာလည်း စာကပ်တယ်။ ဘုန်းကြီးတွေကို ထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ အင်္ကျီအမည်းတွေဝတ်လာကြပါလို့ ရေးထားတယ်။"ရွှေပြည်သာတက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတယောက် ပြောသွားတာပါ။ဒီလို ကျောင်းသားတွေ စာကပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချိန်က မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က လုံခြုံရေးတွေ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း အထူးတင်းကျပ်ထားပြီး နောက်ထပ်အုံကြွမှုတွေ မပေါ်ပေါက်အောင် အထူးသတိထားနေတဲ့အချိန်နဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့မတိုင်ခင် တပတ်အလိုမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာစစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်တွေက ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကိုသွားပြီး ရှစ်လေးလုံး နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ နောက်ထပ် အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုတွေ မပေါ်ပေါက်အောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့အကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံတယောက်က အခုလိုပြောပါတယ်။"ဆန်တွေ၊ ဆီတွေ၊ ဆွမ်းတွေ အကုန်ကပ်ပေါ့ဗျာ။ ကပ်ပြီးတော့ ဒီမှာ အားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့အတွက် တိုင်းမှူးကိုယ်တိုင် လိုက်ပြီးတော့ မေတ္တာရပ်ခံတဲ့သဘောအနေနဲ့ မင်္ဂလာဒုံ၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ အဲဒီမှာက ဘုန်းကြီးတော်တော်များတာကိုး။ ဒီမှာ ဘုန်းကြီးများတဲ့အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့။ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကျောင်းတွေတော်တော်များများကို တိုင်းမှူးကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီး ဆွမ်းတွေ၊ ဆန်တွေ၊လှူဖွယ် တန်းဖွယ်တွေနဲ့ လိုက်ပြီးတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံတယ်။"မနေ့ကဆိုရင် သတင်းစာထဲမှာပါတယ်။ တကယ့်တကယ်ကတော့ သံဃာအင်အားများတဲ့ကျောင်းတွေကို လိုက်ပြီးတော့ တိုင်းမှူးကိုယ်တိုင်ဝင်တယ်။ မနေ့ကဆို Escort တွေအများကြီးပဲ။ အကုန်လုံးလိုက်ပြီး ပူဇော်ဆက်ကပ်ပေါ့၊ တခါမှ မလုပ်ဘူးတာတွေလုပ်တာပေါ့။ ၀ါတွင်းကြီးမှာ အဲဒီလိုကပ်တာ ရှိမှမရှိဘဲ။"ဒီလို ရှစ်လေးလုံးနှစ်ပတ်လည်နေ့ မတိုင်ခင်မှာ ရန်ကုန်မြို့တွင်း တခြားလုံခြုံရေး အနေအထားတွေရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲလို့ မေးကြည့်တော့ ရန်ကုန်မြို့ခံကပဲ အခုလိုပြောပါတယ်။"ဒီမှာ လှည်းတန်းတို့၊ မြို့ထဲတို့၊ မင်္ဂလာဒုံတို့၊ အင်းစိန်ဘက်တို့မှာ အပြည့်ပဲ။ လုံးဝStand by အပြည့်ပဲ။ ကားကြီးတွေနဲ့၊ ဒိုင်းတွေ၊ လွှားတွေ၊ တုတ်တွေနဲ့ ချထားတာ။"လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၂၀ က ကျောင်းသားတွေ စတင်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေကနေတတိုင်းပြည်လုံး ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူတွေ ပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ အထွေထွေသပိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ က အရိပ်တွေ အခုထိခြိမ်းခြောက်ခံနေရဆဲဖြစ်ပြီး ဒီလိုသပိတ်မျိုးတွေ ထပ်ပြီးမပေါ်ပေါက်အောင် အခုလိုလုံခြုံရေးကို တင်းကျပ်ထားတာလို့လည်း ရန်ကုန်မြို့ခံတွေက သုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ အိုလံပစ်ပွဲတော်မှာ မြန်မာ့ကျောက်စိမ်းတွေ မ၀ယ်ဖို့ ကချင်ကျောင်းသားတွေ လှုံ့ဆော် 04 August 2008 ဒေါ်အေးအေးမာ - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) ဒေါ်အေးအေးမာ - နားဆင်ရန် (MP3) ကချင်တမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ 88 Burma ဆိုတဲ့အဖွဲ့တို့က တရုတ်ပြည်မှာ ရောင်းချနေတဲ့ ကျောက်စိမ်းအများစုဟာ မြန်မာနိုင်ငံထွက် သွေးစွန်းနေတဲ့ကျောက်စိမ်းတွေဖြစ်လို့ အားမပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကိုထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် မအေးအေးမာက တင်ပြပေးထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပမယ့် အိုလံပစ်အားကစားပွဲမှာ လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးမယ့်ကျောက်စိမ်းနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆုတွေ၊ ရောင်းချမယ့် လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုမ၀ယ်ယူဖို့အတွက် ကချင်တမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားလူငယ်များ သမဂ္ဂနဲ့88 For Burma အဖွဲ့ကနေ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကျောက်စိမ်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကထွက်တာဖြစ်ပြီး သွေးစွန်းနေတဲ့ ကျောက်စိမ်းတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကချင်တမျိုးသားလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားလူငယ်များ သမဂ္ဂက သုတေသီတဦးဖြစ်သူ ကိုနော်လက ကျောက်စိမ်းတွေမ၀ယ်ယူဖို့ တိုက်တွန်းရခြင်းအကြောင်းကို အခုလိုပြောပါတယ်။"သိသိသာသာဖြစ်တာက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်ကစပြီး တရုတ်ပြည်က ဘေဂျင်းအားကစားပွဲတော်ကို ဦးတည်ပြီး ၀ယ်ယူမှုတွေ အားကောင်းတယ်။ ကျောက်စိမ်းတွေကလည်း မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ ကျောက်စိမ်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက် အလုအယက်ဝယ်ယူကြတယ်။"ကျောက်စိမ်းတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်၊ လုံးခင်း၊ တောမှော် စတဲ့နေရာတွေကထွက်ပြီး ကျောက်စိမ်းတူးဖော်မှုကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ ရှိတာကြောင့် အခုလို သပိတ်မှောက်ဖို့ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်း ကိုနော်လက ဆက်ပြောပါတယ်။"လယ်မြေတွေသိမ်းတယ်၊ ရွာတွေကို အတင်းအဓမ္မ ရွှေ့ပြောင်းတာမျိုး သူတို့လုပ်တယ်။ပြီးတော့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဆုံးရှုံးပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်တယ်။ ရေကြောင်း၊မြစ်ကြောင်းတွေပြောင်းလဲပြီး ရေကြီးမှုက နှစ်တိုင်း ကျနော်တို့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။ ကျောက်စိမ်းကောက်တဲ့ ဒေသခံပြည်သူဆိုရင် သူတို့ခွင့်ပြုချက်မပေးတဲ့နေရာမှာ ကောက်မိတယ်ဆိုရင် သူတို့ ပစ်သတ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဘာမှအရေးယူခြင်းမရှိဘူး။ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ လျစ်လျူရှုထားလိုက်တယ်။"ကျောက်စိမ်းတူးဖော်တဲ့ဒေသဟာ မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု အဆိုးဆုံးဒေသဖြစ်သလို အဲဒီဒေသမှာ ပြည့်တန်ဆာတွေများပြီး အိပ်ခ်ျအိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်စ်ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကလည်း အများအပြား ရှိနေတာကြောင့် လူမှုရေးအရ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း အခြေအနေဆိုးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေအပြင်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေသာမက ဒီကျောက်စိမ်းကြောင့်ပဲ စစ်အစိုးရက အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေတာကြောင့်လည်း ကချင်ကျောင်းသားတွေက အစီရင်ခံစာတခုထုတ်ပြီးအခုလို တိုက်တွန်းရတာဖြစ်ကြောင်းလည်း ဆက်ပြောသွားပါတယ်။"လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေ လုံးဝဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေ။ဒီကျောက်စိမ်းတူးဖော်ခြင်းကြောင့် ရရှိတဲ့ အကျိုးစီးပွားဟာလည်း နအဖနဲ့ သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေပဲ အဓိကရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျနော်တို့က မ၀ယ်ဖို့၊ မယူဖို့တောင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။"ကျောက်စိမ်းကို အဓိက၀ယ်ယူအားပေးနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာကိုလည်း အခုလိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။"မြန်မာနိုင်ငံက ထွက်ရှိတဲ့ကျောက်ကို အဓိက၀ယ်ယူနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကို ကျနော်တို့ အဓိကပြောချင်တာကတော့ မြန်မာပြည်ကထွက်တဲ့ကျောက်ကို မ၀ယ်ပါနဲ့။ ဒါဟာ စစ်အစိုးရကို ထောက်ပံ့ပြီး ပြည်သူတွေဟာ ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းမှု ရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေကလည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမှာပဲဆိုတာ ကျနော်တို့ ပြောချင်ပါတယ်။"သွေးစွန်းသောကျောက်စိမ်းများလို့ အမည်ရတဲ့ အစီရင်ခံစာဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ရင်းနှီးပေးဆပ်ထားတဲ့ ကျောက်စိမ်းတွေကို တရုတ်အိုလံပစ်အားကစားပွဲမှာ မ၀ယ်ယူဖို့အတွက်၊ သပိတ်မှောက်ဖို့အတွက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး အထူး ကိုယ်စားလှယ် လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ အန်န်အယ်လ်ဒီ တိုက်တွန်း 04 August 2008 ဦးအောင်လွင်ဦး - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) ဦးအောင်လွင်ဦး - နားဆင်ရန် (MP3) ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်သစ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပထမဆုံး ခရီးစဉ် ပထမဆုံးနေ့အဖြစ် လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ရန်ကုန်မြို့မှာ ရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရုံးက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အထူးကိုယ်စားလှယ် တွေ့ဆုံလိုသူတွေ အားလုံးနဲ့ သွားရောက်လိုတဲ့ နေရာတွေကို သွားခွင့်ရမယ်၊ မရဘူးဆိုတာကတော့ မရေမရာဘဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ အကြောင်းစုံကို ကိုအောင်လွင်ဦး က တင်ပြ ပေးထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေ တွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အဖြစ် ရောက်ရှိနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် တောမတ်စ် အိုဟဲယား ကင်တာနား (Tomas Ojea Quintana) က သူ့ရဲ့ ပထမနေ့ ခရီးစဉ်မှာ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး အသင်းအဖွဲ့က တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ ဒီကနေ့ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂရုံး ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးအေးဝင်းကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းကြည့်ပါတယ်။"မစ္စတာကင်တာနား ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာအသင်းနဲ့ သံဃာ့ မဟာနာယက အကျိုးတော်ဆောင်ချုပ်တို့နဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်။"ကုလသမဂ္ဂရုံး ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးအေးဝင်းကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အထဲမှာ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တခုဖြစ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီးရေးရာအသင်း၊ နောက် သံဃာ့မဟာနာယကအဖွဲ့နဲ့ တခြား မူဆလင်၊ ခရစ်ယာန် စတဲ့ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်တာကြောင့် ဘာတွေဆွေးနွေးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့ မသိနိုင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။အခုခရီးစဉ်အတွင်း ဒီလို အသင်းအဖွဲ့တွေအပြင် အထူးကိုယ်စားလှယ်က အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံလိုတယ် ဆိုပြီးတော့လည်း အစောပိုင်းမှာ ပြောဆိုထားတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီလို သူတွေ့လိုတဲ့လူတွေနဲ့ တွေ့ခွင့်ရမယ်၊ မရဘူး ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့တော့ ရန်ကုန်ကုလသမဂ္ဂရုံးကတိတိကျကျ ပြောနိုင်တာမျိုးတော့ မရှိသေးပါဘူး။အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ တွေ့ဆုံဖွယ်ရာရှိတယ်လို့ မျှော်လင့်ရတဲ့ အဓိက အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးပါတီကြီးတခုဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်န်အယ်လ်ဒီ) ပါတီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းကတော့ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီထက်ပို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တွေ့ဆုံသင့်သူတွေ ရှိနေသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။"ကျနော်တို့အယူအဆအရတော့ လွတ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တွေ့သင့်တယ်။ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့၊ အုပ်ချုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုရင် လွတ်လပ်မှုမှမရှိဘဲ။ လွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ရင်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်စားလှယ်ကြီး သိချင်တာတွေ သိရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရနဲ့ ကင်းကွာတဲ့၊ အစိုးရလက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ပိုမိုတွေ့သင့်တယ်လို့ ကျနော်ယူဆပါတယ်။"အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ မျှော်လင့်ထားတဲ့ အန်န်အယ်လ်ဒီပါတီအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူတို့ဘက်က ပြောဆိုဖို့ပြင်ဆင်ထားတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေတာ သက်တမ်းပြည့်ပေမယ့်ဆက်ပြီး ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကိစ္စလည်း ပါဝင်ဖို့ရှိတယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။"ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ မစ္စတာပင်ညဲရိုး (Mr. Pinheiro) တုန်းကလည်း တွေ့ခဲ့ကြတော့ အခုလည်း တွေ့ခွင့်ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားတယ်။ အဲဒါကြောင့် တွေ့လို့ရှိရင်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တဲ့ဟာတွေကတော့ အများကြီးပေါ့၊ အဲဒီအထဲကမှဘယ်အချက်တွေကို ပြောသင့်တယ်ဆိုတာမျိုးတော့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကကြိုတင်စီစဉ် စဉ်းစားထားပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်မှာ အများကြီးပဲ။ ဒီအထဲက အရေးကြီးတဲ့ဟာ၊ လတ်တလော ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ဟာတွေကို ဦးစားပေးပြီး ဆွေးနွေးမှာပါ။"ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုနောက်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မှာ တိုးချဲ့တဲ့အမိန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ ဒီနေ့ ကြေညာချက်လည်းထုတ်တယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလ ၃၀ ရက်က ထိန်းသိမ်းထားတာ ၅ နှစ်လည်းကျော်သွားပြီ။ ဥပဒေအရ ၅ နှစ်ကျော်သွားတာကို ဆက်ပြီးထိန်းသိမ်းခြင်းဟာလည်း ဥပဒေနဲ့မညီဘူး။ အခြားဥပဒေနဲ့ မညီတာတွေလည်းရှိတယ်။ဒီလို ဥပဒေနဲ့ မညီတာတွေအတွက်ကို အယူခံတင်ပြီး လျှောက်လဲဖို့ ကျနော်တို့ ပြင်ဆင်ထားတယ်။"သို့သော်လည်း ထိန်းသိမ်းတဲ့ ဗဟိုအဖွဲ့ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် အယူခံနိုင်ရေးကို အကြောင်းကြားစာပို့တယ်။ အကြောင်းမပြန်ဘူး။ တခါထပ်ပြီး နှိုးဆော်စာပို့တယ်။ အဲဒါလည်း အကြောင်းမပြန်ဘူး။ အဲတော့ ကျနော်တို့က ဒီနေ့ကြေညာချက်မှာပြောတာ ဒီအယူခံခွင့် အခွင့်အရေးဆိုတာ အဲဒီဥပဒေမှာ ပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေး။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဂိုမူလကတည်းက ရရှိတဲ့အခွင့်အရေး။ ဒီလို အယူခံကိုငြင်းပယ်ခြင်းဟာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခြင်းပဲလို့ ကျနော်တို့ ပြောပါတယ်။နောက်တခုက အာဏာပိုင်တွေ အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး၊ ဒါနဲ့လည်းဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုပြီး ကျနော်တို့ ဒီနေ့ ကြေညာချက်ထုတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ခွင့်ရရင်လည်း ဒီဟာကို ကျနော်တို့ ဥပဒေအရ တင်ပြမယ်။"ဒီလို လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေ လုပ်မယ်ဆိုရင် ချန်ထားလို့မဖြစ်တာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံက အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာအကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိစ္စလည်း ပါတယ်လို့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတွေ၊ အကျဉ်းသားမိသားစုဝင်တွေကလည်း ဆိုနေကြပါတယ်။ဒီအထဲမှာ ဆိုင်ကလုန်း လေဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေ လုပ်နေရင်း ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ နိုင်ငံကျော် လူရွှင်တော် ဒါရိုက်တာ စွယ်စုံအနုပညာရှင် ကိုသူရ ခေါ် ကိုဇာဂနာကိုဒီကနေ့ပဲ ရန်ကုန် အင်းစိန်ထောင်မှာ ထောင်ဝင်စာ သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အစ်ကိုဖြစ်သူ ကိုတေဇလည်း ပါပါတယ်။ "ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးအနေနဲ့ ကိုသူရတို့အားလုံး အထဲထဲမှာ ကျနေတဲ့လူတွေ၊သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးက ဦးဆောင်ပြီးတော့ လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဆန္ဒကတော့ အဲဒီလိုပဲရှိပါတယ်။ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အထဲကအကျဉ်းသားတွေအားလုံး၊ ကိုသူရ အပါအ၀င် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အများကြီးရှိပါတယ်၊ ကိုမင်းကိုနိုင်တို့လည်း ရှိပါတယ်။ အားလုံးကို ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးကတွေ့ပြီး သူတို့လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် လုပ်ပေးဖို့လည်း ကောင်းပါတယ်လို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။"လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေတွေ စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ ရောက်နေတဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာ ကင်တာနားကလည်း အခုလို လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ ကိုဇာဂနာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ဖမ်းဆီးထားတာ အပါအ၀င် မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အစောပိုင်းမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်ထားတာလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ကြီးဖြစ်တဲ့ AmnestyInternational က နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတာ၊ နောက်မြန်မာစစ်အစိုးရက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ကတိတွေသာ ပေးနေတာကို ကုလသမဂ္ဂဘက်က လက်ခံနေဖို့ မသင့်ဘူးဆိုပြီးတော့လည်း ဒီကနေ့ပဲ ကြေညာချက်တစောင် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါသေးတယ်။ အိန္ဒိယ ဟိန္ဒူ ဘုရားပွဲတွင် လူပိပြီး အများအပြား သေဆုံး 04 August 2008 အပြည့်အစုံ - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) အပြည့်အစုံ - နားဆင်ရန် (MP3) နှစ်စဉ် ကျင်းပမြဲ ဟိန္ဒူ ဘုရားပွဲတော်မှာ လူတွေ ကြပ်ညပ်ပြီး လူ ၁၅၀ သေဆုံး၊ အနည်းဆုံး ၄၈ယောက် အနာတရ ရရှိသွား ကြတယ်လို့ အိန္ဒိယ နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Himachal Pradesh ပြည်နယ် အာဏာပိုင်တွေက ဆိုပါတယ်။ ကျဉ်းမြောင်းလှတဲ့ တောင်တက်လမ်း တလျှောက် တပ်ဆင်ထားတဲ့ သံ လက်ရမ်းဟာ လူတွေရဲ့ အားကြောင့် ပြုတ်ထွက် သွားခဲ့တဲ့အခါမှာ စိတ်မကောင်းစရာ ဖြစ်ရပ် တနင်္ဂနွေနေ့က ဖြစ်ပွါးခဲ့ရတာပါ။ လူတွေက လုံခြုံရာကို ပြေးကြတဲ့အခါ မြေပြိုတယ်ဆိုတဲ့ ကောလဟာလကြောင့် တိုက်မိခိုက်မိ တက်နင်းမိကြပါတယ်လို့ အရာရှိ တွေက ပြောပါတယ်။ ရာသီဥတု ဆိုးဝါးနေတာကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေး အလုပ်တွေ လုပ်ရပို ခက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ရဲက ကြိုးတန်း ကားငယ်တစ်စီးကို အသုံးပြုပြီး၊ သေဆုံးသူတွေနဲ့ အနာတရ ဖြစ်သွားသူတွေကို အောက်ကို သယ်ချပေးခဲ့ရပါတယ်လို့ အရာရှိတွေက ဆိုကြပါ တယ်။ ဒဏ်ရာရသူတွေကို ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ နီးရာ ဆေးရုံကို အမြန်သယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ ဒီ အဖြစ်အပျက်က Bilaspur ခရိုင်၊ ကိုးရက်ပွဲတော်ရက် အတွင်း ဒုတိယ နေ့ မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့တာပါ။ ရုရှား စာရေးဆရာကြီး ဆိုဇင်နစ်ဇင် ကွယ်လွန် 04 August 2008 အပြည့်အစုံ - အစီအစဉ်ကိုရယူရန် (MP3) အပြည့်အစုံ - နားဆင်ရန် (MP3) နိုဘယ်ဆုရ ရုရှား စာရေးဆရာကြီး အလက်ဇန်းဒါး ဆိုဇင်နစ်ဇင်ဟာ အသက် ၈၉ နှစ် အရွယ်မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါပြီ။ ဆိုဗီယက် အစိုးရ ကို ဝေဖန်ရေးသားခဲ့မှုကြောင့် စာရေးဆရာကြီးဟာ ဆိုဗီယက် ခေတ်အတွင်း ပြည်ပမှာ အဝေးရောက် နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ နှလုံးရောဂါနဲ့ သေဆုံးတယ်လို့ သူ့သားက ဆိုပါတယ်။ ရုရှား သတင်းစာတွေကတော့ လေဖြတ်တဲ့ ရောဂါကို စာရေးဆရာကြီး ခံစားနေခဲ့ရတယ်လို့ ရေးကြပါတယ်။ ဆိုဇင်နစ်ဇင်ဟာ ဆိုဗီယက် ယူနီယံမှာ ဆင်ဆာ ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ ဘ၀ သင်္ကေတ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၁၈ မှာ မွေးခဲ့ပြီး၊ ရုရှား တက္ကသိုလ်မှာ သင်္ချာပညာ လေ့လာခဲ့ပါတယ်။ စတာလင်ကို ဝေဖန်တဲ့ ပေးစာ ရေးခဲ့တဲ့ အတွက် ၁၉၄၅မှာ ထောင် ၈နှစ် ချခံရပြီး၊ ကာဇက်စတန်ကို နယ်နှင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရဲဘက် စခန်းအတွေ့အကြုံကို ရုရှား ပြန်ရောက်တဲ့အခါ၊ ၀တ္ထုရေးသားခဲ့ပြီး ၁၉၆၂မှာ ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ၀တ္ထု ကတော့ One Day in the Life of Ivan Denisovich ၀တ္ထုဖြစ်ပါတယ်။ The Gulag Afchipelago ၀တ္ထုကိုတော့ အနောက်နိုင်ငံမှာ ထုတ်ဝေခဲ့ရပါတယ်။ ၁၉၇၀မှာ နိုဘယ်ဆုရခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၉၄မှာ ရုရှားကို သူ ပြန်သွားခဲ့ပြီး၊ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Summary only...